(No. 64 , October 9, 2020)
၁။ ကျောက်မဲတိုက်ပွဲ အစိုးရတပ် စစ်ရဟတ်ဖြင့် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်
၂။ RCSS အန္တရာယ်ပြုမည်ကို စိုးရိမ်၍ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရပ်ဆိုင်းထား ဟု TNP ပြော
၃။ မိုးကောင်းမြို့နယ် စာသင်ကျောင်းမြေတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်ကိစ္စ ဒေသခံတချို့ ကန့်ကွက်
၄။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသမီးကို အနိုင်ရနိုင်သည့်နေရာမျိုးထက် ဟန်ပြပြိုင်ခိုင်းခြင်းမျိုးတွေ့ရဟု WLB ပြော
၅။ ကျောက်မဲ တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ရှောင် ၃၀၀၀ ဝန်းကျင် ထိရှိလာ
၆။ ပူတာအိုခရိုင်၌ မဲဆန္ဒရှင် ၆၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲထက်ပိုများလာ
၇။ ကျောက်ကြီးတွင် KPP အင်အားထောင်ချီ လှည့်လည်မဲဆွယ်
၈။ ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ဆန်ပြတ်လပ်ဟုဆို
၉။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နာဂ အမျိုးသားပါတီ
၁၀။ အမတ်တစ်ဦးကို တရားစွဲမယ်လို့ ကယားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ပြော
၁၁။ ထိုင်းရောက် ကရင်တိုင်းရင်းသား သုံးထောင်ကျော် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ ပေးသွားမည်
၁၂။ ပြည်လုံးကျွတ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် “ဖယ်ကြဉ်မရှိမှ လွတ်မျှတ” အစီရင်ခံစာကို မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေး ဖောင်ဒေးရှင်းထုတ်ပြန်
၁၃။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာလ ဖြစ်သည့်အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းရာတွင် အခက်အခဲများတွေ့ကြုံနေရဟု မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ပြောကြား
၁၄။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး RCSS/SSA ထိန်းချုပ်သည့် ကျေးလက်များအတွင်း ပြင်ပလူဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မပြု
၁၅။ ဗန်းမော်ခရိုင်တွင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ၈၀၀၀ ကျော်တိုးလာ
၁၆။ ဒေသတွင်း တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မွန်၊ ပအိုဝ်းနှင့် ကရင် လူငယ်များ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့
၁၇။ မိုင်ရွှေလှေတီာလ် ရုပ်အလောင်း လမ်းဘေးမြေမြုပ်ခိုင်းမှု သက်ဆိုင်သူများကို ထိရောက်စွာအရေးယူရန် ချင်း ကျောင်းသား/လူငယ် (၁၃) ဖွဲ့ကတောင်းဆို
၁၈။ တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ရန် အရပ်ဘက်အဖွဲ့များနှင့် ဒေသခံများ တောင်းဆို
၁၉။ ရွှေကုက္ကိုလ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် တပ်အရာရှိကြီးတချို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရ
၂၀။ ဘီးလင်းတွင် ကျေးရွာ ၅ ရွာက ပြည်သူ ၁၀၀၀ ခန့် မဲပေးခွင့်မရ
၂၁။ ချင်းမှာ ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနဲ့ နောက်လိုက်တွေ ကိုဗစ် စစ်ရမည်
၂၂။ မိုးညှင်းခရိုင်တွင် မသန်စွမ်းများ မဲပေးရန် မဲရုံပေါင်း ၁၄၀ ရှိ
၂၃။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက ရန်ကုန်တွင် ၆ နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
၂၄။ ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မဲဆွယ်ဆိုင်းဘုတ်များကို မြို့နယ်စည်ပင်က COVID-19 အကြောင်းပြချက်ဖြင့် စိုက်ထူခွင့် မပေးဟု UNDP ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပြောကြား
၂၅။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် အေအေ တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ ဒေသခံများ ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
၂၆။ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်အတွက် မဲရုံသုံးပစ္စည်းများကို ရဟတ်ယာဉ်နှင့် လား ဖြင့် ပို့ဆောင်မည်
၂၇။ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပ မဲပေးခွင့် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား လျှောက်ရမည်
၂၈။ ဗန်းမော်ခရိုင်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသုံးခုတွင် မဲရုံဖွင့်ရန်လျာထား
၂၉။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မွန်လူငယ်များ ဘိန်းစာရွက်သုံးစွဲမှုပိုများလာ
၃၀။ မြ၀တီမြို့ရှိ ကိုဗစ်လူနာ (၃) ဦး ရောဂါပျောက်ကင်း၍ ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရသော်လည်း အမှုဆက်ရင်ဆိုင်ရမည်
၃၁။ ရှဒူးဇွပ်ချောင်းရှင်းလင်းမှုကို ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ဒေသခံများပြော
၃၂။ စစ်တွေတွင် ကိုဗစ်ဖြင့် ကျေးလက် လမ်းဦးစီးဌာန ညွန်မှူး ၁ ဦး သေဆုံး
၃၃။ ရိုဟင်ဂျာကလေးနှစ်ဦးသေဆုံးမှု တပ်နဲ့ဒေသခံ ပြောဆိုချက် ကွဲလွဲ
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်မတော်မှ စစ်ရဟတ်ယာဉ်သုံးပြီး လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ အစိုးရတပ်မတော်သည် ယမန်နေ့ (အောက်တိုဘာ ၇)ရက် နေ့လည် ၁ နာရီဝန်းကျင်တွင် စစ် ရဟတ်ယာဉ် ၂ စင်းဖြင့် တပ်မတော်သားများအတွက် ရိက္ခာနှင့်အင်အားဖြည့်တင်းချင်ပေးပြီး အပြန်လမ်းတွင် ရဟတ်ယာဉ် ပေါ်မှ လက်နက်ကြီးပစ်ချခဲ့ကြောင်း RCSS/SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြော သည်။“ မနေ့က ရဟတ်ယာဉ် နဲ့ ၂ စီးလာတယ်။ နောက် လက်နက်လာပစ်သွားတယ်။ အဲ့နေရာက ကျနော်တို့မနေဘူး။ သူတို့က ပြည်သူတွေကို ထိတ်လန့်အောင်လုပ်နေတာ။ ပြည်သူတွေ ထွက်ပြေးအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပါ”ဟု ဒုဗိုလ်မှူး ကြီး အုမ်ခေး က ပြောသည်။
ယမန်နေ့ စစ်ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှ ပစ်ချလိုက်သည့် လက်နက်ကြီးသည် တောပိုင်းတွင်မကျဘဲ ရွာ နှင့်မလှမ်းမကမ်းနေရာတွင် ကျသဖြင့် အမျိုးသမီးတဦး လက်နက်ကြီးကျည်စ အနည်းငယ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။“မနေ့က ကျတဲ့ လက်နက်ကြီးက လူနေတဲ့အိမ်နဲ့ နည်းနည်းဝေး ကျတယ်။ လက်နက်ကြီးကျလို့ စင်လာတဲ့ ကျောက်ခဲက အမျိုးသမီးတဦး ကိုထိတာပါ။ ကျောက်ခဲစထိတဲ့ဒဏ်ရာပါ။ မပြင်းထန်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ သွားခေါ်တာတောင် လိုက်မလာဘူး”ဟု ကမ်းလင့် လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း (နောင်ပိန်) မှ ဥက္ကဌ စိုင်းနေအောင်က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ ထိုစဉ်က အစိုးရတပ်မတော်သည် စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် စစ်အင်အား (၁၀၀)ကျော်အား ကျောက်မဲမြို့နယ် ပုံဝိုးကျေးရွာအရှေ့ဘက် တောင်ကုန်းပေါ်တွင် လာရောက်ဖြည့်ဆည်းချပေးခဲ့ပြီး၊ အပြန်တွင် လက်နက်ကြီးပစ်ချခဲ့သည်ကို စစ်ရှောင် များကလည်း မြင်တွေ့ကြောင်း သိရသည်။
“ ရဟတ်ယာဉ် ၂ စီးနဲ့ စစ်သားတွေလာချတာ မြင်ရတယ်။ ကျနော်တို့ နေတဲ့စစ်ရှောင်နဲ့နီးတယ်။ အပြန်လက်နက်ကြီး ပေါက်ကွဲတဲ့အသံလည်းကြားရတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ နေနေရတယ်”ဟု ပုံဝိုးကျေးရွာ ဘုန်းကြီး ကျောင်းတွင် စစ်ဘေးရှောင်လာသည့် အမျိုးသားတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ အောက်တိုဘာ ၂ရက်မှ စတင်ကာ အစိုးရတပ်မတော်သည် (RCSS/SSA) လှုပ်ရှားသည့်နေရာကို လာရောက် ရှာဖွေ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကို လက်ရှိဖြစ်ပွားနေ သည့် တိုက်ပွဲအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန မှ အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း မရရှိခဲ့ပေ။ https://burmese.shannews.org/archives/ 18800
ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS/SSA) ဘက်မှ အန္တရာယ်ပြုမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင် ပိုင်း၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရကြောင်း မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ တအာန်း (ပ လောင်) အမျိုးသားပါတီ (TNP) ၊ ဥက္ကဋ္ဌ မိုင်းနုမ်ဟန်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ မိုင်းနုမ်ဟန်က “ကျနော်တို့ မိုင်းကိုင်မှာ မဲဆွယ်ရတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိဖို့ လုံးဝ အဆင်မပြေပါဘူး။ ကျနော်တို့ လူထု ရွာသူရွာသားတွေလည်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းမယ့် လမ်းကိုပဲ ရွေးတဲ့အနေနဲ့၊ ကျနော်တို့ အန္တရာယ်မကြုံပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို တွေးပြီး မဲဆွယ်တာကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာပါ။ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်ကတည်းက စည်းရုံးရေး ဆင်းတာကို ရပ်လိုက်ရပါ တယ်။ အဓိကကတော့ RCSS ဘက်က အန္တရာယ်ပြုမှာကို စိုးရိမ်လို့ပါ”ဟု ပြော သည်။
TNP ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆင်းရန် ကျေးရွာများသို့ သွားရာတွင် COVID -19 ရောဂါ ကြောင့်ဟု အကြောင်းပြကာ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ လမ်းများ ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၊ TNP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲလာ ဆွယ်သည်ကို လက်ခံပါက ကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌများမှ ဒဏ်ငွေ ၁၀ သိန်း ပေးရမည် ဟု စာပို့ပြောဆိုထားခြင်းများအပြင် လမ်း ခရီးတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ လုံခြုံရေးကို အာမ မခံနိုင်ပါဟု ပြောဆိုမှုများ ရှိသဖြင့် မဲဆွယ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။ “ကျားခေါင်း (SNLD) ဆိုလည်း ရွာတိုင်း သွားလာရေး လွတ်လပ်တယ်။ ကျနော်တို့ ပါတီကိုပဲ ဘာလို့ အဲဒီလို လုပ်လဲ စဉ်းစားမရပါဘူး။ မိုင်းကိုင်မှာ တိုင်းရင်းသားအများစုက ရှမ်းနဲ့ပလောင်ပဲ ရှိပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကို အကြောင်းပြု တယ် ဆိုပေမယ့် အစိုးရပိုင်းက လမ်းတကြောလုံးမှာ လမ်းမကြီး စစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ စမ်းသပ်မေးမြန်း တာ ရှိတယ်။ ရောဂါ မရှိရင် သွားလာလို့ ရတယ်။ RCSS ကျတော့ လုံးဝကို အကြမ်းသမားနည်းနဲ့ ရွာထဲမှာ အိပ်၊ ရွာထဲမှာ စားပြီး စောင့်တာ၊ တရွာကို ၁၀ ပေါက် ရှိရင် ၁၀ ပေါက်လုံး စောင့်နေတာ။ လုံးဝကို မတရားပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
TNP ပါတီသည် မိုင်းကိုင်မြို့နယ်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၊ ပြည်နယ်လွှတ် တော် မဲဆန္ဒနယ် (၁) နှင့် (၂) တို့တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄ ဦး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ၄ ဦးက မဲဆွယ်စည်းရုံးရန် ၎င်းတို့က မဲဆန္ဒနယ်မြေများ အတွင်းမှ ရွာပေါင်း ၉၀ ကျော်ကို စည်းရုံးရေးဆင်း ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ရွာ ၃ ရွာသာ သွားနိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.com /election-2020 /2020/10/06/231141.html
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ လွယ်လင်ယာန်အုပ်စု ကျေးရွာတွင် ပြည်သူပိုင်စာသင်ကျောင်း မြေဧရိယာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ရန်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုရှိနေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါကိစ္စကို အမြန်ဖြေရှင်းပေးရန် ဒေသခံ ၃၀ ကျော်က အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီခန့်က ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
မိုးကောင်းမြို့မှ ၄ မိုင်ခန့်သွားရသည့် လွယ်လင်ယာန်မြို့ဟောင်းကျေးရွာ ကျောင်းမြေနေရာ ၁၀ ဧက၏ ထက်ဝက်ခန့်ကို ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူး ဦးဝင်းကြိုင်က ဦးဆောင်ပြီး သာသနာမြေပိုင်အဖြစ် ခြံစည်းရိုး ကာလိုက်သောကြောင့် ကန့်ကွက်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဦး Hkangda Tu Ring က ယခုလို ပြောဆိုသည်။“အခုဒီမြေနေရာက ရွာစတင်တည်ရှိကတည်းက ပြည်သူပိုင် ကျောင်းမြေနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ အခုလည်းအဲမှာ ကျောင်းဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါကို အခု လက်ရှိ ရာအိမ်မှူးက သာသနာပိုင်နယ်မြေအဖြစ် ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်နေတယ်။ အခုကမြေဧက တစ်ဝက်လောက်မှာ ခြံစည်းရိုးတွေကာထာတယ်။ ဒေသခံတွေက ဒါကိုလုံးဝ သဘောမတူဘူး။ အများပိုင်ကျောင်းနယ်မြေလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြေနေရာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းလည်း ကျူးကျော်လို့မရဘူး”ဟု ပြောဆိုသည်။
ကျောင်းပိုင်မြေနေရာတွင် မူလတန်းကျောင်းဖွင့်ရန် ကျောင်းဆောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားပြီဖြစ်သော်လည်း ကျေးရွာ၏ အနေအထားအရ ငွေကြေးခက်ခဲမှုကြောင့် ကျောင်းမဖွင့်နိုင်သေးသည့်အပြင် ကျောင်းတက်မည့် ကျောင်းသားဦးရေ နည်းပါး နေသည့်အတွက် ကျောင်းမဖွင့်နိုင်သေးပဲ ရပ်နားထားဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ကျောင်းနယ်မြေတွင် စတင်ဝင် ရောက်ကျုးကျော်လာအချိန်ကတည်းက တားမြစ်ခဲ့သော်လည်း လိုက်နာမှုမရှိကြောင်း လွယ်လင်ယာန်ကျေးရွာ အပါအဝင် ကျေးရွာအုပ်စု ၅ ခု၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦး Gum Ja Naw က ယခုလို ပြောဆိုသည်။
“အခုက အများပြည်သူပိုင်တဲ့စာသင်ကျောင်းဝန်းဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆေးပေးခန်းတို့၊ အစိုးရုံးတို့က လိုအပ် ရင်က အသုံးပြုလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်သီးခြား ဘာသာရေးကျောင်းတွေက မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမှ အသုံးပြုလို့မရဘူးလို့ တားမြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲလိုကန့်ကွက်နေတဲ့ကြား သူတို့က ၅ ဧကလောက်ကို ခြံစည်းရိုးတွေကာပြီး သိမ်းယူဖို့ လုပ်နေတယ်။ ထွေအုပ်ရုံကိုလည်း စာတင်ပြထားတယ်။ လိုက်နာမှုမရှိဘဲ ဆက်လုပ်တော့ အငြင်းပွားမှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။ ဒေသခံများ တောင်းဆိုခဲ့သည့်အပေါ် မြေယာကျူးကျော်မှုကို ဖျက်သိမ်းခိုင်းထားပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါက မြို့နယ် ထွေအုပ်ရုံးမှ တရားဥပဒေနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦး Gum Ja Naw က ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ သည်။ https://burmese.kachinnews.co m/2020/10/08/%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသမီးများကို အနိုင်ရနိုင်သည့် မဲဆန္ဒနယ်မြေများထက် ဟန်ပြပြိုင်ခိုင်းခြင်းမျိုးများ တွေ့ရ သည်ဟု အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)-WLB ၏ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး-၂ လွေးပိုးငယ် က ပြောသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)က ထုတ်လွှင့်မည့် “၂၀၂၀ စိန်ခေါ်သံများ” အငြိမ့်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် အွန်လိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သူမက ယခုလို မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ ဒီ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နေရာတွေမှလည်း တချို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဆိုလို့ရှိရင် မြင်ရတာက အမျိုးသမီးတွေကို မူအရထည့်ထားတာပဲ ရှိတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာ အမျိုးသမီးတွေ အောင်နိုင်မဲ့ နေရာမှာ ထည့်ထား တာမရှိဘူး။ ဟို ဟန်ပြ ထည့်ထားတာမျိုးတွေ အများကြီးမြင်တွေ့နေရတာကို ကျမတို့ ဖော်ပြထားတာပေါ့နော်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယခုလို အခြေအနေမျိုးသည် ပါတီကြီးများတွင်လည်းတွေ့နိုင်သလို တိုင်းရင်းသားပါတီများတွင်လည်းရှိ ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများတွင် အခွင့်အလမ်းနည်းသည့်အတွက် လာပြိုင်ရန် စည်းရုံး ရခြင်းမျိုးလည်းရှိ သည်ဟု ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး-၁ နန့်ခင်အေးဦးက ပြောသည်။
“ ဆရာမကိုတော့ နိုင်ခြေရှိလို့ပါတီက လက်မလွှတ်ပဲ ဝင်ပြိုင်ခိုင်းတာ။ တချို့အမျိုးသမီးတွေကျတော့ ပြိုင်ချင်တယ်ဆို တော့ အတွေ့အကြုံရအောင် ပေးပြိုင်ရတာပဲ။ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေမှာတော့ အနစ်အနာခံနိုင်ဖို့ အဓိကလိုတယ်” ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နန့်ခင်အေးဦး က မှတ်ချက်ပြုပြော သည်။ WLB က ထုတ်လွှင့်မည့် ၂၀၂၀ စိန်ခေါ်သံများအငြိမ့်တွင် အမျိုးသမီး လူရွှင်တော်များက ဦးဆောင် တင်ဆက်ထားပြီး လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများ၊ အမျိုးသမီးများကို စစ်ဘေးရှောင်နေရမှု၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသမီးအမတ်များကို ပိုမိုမဲပေးရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ http://kicne ws.org/2020/10/%e1%80%b1%e1%82%90% e1%80%bc%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် အတွင်း RCSS/SSA နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ရှောင် ၃၀၀၀ ဝန်းကျင် ရှိလာကြောင်း လူမှုပရဟိတအဖွဲ့များထံစုံစမ်းသိရသည်။ ကျောက်မဲမြို့နယ် အတွင်း အောက်တိုဘာ ၂ ရက် ကစပြီး ယနေ့ အချိန်ထိ အစိုးရတပ်မတော်နှင့် သျှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်( RCSS/ SSA) တို့သည် တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးသဖြင့် စစ်ရှောင်များလည်း တိုးလာနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ ကျောက်မဲမြို့နယ် ပုံဝိုးကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စစ်ရှောင် (၇၀၀)ကျော်၊ တောင်ထိပ် တွင် (၇၀၀)ကျော်၊ နားဆောင်ရွာ တွင် ၁၀၂ ဦး၊ နောင်ကွမ်ရွာတွင် ၁၀၀ ဦး၊ နမ့်ဟန်ခိန်ရွာတွင် ၄၀၀ ကျော် ၊ ကွမ်ဟင်ရွာ တွင် ၄၀၀ ကျော်နှင့် ကောင်းလန်းရွာတွင် (၂၀၀)ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း ကျောက်မဲမြို့စစ်ရှောင်ကော်မတီမှ သိရသည်။“စစ်ရှောင်တွေ များလာရင် တော့ နေဖို့နဲ့စားသောက်ဖို့ခက်ခဲမယ်။ အခုရင်ဆိုင်နေရတာကတော့ အိမ်သာကိစ္စပါပဲ။ ကျနော်တို့အမြန်ဆုံး အိမ်သာတွေ တူးပေးနေရတယ်”ဟု ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း (နောင်ပိန်)မှ ဥက္ကဌ စိုင်းနေအောင် က သျှမ်းသံတော် ဆင့်ကိုပြောသည်။ လတ်တလောအခြေအနေအရ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် အစားအသောက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေ ကြောင်း၊ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပါက စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် စားနိပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲလာနိုင်ကြောင်း စိုင်းနေအောင် က ပြောသည်။“ တောင်ထိပ်မှာ ရှိတဲ့ စစ်ရှောင် ၇၀၀ ကျော် အတွက် အခုစားသောက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။ ကျနော် တို့ ကို ဖုန်းဆက် အကူအညီတောင်းတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ သွားမပို့နိုင်ဘူး။ တိုက်ပွဲကလည်း ဒီနေ့ထိဖြစ်နေသေး တယ်” ဟု စိုင်းနေအောင်က ဆိုသည်။
လက်ရှိ ကာလသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်သည့် ကာလလည်းဖြစ်သဖြင့် စစ်ဘေးရှောင်များ လူစုလူဝေးမဖြစ်အောင် လည်း ထိန်းသိမ်းနေရကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စ အလေးထားစောင့်ကြည့်နေရကြောင်းလည်း စစ်ဘေးရှောင်များကို လိုက် လံကူညီပေးနေသည့် ပရဟိတအဖွဲ့များက ပြောသည်။“ဒီလို ဆက်သွားနေရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အခြေ အနေ ဆိုးလာနိုင်တယ်။ အဓိက ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဖြစ်မှာစိုးရိမ်ရတယ်”ဟု ပုံဝိုးကျေးရွာသို့ စစ်ဘေးရှောင်နေသည့် အမျိုးသမီး တဦးက ပြောသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလကြောင့် အလှူရှင်များလည်း သွားလာမှု ကန့်သတ်ထားသဖြင့် စစ်ဘေး ရှောင် ပြည်သူများအတွက် လက်ရှိမှာ အစစအရာရာ အခက်အခဲ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း လည်း စစ်ဘေးရှောင်များကို ကူညီ သည့် နန်းကျိန်က ပြောသည်။
လက်ရှိ RCSS/SSA နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲသည် စစ်ရေးပြင်းထန်မှု၊ လျော့ကျမှုသည် တပ်မတော်အပေါ်သာ မူတည်ကြောင်းလည်း RCSS/SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်လည်း ၁ လ နီးပါးသာကျန်နေသည့်အချိန်၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အသီးသီး မဲဆွယ်နေသည့် ကာလအတွင်း အစိုးရတပ်မတော် အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ တိုက်ပွဲဖန်တီး ခြင်းသည် ရုပ်ဆိုးကြောင်းလည်း စစ်ရှောင်များက ပြောဆိုလိုက်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/188
ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုခရိုင်မှာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ အရေအတွက်ဟာ စက်တင်ဘာလ အ တွင်းစိစစ်ထားတဲ့စာရင်းအရ စုစုပေါင်း ၆၀,၂၅၆ ဦးရှိတယ်လို့ ပူတာအိုခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထမ်းတန်ဖီရမ် က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကထက် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ အရေအတွက် ပိုတိုးတာတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပူတာအိုခရိုင်မှာ မဲရုံစုစုပေါင်း ၁၃၈ ရုံ ဖွင့်လှစ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတည်လို့လည်းပြောပါတယ်။“မဲရုံ စုစုပေါင်း ၁၃၈ ရုံ ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ပြီးတော့ ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်းက ၉၁ ဦး ရှိပါတယ်။ ပါတီအနေနဲ့က ၁၀ ပါတီ အမည် စာရင်းတင်သွင်းထားပေမဲ့ တစ်ပါတီက ယှဉ်ပြိင်ခြင်းမရှိဘူး။ နောက်တစ်ပါတီကလည်း ပြည်နယ်မှာပြိုင်‌ပေမဲ့ ကျနော်တို့ ဆီ မှာ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ၈ ပါတီက ပူတာအိုခရိုင်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ရှိတယ်”လို့ ပူတာအို ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထမ်းတန်ဖီရမ်က ပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကပ်ဘေးကာလမှ စည်းရုံးရေး လုပ်နေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ‌ကော်မရှင်တို့က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အထူးမှာကြားထားပြီး မြေပြင်မှာလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ ဦးဖီရမ်က ပြောပါ တယ်။
ပူတာအိုခရိုင်မှာ စက်တင်ဘာလအတွင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရင်း ပုတ်ခတ်မှုနဲ့ တိုင်ကြားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ အပြန်လှန် တောင်းပန်ခဲ့ကြလို့ နှစ်ဘက် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no /archives/415235
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီက အင်အားထောင်ချီပါဝင်သည့် လှည့်လည် မဲဆွယ်ပွဲကို ယမန်နေ့ (အောက်တိုဘာ ၆ ရက်)တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ-KPP ကျောက်ကြီး မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စောသေးအားကလို ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ အဆိုပါ မဲဆွယ်ပွဲကို ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီက ဦးဆောင်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်-၁ ဘက်တွင် ကျောက်ကြီး-မုန်း ကားလမ်း တလျှောက်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်-၂ ဘက်တွင် ကျောက်ကြီး-နံသားကွင်း လမ်းတလျှောက် နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် စတင် လှည့်လည်မဲဆွယ်ခဲ့ပြီး မွန်းလွဲ ၂ နာရီ တွင် ကျောက်ကြီးမြို့ပေါ်တွင် အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပြန်ဆုံပြီးနောက် မဲဆွယ်ပွဲကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
“ဒီနေ့ပွဲကို ဆိုင်ကယ်တွေရော ကားတွေနဲ့ပါ ခန့်မှန်း လူ ၃, ၀၀၀ လောက်လာတယ်။ လမ်းတလျှောက် ရွာတွေ ကျနော်တို့ ကို အားပေးတာတွေကိုကြည့်ပြီး အခြေအနေကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်ဟု”ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စောသေးအားကလိုက ပြောသည်။ အဆိုပါ မဲဆွယ်ပွဲပြုလုပ်ရန် မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ သုံးရက်ကြို တင်ခွင့်ပြုချက်ရယူ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ အကန့်အသတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ရန် ကနဦး စီစဉ်ထားသော်လည်း လာရောက် ဝန်းရံသူများသွားသည့် အခြေအနေဖြစ်သွားသည်ဟု KPP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ပြောသည်။
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ အစိုးရအုပ်ချုပ်သည့်ဒေသ အချက်အလက်များအရ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁၂၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် ဗမာ လူမျိုး ၆၈,၆၂၁ ဦး ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကရင်လူမျိုးစုစုပေါင်း ၅၂,၂၈၂ ဦး ၄၂ ရာခိုင် နှုန်းခန့်ရှိကာ ရှမ်းလူမျိုး ၂၀၆၉ ဦး နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်စာရင်းများအရ သိရသည်။ http://kicnew s.org/2020/10/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80 %ac%e1%80%80%e1%
တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA) တို့စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာ ချင်းပြည်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် လုံခြုံရေးအခြေအနေ ကြောင့် ရေလမ်း ကုန်လမ်းများပိတ်ဆို့ကာ ကုန်စည်ဝင်ရောက်မှုမရှိတော့သည့်အတွက် ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်းက ကျေးရွာ ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ဆန်ပြတ်လပ်နေပြီဟု ချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ အရေးပေါ်ကူညီးရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကော်မတီ RRCCI အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိသော်လည်း ပလက်ဝမြို့နယ်၏ အဓိကစားနပ်ရိက္ခာသယ် ဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းများဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်လမ်း ပိတ်ဆို့သည့်အပြင် မတူပီ-ပလက်ဝ လမ်းသည် လည်း လုံခြုံရေးနှင့် ကားလမ်းအခြေအနေကြောင့် ဆမီးအထိ သွားရောက်နိုင်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဆန်ပြန်လပ်မှုဒဏ် ရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်ဟု RRCCI မှ မနန်းဝေကပြောသည်။ “ဒါကတကယ်တော့ စစ်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့ ၂၀၂၀ အစောကတည်းက ကျမတို့ ဆန်ပြတ်လပ်နေတဲ့ကျေးရွာ တွေရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအရေအတွက် တက်လာတာ ကျေးရွာပေါင်း (၂၀၀) ကျော် (၃၀၀) ကျော်ပြတ်လပ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ တစ်လနီးပါး ရက် (၂၀) ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီ မြို့ပေါ်မှာတော့ ဆန်လုံးဝဝယ်စရာတော့မရှိဘူး’ဟု မနန်းဝေကပြောသည်။“အထူးသဖြင့် စစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော် လုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ့နော် ဖြတ်လေးဖြတ်ပုံစံမျိူးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အခါကျတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းကမြင့်တက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးတော့ နောက်တစ်ချက်က ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူစက်မှု ထိန်းချူပ်ဖို့ ဥပဒေမျိူးနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ လမ်းကြောင်းတွေက အရင်ထက်ပိုပြီးတင်းကြပ်သွားတော့ ခုလိုမျိူးဆန်က ပြတ်လပ်သွားတာပေါ့နော်’’ဟု မနန်းဝေကပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ ပလက်ဝမြို့ပေါ်တွင် ဆန်တစ်အိတ်ကို ကျပ်ငွေ (၇၀၀၀၀) ခန့်ဈေးပေါက်နေပြီး ကြက်ဥတစ်လုံးမှာလည်း ၅၀၀ ခန့်ဈေးပေါက်နေသည်ဟုသိရသည်။ လူဦးရေတစ်သိန်းကျော်နေထိုင်ပြီး ကျေးရွာပေါင်း ၄၀၀ နီးခန့်ရှိသည့် ပလက်ဝမြို့နယ် တွင် ကျေးရွာထက်ဝက်ကျော်သည် ဆန်ပြတ်လပ်သည့်အနေအထားရှိရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပလက်ဝမြို့နယ် ဆန်ပြတ် လပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ ပလက်ဝမြို့နယ်သို့ ဆန်အိတ်များအမြန် ဆုံးပို့ဆောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် စည်ပင်ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောသည်။ ယခုလက်ရှိ ဆန်ပြတ်လပ်မှု အများစုကျေးရွာများသည် ပလက်ဝမြို့ အထက်ပိုင်း၊ အရှေ့ခြမ်းနှင့် ကုလားတန်မြစ်၏ အနောက်ဘက်ကမ်း တို့မှ ကျေးရွာများဖြစ်ကြသည်။ https://www. bnionline.net/mm/news-76129
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ပါက ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အခြေခံဥပဒေ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပင်လုံကတိကဝတ် အတိုင်း တိုင်းပြည်ပုံဖော်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နာဂအမျိုးသားပါတီမှ ဥက္ကဌ ဦးရူမောင် က ပြောသည်။“အနိုင်ရသွားပြီဆိုရင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ၂ ပိုင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ တစ်ပိုင်း ကကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့နယ်မြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းရှိမယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ပိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှာ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ခါမှာ အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဘဲရေးဆွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့အနာဂတ်ကံကြမ္မာကိုလွှမ်းမိုး အကျိုးသက်ရောက်စေမယ့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ (နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စား ပြုမူပေါင်းစုံ) အတူတူရေးဆွဲမယ်။ ဒါကကျနော်တို့ရဲ့မူဝါပိုင်းတွေ ပြောရရင်တော့ ဒီထက်ပိုရှည်ပါတယ် အချုပ်ဘဲပြောတာ ဖြစ်တယ်။” ဟု နာဂအမျိုးသားပါတီမှ ဥက္ကဌ ဦးရူမောင်ကဆိုသည်။
နာဂအမျိုးသားပါတီသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ပါတီဖြစ်ပြီး လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မဲဆန္ဒနယ် ၁၀ နေရာနှင့် တနိုင်း၊ ရှင်ဗွေယန်၊ ခန္တီး၊ ဟုမ္မလင်း စသည့်ဒေသများတွင် ၅နေရာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း မဲဆန္ဒနယ် ၁၅ နေရာတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ ယင်း မဲဆန္ဒနယ် ၁၅ နေရာတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၅ ဦးအနက် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိချိန်ထိ နာဂအမျိုးသားပါတီသည် ပါတီအင်အား ၂ သောင်းခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး နာဂ အမျိုးသားပါတီ၏ အားသာချက် သည် မျိုးနွယ်စုများအား အခြေခံကာ တည်ထောင်ထားသည့်ပါတီဖြစ်တဲ့တွက် နာဂ လူမျိုး များ၏ ထောက်ခံမူအပြည့်အဝ ရရှိထားသော်လည်း အားနည်းချက်အနေနှင့်မူ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမူ၊ ဖုန်း၊ အင်တာနက်လိုင်း မရရှိမူတို့ကြောင့် ပြည်မနိုင်ငံရေးစီးဆင်းမူပုံစံအား ထဲထဲဝင်ဝင်မသိသေးသည့် ပြည်သူများရှိခြင်းသည် အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပါတီဥက္ကဌ ဦးရူမောင်ကပြောသည်။ နာဂအမျိုးသားပါတီသည်လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲ တွင် အောင်နိုင်ရေးတွက် ရာခိုင်နူန်းအပြည့်မျှော်မှန်းထားကြောင်းနှင့် ပါတီဆောင်ပုဒ်အနေဖြင့် “ပြန်လည်တည်ဆောက် ကြပါစို့”ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ကြောင်း နာဂအမျိုးသားပါတီမှ ဥက္ကဌ ဦးရူမောင်ကပြောသည်။ https://burmese.kac innews.com/2020/10/06/%e1%80%8 0%e1%80%81%e1%80
Otober 8, 2020
ဝန်ကြီးချုပ်ကို ရာထူးကနေဖယ်ရှားရေးအတွက် လွှတ်တော်ရဲ့ စွပ်စွဲပြစ်တင်တဲ့ ငါးဦးထဲမှာ လက်မှတ်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့သူ ဒီးမော့ဆို မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းအောင်ကို တရားစွဲမယ်လို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ပြောထားပါတယ်။ စွပ်စွဲပြစ်တင်တဲ့အဖွဲ့ထဲကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာ လွှတ်တော်ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်စေခဲ့တာကြောင့် တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့က သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှထွေးက ပြောလိုက်တာပါ။“ ဦးသိန်းအောင်ကို ကျနော် တရားစွဲမှာပါ၊ မကြာခင်လေ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတာပါ၊ မကြာခင် လုပ်မှာပါ။ ကျနော်ကလည်း ပြောလည်းပြောမယ်၊ လုပ်လည်းလုပ်မယ်”ပြင်းထန်ထဲပုဒ်မ ၃ ခုနဲ့ တရားစွဲမယ် ဆိုပေမယ့် ဘယ်ပုဒ်မတွေလဲ ဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
စွပ်စွဲပြစ်တင်ရာမှာ စွပ်စွဲသူက ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်အတွင်း ကိုယ်စားလှယ် လေးပုံတစ်ပုံ၊ အရေအတွက် အားဖြင့် ငါးဦးရှိမှသာ ဥပဒေအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စွပ်စွဲသူ အရေအတွက် လေးဦးပဲ ရှိခဲ့ချိန်မှာ ဆက်လက် စုံစမ်းခဲ့ခြင်းဟာ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်လာနေတဲ့ ဒီအမှုကို ရှင်းပေးဖို့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းက နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေခုံရုံးကို တင်ပြထားရာမှာ ခုံရုံးက အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့မှာ ကြားနာခဲ့ ပါတယ်။ အခုလို ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ကနေ ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးကို ပြန်တရားစွဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာ နုတ်ထွက်စာမှာ ရေးသားထား ချက်အပေါ် မူတည်တယ်လို့ ကယားပြည်နယ်အခြေစိုက် ဥပဒေပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Law Home အဖွဲ့က အထက်တန်းရှေ့နေ ဦးကျော်ဝဏ္ဏအောင်က ပြောပါတယ်။
အခုလို ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနေ ဝန်ကြီးချုပ်ကို ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စကို ခုံရုံးကနေ ကြားနာချိန် ရှေ့နေချုပ်ကနေပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ မကိုက်ညီဘူး ဆိုတာပြောသွားပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့ ဦးကျော်ဝဏ္ဏအောင်က ပြောပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုကို ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ စက်ယန္တာယားငှားရမ်းခငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း လေးထောင်ကျော်နဲ့ အများပိုင်ပြည်သူမြေကို ငှားရန်းထားတဲ့ငွေတွေကို အလွဲ သုံးစားမှုနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနေ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကနေ ဖြုတ်ချခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုကလည်း သူ့ကိုစွပ်စွဲပြစ်တင်ထားတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ သူ့ကို ဖယ်ရှားဖို့ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာ အင်အားရှိသူတွေက မတရား ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်သလို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ရဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း RFA ကို ပြောထားပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/kayah-
ထိုင်းနိုင်ငံ ဒေသအသီးသီးတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ကရင်လူမျိုး ၃ထောင်ကျော် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘန်ကောက်မြို့တွင် လူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူ ကရင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ လူမှုစောင့် ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (OKRSO) ထံမှ သိရသည်။
လက်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ပြန်လည်ပေးပို့လာသည့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သူ စာရင်းအရ ကရင်ပြည် နယ်အတွင်း နေထိုင်သည့် ကရင်လူမျိုးစုစုပေါင်း (၃,၃၄၃)ဦးရှိပြီး လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲများသွားပေးကြည်ဟု ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်နေသူ OKRSO အဖွဲ့အကြံပေး စောဆိပ်ပလောင် က ပြောသည်။ ၎င်းက “လက်ရှိ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းနေတဲ့ ကျနော်တို့ကရင်တွေ ဘန်ကောက်မှ မဲ ထည့်ခွင့်ရတဲ့ အမည် ကျလာတဲ့သူက ၃,၃၄၃ ဦးရှိတာပေါ့။ အဲ့လူတွေကို မနေ့ တနေ့က ဘယ်လို မဲထည့်ရလဲ။ ပယ်မဲ ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ အသိအမှတ်ပြုမဲဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကို ခေါ်ပြီး ပြောပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနည်းနည်းလေးပဲ လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်းကနေလည်း သူတို့ကို သင်ပေးတာမျိုးရှိတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြော သည်။
အဆိုပါ မဲပေးသူ စာရင်းဦးရေအရ ဘန်ကောက်ရောက် ကရင်လူမျိုးများအတွက် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိ ကြောင်းနှင့် အချိန်အခက်အခဲကြောင့် အရေအတွက် နည်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း စောဆိပ်ပလောင် က ဆက်ပြော သည်။ အဆိုပါ ကြိုတင်ဆန္ဒပေးနိုင်ရန် OKRSO မှ ဦးဆောင်၍ ဘန်ကောက်မြို့အပါအဝင် ဘန်ကောက်မြို့အနီးအနားရှိ ကရင် တိုင်းရင်းသားများကို ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လက ခေါ်ယူ၍ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးနှင့် လိုအပ်သည့် ပုံစံ(၁၅) ဖောင် ဖြည့်စွက် တင်ပြ ခြင်းတို့အတွက် သံရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်၍ ကူညီပေးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ နိုင်ငံသားများ ကြိုတင် ဆန္ဒမဲကို ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့က စတင်ပေး ခဲ့ကြပြီး ၁၈ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ် ထားကာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင် မြန်မာအလုပ်သမားများ ၁.၁၅ သန်းရှိသည့် အနက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့် လျှောက် ထားသူ ၄ သောင်းနီးရှိကြောင်း မြန်မာသံရုံးထံမှ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80 %91%e 1%80 %ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
မကြာမီကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ ပြည်လုံးကျွတ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင် EAOs ထိန်းချုပ်ရာဒေသများနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူတို့၏ မဲပေးပိုင်ခွင့်အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများအပေါ် မီးမောင်း ထိုး ဖော်ပြထားသည့် “ဖယ်ကြဉ်မရှိမှ လွတ်မျှတ” အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာကို မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း Hurfom က (အောက်တိုဘာ ၈) တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
“၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အခုရွေးကောက်ပွဲက ၃ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တာပေါ့၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဝက်လောက်ပဲ မဲလာပေးကြတယ်၊ ဒီအရေအတွက်က နည်းတယ်လို့ပြောရမယ်၊ သူတို့က အပြောင်းအလဲကို လိုလားပေမယ့် ဘာလို့ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမပေးကြတာလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကို သေသေချာချာ သိရှိပြီးတော့ လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီအစီရင်ခံစာကို လုပ်ဖြစ်တာပါ”ဟု မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ နိုင်အဲမွန်က ပြောသည်။ အထူးသဖြင့် အဆိုပါဖယ်ကြဉ်ခံအုပ်စုများတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထိန်းချုပ်ဒေသ နေ ပြည်သူများ၊ ကျေးလက်နေ အမျိုးသမီးများ၊ စာတတ်မြောက်နှင့်အသိပညာနည်းပါးသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နေရပ် စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရသူများ၊ ပထမဆုံးမဲပေးကြမည့် လူငယ်များနှင့် အခြားနည်းဖြင့် သန်စွမ်းသူများ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဤအစီရင်ခံစာတွင် မီးမောင်းထိုး ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်အဲမွန်က “မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို ကျနော်တို့တိုက်တွန်း လို တာက နိုင်ငံသားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအတွက် နိုင်ငံသားတိုင်း သူတို့ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကို မဲထည့်ခွင့်ပေးသင့် တယ်လို့ ကျနော်တို့မြင်တယ် ဒါမှလည်း ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုအောက်မှာ ရှိနေတဲ့အနေအထားအဖြစ် ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ကျနော်တို့ဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်”ဟု မွန်သတင်းအေဂျင်စီနှင့် အင်တာဗျူးတွင် ပြောကြားသည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ရာဒေသတွင်းရှိ သာမန်ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု သက်သေခံအ ထောက်အထား လက်ဝယ်ရရှိစေရေးအပြင် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲပေးခွင့်ရှိစေရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဒေသန္တရ (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအကြားတွင် မူဝါဒတိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားခြင်း မတွေ့ရကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း Hurfom သည် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေး၊ စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အခွင့် အရေး အခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုများ၊ ပညာပေးအစီအစဉ်များ၊ သတင်း အချက်အလက်များနှင့် အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ဝေခြင်းများ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေသည့် မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ http://burmese.monnews.org/2020/10/08/%e1%80 %95%e1%80%bc%e1%80 %8a%e1%80%ba%e1%8
၁၃။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာလဖြစ်သည့်အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းရာတွင် အခက်အခဲများတွေ့ကြုံနေရဟု မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ပြောကြား
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသောကာလဖြစ်သည့်အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းရာတွင် အခက်အခဲများ တွေ့ကြုံနေရကြောင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဝင်းမင်းထွန်း က ပြောကြားသည်။“စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့အခါမှာ တွေ့ကြုံရတာက ကျိုက်ထိုမြို့ပေါ်က ပြည်သူတွေဆိုရင် အပြင်သိပ်မ ထွက်ကြတော့ဘူး။ ကျေးရွာတွေကိုသွားရင်လည်း ပါတီမိတ်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကို သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာက ရာအိမ်မှူးတွေ ကို အကူအညီတောင်းပြီးတော့မှ ပြည်သူ လေး၊ ငါး၊ ၁၀ ယောက်လောက် စုပေးဖို့ ပြောဆိုပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့က စည်းရုံးရတာတွေရှိပါတယ်။ တချို့ရွာတွေကျတော့ ပေးမဝင်တာတွေရှိတယ်။ ဂိတ်တွေထားပြီး တားထားတာတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်ပါတီကိုမှ ပေးမဝင်ဘူးဆိုပြီး ပြောတာတွေလည်း ရှိပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းမင်းထွန်းက ပြောကြားသည်။
“တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ လွှတ်တော်တွေထဲမှာ နေရာအသင့်တင့်ရရှိမှသာ တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်း တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အားလုံးက ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကို ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို အားပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်”ဟု ဦးဝင်းမင်းထွန်းက ဆိုသည်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ကျိုက်ထို၊ မော်လမြိုင်၊ ကျိုက်မရော၊ ချောင်းဆုံ၊ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်၊ ရေးနှင့် ပေါင်မြို့နယ်တို့တွင် မဲဆန္ဒနယ်အပြည့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဘားအံမြို့နယ်၌ အမျိုးသားလွှတ်တော် တစ်နေရာ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် နှစ် နေရာ၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တစ်နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် တစ်နေရာ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် တစ် နေရာနှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တစ်နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် နှစ်နေရာနှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော် နှစ်နေရာ၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာ ကိုယ်စားလှယ် တစ်နေရာနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တွင် မွန်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကိုယ်စားလှယ် တစ်နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၌ ရွှေပြည်သာ-မှော်ဘီ-ထန်းတပင်မြို့နယ်များတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် တစ်နေရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ ဒေါပုံ၊ ရွှေပြည်သာ၊ သာကေတနှင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်များတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တစ်နေရာစီနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးမြို့နယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နှစ်နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးချယ်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/1 94836
၁၄။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး RCSS/SSA ထိန်းချုပ်သည့်ကျေးလက်များအတွင်း ပြင်ပလူဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မပြု
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားလာပြီး သေဆုံးမှုလည်းများပြားလာသည့်အတွက် ကျေးလက်နေလူထု ကျန်းမာ ရေး အလေးထားကာ မိမိထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားရာဒေသ ကျေးလက်များအတွင်း ပြင်ပလူဝင်ထွက်သွားလာမှုကို ဟန့်တားထား ကြောင်း RCSS/SSA က ကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အချက် ၆ ချက်ပါ RCSS/SSA ၏ အဆိုပါကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ကြေညာချက်ကို အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးရေးဆင်းမည့်ပါတီများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေး ဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာရန် ဟူသောအချက်ပါရှိပါသည်။ ၄င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး RCSS/SSA ပြောခွင့်ရ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေးက- “ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုက အရမ်းပြင်းထန်နေပါတယ်။ ကျေးလက် ရပ်ရွာထဲ ကွင်းဆင်းစည်းရုံးရေးဆင်းမယ့် ပါတီတွေအနေနဲ့လည်း လူထုရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုအဓိက အလေးထားရမယ်။ ကွင်းဆင်းမှ စည်းရုံးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုဆိုရင် အွန်လိုင်းကနေ စည်းရုံးရေးလုပ်နေကြတာလည်းတွေ့ရတယ်။ အခက် အခဲလေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်အလုပ်မဖြစ်တဲ့အထိ တော့မဖြစ်ပါဘူး။”ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောသည်။
ကြေငြာချက်တွင် RCSS/SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိ ကျေးလက်များသို့ ပြင်ပရွာမှလူများဝင်ရောက်ခွင့်၊ ရွာသားများရွာ ပြင်ထွက်ခွင့် ကို အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိပိတ်ပင်ထားသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေ မှသာ ရွာသားများ စုပေါင်းပြီးမှ ရွာပြင်ထွက်နိုင်ကြောင်းလည်း ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအုမ်ခေးကပြောသည်။ https://burmese.shannews.org/arch ives/18789
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင်တွင် ပထမအကြိမ် မဲစာရင်းကြေညာပြီးနောက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ၈၀၀၀ ခန့် ပြန်တိုးလာ ကြောင်း ဗန်းမော်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ သိရသည်။
ပထမအကြိမ် မဲစာရင်းကပ်ရာတွင် ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းရှိ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် မဲဆန္ဒရှင်၂သိန်း ၄သောင်းခန့်ရှိသော်လည်း ဒုတိယအကြိမ်မဲစာရင်းတွင် ၈ထောင်ခန့်တိုးလာသည့်အတွက် လက်ရှိနောက်ဆုံးစာရင်းအရ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း၂၄၈၁၈၁ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဗန်းမော်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ အရာရှိ ဦးကျော်သိန်းက ဆိုသည်။“ ခုစာရင်းက မပိတ်သေးဘူး ဆိုတော့ အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူး။ ဒီထက်တိုးချင်တိုးလာနိုင်သေးတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ပုံစံ (၃-က) နဲ့လာ လျှောက်ထားတဲ့ ဦးရေက ၄၀၀ကျော်ရှိနေပြီ။ ဒီ ၄၀၀ ကျော်က ခုန ဒုတိယအကြိမ် မဲစာရင်းကြေညာတဲ့အထဲမှာ မပါသေး ဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းပြန်လာလျှောက်တဲ့ စာရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။” ဟု အရာရှိ ဦးကျော်သိန်းက ပြောသည်။
ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်ပေါင်း ၄ ခုအနက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှာ ဗန်းမော်မြို့နယ်တွင် ၉၀၈၆၈ ၊ မန်စီမြို့နယ် ၄၀၁၈၂ ၊ မိုးမောက်မြို့နယ် ၅၂၁၈၇ နှင့် ရွှေကူမြို့နယ် ၆၄၉၄၄ အသီးသီးရှိကြောင်း သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ် တစ်ပြည်နယ်လုံးတွင် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီပေါင်း ၁၉ ပါတီရှိကာ လူဦးရေအားဖြင့် ၁၁ သိန်းနီးပါး ရှိသည်။ ဗန်းမော်ခရိုင်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီပေါင်း ၁၁ ပါတီရှိပြီး တစ်သီးပုဂ္ဂလ ပြိုင်မည့်သူ ၂ ဦး ပါဝင်သည်။ မဲရုံများမှာ ဗန်းမော်မြို့နယ်တွင် ၆၆ ရုံ၊ မံစီမြို့နယ် ၃၉ ရုံ၊ မိုးမောက်မြို့နယ် ၄၅ ရုံ၊ ရွှေကူမြို့နယ် ၅၁ ရုံ ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှ သိရ သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/07/%e1%80%97%e1%80%94%e1%80%ba%e1%
ဒေသတွင်း တိုင်းရင်းသား အခြေပြု နိုင်ငံရေးပါတီများ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မွန်၊ ပအိုဝ်းနှင့် ကရင်လူငယ်များ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်က သထုံမြို့နယ် နောင်ကုလားကျေးရွာရှိ ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီ (မွန်ပြည်နယ်) ရုံးတွင် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ကရင် လူငယ်များ အစည်းအရုံး၊ ကရင်လူငယ်ကွန်ရက်၊ မွန်လူငယ်အဖွဲ့၊ ပအိုဝ်းလူငယ်ကွန်ရက်၊ ပအိုဝ်းမျိုးဆက်သစ် လူငယ် ကွန်ရက်တို့မှ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က လက်ရှိမှာ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး စည်းရုံးရေးဆင်းဖို့က COVID-19 ရောဂါနဲ့က အခက် အခဲတွေ ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ PNO ပါတီရယ်၊ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီရယ်၊ နောက် မွန်ညီညွတ်ရေး ပါတီတွေကို ဘယ်လိုဝန်းရံကြမလဲပေါ့နော်။ အဲဒါတွေကို တိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ PNO ပါတီနဲ့ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီတို့က ပူးပေါင်းပြီးတော့ မဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေ၊ နောက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ပူးတွဲပြီးတော့ စိုက်ထူတာတွေတော့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်စည်းရုံးရေး ဆင်းကြတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေ မျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရသလဲပေါ့။ နောက်ဘယ်လို နေရာတွေမှာ တွဲလုပ်မယ်။ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ခွဲပြီးလုပ်ကြမယ်ပေါ့။ အဲဒါ တွေကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီ (မွန်ပြည်နယ်) အတွင်းမှူး ခွန်တေဇ က ပြောကြားသည်။ လာမည့် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် မွန်၊ ကရင်၊ ပအိုဝ်းလူငယ်တွေ ထပ်မံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြရန် ရှိကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးပြီးပါက ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး Campaign လုပ်ဆောင်သွားရန် တိုင်ပင်ထားကြောင်း ခွန်တေဇ က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ထို့အတူ ကရင်လူငယ်ကွန်ရက် (မွန်ပြည်နယ်) တာဝန်ခံ စောသောကြာကလည်း “အဓိကကတော့ လူငယ်တွေ အချင်းချင်း ကြားထဲမှာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် ကိစ္စတွေကို ပူးပေါင်းလုပ်မယ်ပေါ့။ အမှန်က အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ကြတာပါဘဲ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကို အဓိကထားပြီး ဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက်လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်မှ ပအိုဝ်းလူငယ်၊ ကရင်လူငယ်၊ မွန်လူငယ်တွေ စုပေါင်းပြီးတော့ သထုံနဲ့ပေါင်
မြို့နယ်အတွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် စီတန်းလှည့်လည်ဖို့ အတွက်ကိုတော့ အကြမ်းဖျင်း ဆုံးဖြတ်ထား ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။ လက်ရှိတွင်လည်း သထုံမြို့နယ်အတွင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီ နှင့် ကရင် ပြည်သူ့ပါတီ (KPP) တို့ပူးပေါင်းကာ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ် စိုက်ထူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့်အပြင် သံဖြူ ဇရပ်မြို့နယ်နှင့် ရေးမြို့နယ်များအတွင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူရာ၌ ဒေသခံ ကရင်တိုင်းရင်းသားများမှ တက်ရောက် ဝန်းရံပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/a rticle/195
၁၇။ မိုင်ရွှေလှေတီာလ် ရုပ်အလောင်း လမ်းဘေးမြေမြုပ်ခိုင်းမှု သက်ဆိုင်သူများကို ထိရောက်စွာအရေးယူရန် ချင်း ကျောင်းသား/လူငယ် (၁၃) ဖွဲ့ကတောင်း ဆို
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သေဆုံးသည့် အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ် မိုင်ရွှေလှေတီာလ်၏ ရုပ်အလောင်းအား ဇာတိမြို့ ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့သို့ဝင်ခွင့်မပြုဘဲ မြို့အပြင်လမ်းဘေးတွင် မြေမြုပ်ခိုင်းခဲ့သည့် ထန်တလန်မြို့မှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ သူများကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူရန် ချင်းကျောင်းသား/လူငယ်အဖွဲ့အစည်းအပေါင်း (၁၃) ဖွဲ့က တောင်းဆိုလိုက် သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ထန်တလန်မြို့ခံ (ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်) အဖွဲ့အစည်း များ ပါဝင်သော လွတ်လပ်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့(Independent Inquiry) တရပ်ကိုဖွဲ့စည်းကာ မိုင်ရွှေလှေတီာလ်ရုပ် ကလပ် အား ထန်တလန်မြို့တွင်းသို့ ဝင်ခွင့်မပြုခြင်းနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာအသုဘချခြင်းမရှိအောင် တားဆီးပိတ်ပင်သည့် တာဝန်ရှိသူများကို အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရေးချပြပေးပါရန်နှင် ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများလုပ်ဆောင်ပေးရန် ချင်းကျောင်းသား/လူငယ် အဖွဲ့အစည်း (၁၃) ဖွဲ့က အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့က ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်ဆောင်ထုတ် ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗဟိုချင်းလူငယ်များအဖွဲ့အစည်း၏ ဥက္ကဌ Salai An No Bik က “ရုပ်ကလာပ်ကို သံတမန်ရေးအရ မလေးရှာကနေ၊ ရန်ကုန်ထိ၊ ရန်ကုန်ကနေ ထန်တလန်မြို့အထိတောင်မှသယ်လာနိုင်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ ကိုဗစ်ကော်မတီက ထန်တလန်မြို့ ထဲကို ဘာလို့ဝင်ခွင့်မပြုတာလဲ ဒါကို ကျနော်တို့ကန့်ကွက်ရှုချတယ်၊ ကျနော်သိရသလောက်ကတော့ အဲဒီထန်တလန် ကိုဗစ် ကော်မတီက ဗမာတွေကြီးပဲ အဲမှာက သူတို့က ချင်းဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ ကိုဗစ်ကိုအကြောင်း ပြပြီးမှ အဲလိုလုပ်တာတော့ ကျနော်တို့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး၊ နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ကျနော် တို့ တောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းလုပ်စေချင်တယ် အဲဒါမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ မြို့နယ် (၉) မြို့က လူငယ်တွေ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်တာလုပ်နိုင်တယ်”ဟု ခိုနူမ်းသုန်ကိုပြောသည်။ မိုင်ရွှေလှေတီာလ် အသက် (၂၁) နှစ်သည် စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ ည (၈) နာရီခန့်အချိန် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ (၈) ထပ်တိုက်ပေါ်မှပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ပြီး ထန်တလန်မြို့တွင် မြေမြုပ် သဂြိုလ်ရန် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ရန်ကုန်လေဆိပ်၊ မန္တလေး၊ ဟားခါး အဆင့်ဆင့်သယ်ဆောင်လာပြီးနောက် ထန်တလန်မြို့နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချူပ်၊ ကုသရေးကော်မတီ က ထန်တလန်မြို့အတွင်း ဝင်ခွင့်မပြုဘဲ ဟားခါးသွားသည့် လမ်းမ ဘေးတွင်မြေမြုပ်သဂြိုလ် ခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ချင်းမီဒီယာများမှရေးသားဖော်ပြပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် ကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက် လာပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ပြန်လည်ခွင့်ပြုသဖြင့် မိုင်ရွှေလှေတီာလ်၏ ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည် တူးဖော်ကာ ထန်တလန်မြို့သချိူင်းတွင် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့ညက ပြန်လည်သဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။
မိုင်ရွှေလှေတီာလ် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုခဲ့ကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ Thantlang Youth Association ၊ Thantlang Sianghleirun ChungKhar ၊ Central Chin Youth Organization ၊ Chin Literature and Culture Committee (Universities-Yangon) ၊ Zomi Siamsin Kipawlna-Myanmar ၊ Chin Student Union,kalay ၊ Falam Phunsang Tlawngta Pawlkom,Myanmar ၊ Lairawn Zirsang Pawlkom,kalay ၊ Zo khangno Kipawlna (Tonzang) ၊ Zo Youth Organization (Tonzang) ၊ Mindat University Student’s Union ၊ Hakha University Student’s Organization ၊ Falam Mino Pawlkom တို့ဖြစ်ကြသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76121
ရွေးကောက်ပွဲကာလ နီးလာနေချိန် ရှမ်းမြောက်ဒေသတွင် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာနေသည့် တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ပေးရန် ဒေသခံများက တောင်းဆို လိုက်သည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ အနေဖြင့် မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးမှု မရှိရလေအောင် အောက်တိုဘာလ ပထမအပတ်အတွင်းက စတင်ဖြစ်ပွား နေသည့် တိုက်ပွဲများကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့် ပေးရန် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျောက်မဲဒေသခံများက တောင်းဆို လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရှမ်းလူငယ်ကွန်ရက်က နန်းပန်းအိဖြူက “၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တုန်းကဆိုရင် ကျ နော်တို့ ကျေးသီးသည် လုံခြုံမှု မရှိသောကြောင့် စစ်ဖြစ်နေတဲ့ အခါကျတော့ ကျေးသီး၊ မိုင်းရှုး၊ တန့် ယန်း တို့က ကျနော်တို့က ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပခဲ့ရတာရှိတယ်။ ပြီးတော့မှ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲကို ကျ နော်တို့ ပြန်ကျင်းပရတာ ရှိတယ်ပေါ့။ အဲလိုမျိုး အခြေအနေ ဒီလိုမျိုး အခြေအနေမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီရွေး ကောက်ပွဲက အဲမှာ မဲပုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီဒေသမှာ မဲ ထည့်ခွင့် မရှိဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ အဲဒီ စစ်ပွဲ ကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်တာပါ” ဟု ပြောသည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများဖက်မှ ၎င်းတို့ ရွေးချယ်မည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို အဟန့် အတား တစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ ရွေးချယ်နိုင်ရန်နှင့် လက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်နစ်နာမှု များလည်း ရှိနေသည့်အတွက် တိုက်ပွဲများကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးရန် နမ့်ခုံပရဟိတအသင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကလည်း တောင်းဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ ဝိုင်းမော်၊ ခေါင်လန်ဖူး၊ မချမ်းဘော၊ ချီဖွေ၊ ဆော့လော်၊ အင်ဂျန်း ယန်၊ မံစီ၊ တနိုင်း၊ ရွှေကူ စသည့်မြို့နယ်များရှိ အချို့ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် မဲဆန္ဒခံယူပွဲများ မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်သာမက ရွေးကောက်ပွဲ မပြုနိုင်သည့် ကျေးရွာ အုပ်စု စုစုပေါင်း ၂၂၁ ရွာခန့်ရှိခဲ့သည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အဖွဲ့များ၏ မှတ်တမ်းများထဲတွင် တွေ့ရသည်။ ထို့နည်းအတူ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ မြဝတီ၊ သံတောင်ကြီး၊ ဘားအံ၊ လှိုင်းဘွဲ့၊ ကော့ကရိတ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်များ အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု အချို့တွင် မဲဆန္ဒခံယူပွဲများကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ သည့်အပြင် မွန်ပြည်နယ် ဘီလင်းမြို့နယ်ရှိ ဘော်နော်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စုတွင်လည်း မဲဆန္ဒခံယူနိုင်ခြင်း မရှိဟု သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76119
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်၊ ရွှေကုက္ကိုလ်မြို့သစ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကရင်ပြည် နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) အဖွဲ့ မှ ပေးသည့် လာဘ်ငွေများကို လက်ခံရယူသည်ဟု သံသယရှိသဖြင့် အနည်းဆုံး တပ်မတော် အရာရှိကြီး ၃ ဦး စုံစမ်း စစ် ဆေးခံ နေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် (စကခ) ၁၃ တပ်မမှူး၊ စကခ ၁၃ ဗျူဟာမှူးနှင့် ခလရ ၉၇ တပ်ရင်းမှူးတို့ မှာ ငွေကြေးလက်ခံထားသည်ဟု လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့နှံ့လာသဖြင့် တပ်မတော်က စုံစမ်းစစ်ဆေးကြည့်ရာ သံသယဖြစ်စရာ အချက်များ တွေ့ ရှိသဖြင့် နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြောနိုင်တာကတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ ကနေ ပေးတဲ့ငွေကြေးကို လက်ခံထားတယ်လို့ သံသယရှိတဲ့အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်။ ဥပဒေအတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်”ဟု တပ်မတော် သတင်းရင်းမြစ်တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ယခုလို စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမှာ ယင်းစီမံကိန်း တည်ဆောက် ခြင်းနှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ဘဲ စီမံကိန်းအတွင်းရှိ ကာစီနို လောင်းကစားဝိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခု ဖြစ်စဉ် တွင် တပ်မတော် အရာရှိများသာမက ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ ပါဝင်ပတ်သက်မှုလည်း ရှိနေကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကို ဧရာဝတီက ဆက်လက် စုံစမ်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်၊ ရွှေကုက္ကိုလ်မြို့သစ် စီမံကိန်းတွင် တပ်မတော်က လုံးဝ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း တပ်မတော်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုထားသည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိဟု ငြင်းဆိုသော်လည်း ယင်းစီမံကိန်းသည် တပ်မတော်လက်အောက်ရှိ ကရင် ပြည်နယ် နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF)က ဦးဆောင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်နေခြင်း ဖြစ် သည်။ စီမံကိန်းစတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်ပါဝင်သည့် အရှေ့ တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးမှာ ယခင် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် မျိုးမိုးအောင် ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် ၎င်းနေရာအား ဗိုလ်မှူးချုပ်ကိုကိုမောင်အား ခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကွန်ရက် (KPSN) အဖွဲ့၏ ယခုနှစ် မတ်လက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် “တို့မြေများကို လောင်းကစားပစ်ခြင်း”အစီအရင်ခံစာတွင် စီမံကိန်းသည် တပ်မတော်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ ကျောထောက် နောက်ခံ ပြုထားသည့် စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံဖော်ပြနေသည့် အကြောင်းအချက်များစွာရှိနေခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရွှေကုက္ကိုလ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံများအကြား တရားမဝင် လောင်းကစားမှုများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသားအများ အပြား ဝင်ထွက်မှုများကြောင့် ရာဇဝတ်မှုနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ မြင့်တက်လာမည်ကို စိုးရိမ်လျှက်ရှိပြီး ဝေဖန် ကန့်ကွက်ခံနေရသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/08/231296.html
လာမယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ ၅ ရွာက ပြည်သူ ၁၀၀၀ နီးပါး မဲပေးခွင့် ရဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နောက်ဆုံးအကြိမ် မဲစာရင်းကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၁၄ ရက်အတွင်း ကပ်ထားကြေညာပေးနေပြီး တပ်မဲစာရင်း အပါအဝင် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သူ ၁၈ သိန်းကျော် ရှိတယ်လို့ ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒါပေယ့်လည်း အဲဒီမဲစာရင်းမှာ မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ် ဘောနော်ခီးကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရွာ ၅ ရွာက ပြည်သူတွေ ပါဝင်လာခြင်း မရှိသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကျေးရွာတွေမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းက သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးအတွက်ကြောင့် မဲစာရင်း ကောက်ယူလို့ မရတဲ့ ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာလို့ မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးဟိဏ်းလင်းထက် က ပြောပါတယ်။ ဘောနော်ခီးကျေးရွာအုပ်စုဟာ ဘီးလင်းမြို့နဲ့ မိုင် ၅၀ လောက် ကွာဝေးပြီး လမ်းခရီး အခက်အခဲအပြင် လက်ရှိအချိန်အထိ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ မခန့်အပ်နိုင်သေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် မဲစာရင်း ပြုစုနိုင် ခြင်း မရှိသေးတာလို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလို အခြေအနေကြောင့် အဲဒီဒေသက ပြည်သူတွေ မဲပေးခွင့်ရအောင် အစိုးရရဲ့ ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး စတင်ဖွင့် လှစ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ NLD ပါတီ ဘီးလင်းမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးကျော်မျိုးမင်းက ပြောပါတယ်။ ဘောနော်ခီးကျေးရွာအုပ်စုကို မဲစာရင်းကောက်ယူလို့မရတဲ့ ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မကြာမီကာလမှာ အဲဒီဒေသမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသွားဖို့ ရှိ မရှိကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြေညာပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီးလင်းမြို့နယ် ဘောနော်ခီးကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာ ရွာ ၅ ရွာက ပြည်သူတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးထားပါတယ်။ http://burmes e.dvb.no/archives/415359
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါး၊ မင်းတပ်နဲ့ တီးတိန်မြို့နယ်အဝင်မှာ ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနဲ့ ယာဉ်နောက်လိုက်တွေကို အောက်တို ဘာ ၉ ရက်နေ့က စတင်ပြီး အာခေါင်တို့ဖတ်ယူ စစ်ဆေးသွားဖို့ ပြည်နယ်အစိုးရက စီစဉ်နေပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါကာလမှာ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မရပ်နားရအောင်နဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစိုးထက်က RFA ကို ပြောပါတယ်။“ကျွန်တော်တို့ အခုကိုဗစ်ကာလက နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ ဒုတိယလှိုင်းမှာ ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီး သေဆုံးတာလည်းများတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ ချင်းပြည်နယ်၊ မြောက်ပိုင်း တီးတိန်မှာလည်း ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူ ရှိတယ်။ မင်းတပ်မှာဆို ၁၉ ယောက်ရှိတယ်။ ရှိတာတွေကို ကျန်တဲ့ဒေသတွေကနေ ကုန်စည်တွေ ကူးသန်းတဲ့အချိန်မှာ ကုန်စည်စီးဆင်းတာလည်း မရပ်အောင်၊ နောက် လာတဲ့ လူတွေလည်း ရောဂါရှိ မရှိစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်လာတဲ့ အတွက် လုပ်တာပါ။ ကားကြီးကွင်းမှာတော့ ယာဉ်မောင်း ရယ်၊ ယာဉ်နောက်လိုက်ရော မဖြစ်မနေ စစ်ရမှာ ပေါ့နော်။ ရောဂါကူးစက်ရင် ထိန်းချုပ်ဖို့ အင်မတန်မှ ခက်ပါတယ်။”
ကုန်ကျစားရိတ်အတွက် အစိုးရက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အာခေါင်တို့ဖတ်ယူ စစ်ဆေးနိုင်တာဟာ ဟားခါး၊ တီးတိန်နဲ့ မင်းတပ်မြို့တွေမှာသာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ မြို့ရွာတွေမှာတော့ အပူချိန်တိုင်း တာ စစ်ဆေးခြင်းသာ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/chin-truck-drivers-corona-checkup-10082020032021.html
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းခရိုင်တွင် မသန်စွမ်းများမဲပေးမည့် မဲရုံပေါင်း ၁၄၀ ရုံရှိကြောင်း မိုးညှင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံးမှ သိရသည်။
မိုးညှင်းခရိုင်တွင် မြို့နယ် ၃ခုရှိပြီး စုစုပေါင်း မဲရုံ ၂၈၀ ရုံရှိသည့်အနက် မသန်စွမ်းများ မဲထည့်မည့် မဲရုံပေါင်း ၁၄၀ ရှိကြောင်း ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ အရာရှိ ဦးမျိုးမင်းဦးက အတည်ပြုပြောဆိုသည်။“ အခု မသန်စွမ်းတွေ မဲပေးမယ့် မဲရုံ ပေါင်းက ခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာဆို ၁၄၀ ရှိတယ်။ ဒီထဲမှာ တစ်ချို့မဲရုံမှာကျတော့ ၁ ယောက်ရှိတာပါမယ် ၂ ယောက်ရှိတာရှိမယ်။ ပြန့်ကျဲနေတဲ့သဘောပါ။ မဲလာပေးမယ့်ချိန်မှာလည်း ကျနော်တို့အနေနဲ့ မသန်စွမ်းတဲသူတွေ မဲပေးမယ့်ချိန်မှာ လွယ်လွယ် ကူကူ မဲပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ ဒီလ လကုန်ပိုင်းဆိုရင် မဲရုံမှူးတွေကို သင်တန်းပေးဖို့ရှိတယ်။ အဲဒီချိန်မှာလည်း မသန် စွမ်း မဲပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညာပေးတာတွေပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။”ဟု မိုးညှင်းခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အရာရှိဦးမျိုးမင်းဦးက ပြောသည်။
သို့သော် မသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါကာလဖြစ်နေသည့်အတွက် မဲပေးလမ်းညွှန်သင်ကြား ပို့ချရာတွင် အခက်ခဲရှိ နေကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် မသန်စွမ်းသူများအသင်း ဥက္ကဌ ဦးဇုံးယော် က ယခုလိုပြောသည်။“ဒီနှစ်ကတော့ မသန်စွမ်း တွေကို ရွေးကောက်ပွဲလမ်းညွှန် သင်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်ကနေ ဘတ်ဂျတ်ချပေးပြီးတော့ သင်တန်းပေးခိုင်းတယ်လို့ ကျနော်တို့ ဆီမှာ မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေ ညွှန်ကြားစာရောက်လာတဲ့အတွက် ကျနော်တို့လည်း သင်တန်းတွေလုပ်နေပါ တယ်။ ရောဂါကြောင့်မို့ လူတွေများများ စုလို့မရတာတွေကြောင့် သိပ်တော့အဆင်မပြေဘူး။ ခုလောလောဆယ်တော့ ဗန်းမော်ဘက်ပေးဖို့ စီစဉ်နေကြပါတယ်။ မကြာခင်မိုးညင်းခရိုင်သွားပေးဖို့လည်း ရှိပါတယ်။”ဟု ကချင်ပြည်နယ် မသန်စွမ်း သူများအသင်း ဥက္ကဌ ဦးဇုံးယော်က ပြောသည်။
မသန်စွမ်းများ မဲစာရင်းကောက်ယူရာတွင် ဝီးချဲလ်သုံးသူ၊ ဂျိုင်းထောက်သုံးသူ၊ အခြားချို့ယွင်းသူများ အမျိုးအစားခွဲခြား ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ မဲထည့်ခွင့်ရှိသူများမှာ မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင် ၂၃၇ ဦး၊ မိုးကောင်းမြို့နယ် ၁၀၅ ဦးနှင့် ဖားကန့်မြို့နယ် ၁၄၂ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.kachinne ws.com/2020/10/07/%e1%80%99%e1%80%ad%e 1%80%af%e1%80%b8%e1
မွန်အမျိုးသားပါတီနှင့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီကို ပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းထားသည့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်တစ်နေရာနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၅ နေရာ စုစုပေါင်း ၆ နေရာ အထိ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟု သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) နှင့် စမ်းချောင်း၊ သာကေတ၊ ရွှေပြည်သာ၊ ဒေါပုံနှင့် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်များတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၅ နေရာ အတွက် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၆၅ ဦးအထိ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ် ကြောင့် မဖြစ်မနေဝင်ပြိုင်ရသည့် နေရာများတွင် ရန်ကုန်ပါဝင်သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ အတွင်း ရေးမှူး မင်းဗညားဦးက ပြောသည်။ “ရန်ကုန်က အရင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ဒေသပဲလေ။ တကယ်တမ်းဆို ကျွန်တော် တို့က ဧည့်သည်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လာပြိုင်တာပဲ ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတာ၊ အမှန်က ထူးဆန်းစရာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်၊ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒေသ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ခွာသွားရတာပါ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် မွန်လူမျိုးများအတွက်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ မရရှိခြင်းသည် ရွေးကောက် ပွဲ ဝင်ပြိုင်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) တွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကိုယ်စားပြု ဝင်ပြိုင်မည့် မိကျိုက်စောက ပြောသည်။ “တိုင်းရင်းသားအရေး လုပ်မယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရှိနေဖို့ လိုမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သိလာတယ်။ မွန်လူမျိုးတွေလှုပ်ရှား မှုလုပ်ဖို့နေရာ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သိလာတယ်။ အဲ့လိုအချက်တွေကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဖော် ပြရန် ဝင်ပြိုင်ခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်‌ကြောင်း တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုး က မှတ်ချက်ပြုသည်။ “သူတို့ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ဖော်ပြဖို့ ဝင်ပြိုင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ နိုင်တာ၊ မနိုင်တာကို ဝင်ပြိုင်သူတွေက သိပ်အလေးမထားကြဘူးဗျ။ ဝင်ပြိုင်တဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့ အမှတ်အသားလက္ခဏာ ကို ထင်ပေါ်စေချင်တာကြောင့် ဝင်ပြိုင်တာလည်းရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ၏ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ ၇ ရပ် အနက် နံပါတ် (၁) မှာ တစ်နိုင်ငံအတိုင်းအတာဖြင့် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ပြီး တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အာမခံသော လူမျိုးကို အခြေခံဖွဲ့စည်းသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည် ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ https://www.myanmar-now.org/mm/news/4661
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ (UNDP) ကိုယ်စားပြု ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင် မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆိုင်းဘုတ်ကို COVID-19 အကြောင်းပြချက်ဖြင့် စိုက်ထူခွင့် မပေးသေး ကြောင်း ယင်းပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ပြောကြားသည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဆိုင်းဘုတ် စိုက်ထူခွင့်ရရေး အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နှင့် စက်တင်ဘာလ ကုန်ပိုင်းက လေးကြိမ် စုစုပေါင်း ငါးကြိမ်တင်ပြရာ COVID-19 ပြီးမှ စိုက်ထူခွင့်ပေးမည်ဟု မြို့နယ်စည်ပင် အမှုဆောင်အရာရှိကပြောကြား ကြောင်း UNDP ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသန့်ဇင်က The Daily Eleven သတင်းစာကို ပြောကြားသည်။“ကျွန်တော်က ပြောတာပေ့ါ။ ဒီ COVID ကာလဆိုတာ ထပ်တိုးရင်လည်း တိုးလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့က မြင်နိုင်တဲ့ အရာမှမ ဟုတ်တာ။ မှန်းလို့ရတဲ့ အရာမှမဟုတ်တာ၊ ထပ်တိုးလာခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဖို့ အောင်နိုင်ရေးဆိုင်း ဘုတ်တွေ ထောင်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့၊ အဲဒါ ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်ဘူးတဲ့။ COVID ကော်မတီကနေထုတ် ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ သွားတာတဲ့”ဟု ကော့မှူးမြို့နယ် အမှတ် (၂) မဲဆန္ဒနယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တွင် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသန့်ဇင်က ပြောကြားသည်။
UNDP ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဆိုင်းဘုတ်များကို ကော့မှူးမြို့နယ် ဈေးအနီးနှင့် မြို့သစ်ထိပ်နီးတွင် နှစ်ခု စိုက်ထူရန် ရည်မှန်းထားသော်လည်း စည်ပင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိသေး၍ ကိုယ်စားလှယ်လာင်း ဆိုင်းဘုတ် တစ်ခုမှ စိုက်ထူနိုင်ခြင်း မရှိသေး ကြောင်း သိရသည်။ ပါတီ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခွင့်ရရေးအတွက် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ထံ ပထမအကြိမ် တင်ပြရာ စည်ပင်တာဝန်ရှိသူများက စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ဆိုင်းဘုတ် စိုက်ထူမည့်နေရာကို လိုက်လံ ကြည့်ရှုပေးမည်ဟု ပြောကြားပြီးမှ COVID ကြောင့် ဆိုင်းဘုတ် စိုက်ထူခွင့် မပြုကြောင်း ပြန်လည် ပြောကြားလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကော့မှုးမြို့နယ် UNDP ပါတီဝင် ဦးသောင်းဌေးက ပြောကြားသည်။
UNDP ပါတီအနေဖြင့် ကော့မှူးမြိုနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဒေးဗစ်လှမြင့်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အမှတ် (၂) မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဦးသန့်ဇင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကော့မှူးမြို့နယ် ပါဝင်သည့် ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ပါတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နော်အုန်းလှ ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ https://news-eleven.com /article/194965
၂၅။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် အေအေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်၊ ဒေသခံများ ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရခိုင့်တပ် အေအေတို့ တိုက်ပွဲများ သုံးရက် ဆက်တိုက်ကြာဖြစ်ပွားနေရာ အနီးအနားရှိကျေးရွာနေသူများ ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုများရှိနေကြောင်း ဒေသတွင်းမှလာသော သတင်းများအရသိရသည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့၏ အရှေ့ဘက်တွင်ရှိသော အိမ်ခြေ ၃၀ ဝန်းကျင်စီရှိ ဝမ်းတွင်း၊ ခမီချောင်းကျေးရွာများမှ ရွာသားများသည် ပြင်ရှည်ရွာနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့ပေါ်သို့ ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြရသည်ဟု ဆိုသည်။
“အခုလည်းဖြစ်နေတယ်။ လက်နက်ကြီးတွေကျတယ်။ ဆက်မနေရဲတော့ဘူး။ ရွာသားတွေ အကုန်လုံးထွက်ပြေးလာကြ ရပြီ။ အခု ပြင်ရှည်ကို ရောက်နေကြပါတယ်။ စားရေးသောက်ရေးက အခက်ခဲရှိနေတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ သုံးရက်ရှိနေပြီ။ ပြတ်တောက်ပြတ်တောက်ဖြစ်တာ။ ဆက်တိုက်တော့ မဟုတ်ဘူး။”ဟု ဝမ်းတွင်းရွာသား ဦးသာဇံလှက မဇ္ဈိမကို တယ်လီ ဖုန်း မှ တဆင့်ပြောသည်။ လတ်တလောတွင် ဝမ်းတွင်းရွာသားအားလုံးမှာ တစ်မိုင်ခန့်ဝေးသည့် ပြင်ရှည်ကျေးရွာသို့ တိမ်းရှောင်လာကြပြီး ခမီချောင်းကျေးရွာသားများမှာမူ ဘူးသီးတောင်မြို့ပေါ်မှ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတချို့တွင် ခိုလှုံနေကြ သည်။ ပြင်ရှည်ကျေးရွာသို့ ထွက်ပြေးလာသည့် မမျိုးချစ်သန့်က “ ပစ်သံကြားလို့ ပြေးလာတာပေါ့။ အဖေပဲ အိမ်မှာကျန်ခဲ့ တယ်။ လမ်းမှာတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ အပေါ်က လေယာဉ်ဝဲနေတာတော့ ကြောက်တယ်။ လမ်းကလည်း မပေါက်တော့ ရေတွေအင်းချောက်တွေကူးပြီးသွားရတယ်။ အမေကလည်း အိုနေပြီ။ ဒါကြောင့် ကျမအစ်ကိုသားတစ်ယောက်က အမေကို တွဲယူခဲ့ရတယ်။ ကျမတို့မှာ မိသားစု ခြောက် ယောက်ပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
ကူညီကယ်ဆယ်မှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အမြန်ဆုံး စီစဉ်နေကြောင်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးမောင်ကျော်ဇံက ပြောသည်။ ခမီချောင်းကျေးရွာ၏ အနောက်တောင်ဖက် မီတာ ၇၀၀ ခန့်ဝေးသည့်နေရာသို့ မြန်မာ့ တပ်မတော်က ဝင်ရောက်လာသောကြောင့် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အေအေက အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ သို့သော် တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဘက်က ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေး ပါ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/74291
ပူတာအိုခရိုင် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်အတွက် မဲရုံသုံး ပစ္စည်းများကို ရဟတ်ယာဉ်နှင့် လား များဖြင့် ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်ဟု ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် မှ သိရသည်။ ပူတာအိုခရိုင်တွင် ပူတာအိုမြို့နယ်၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ နောင်မွန်းမြို့နယ်၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် နှင့် မချမ်းဘောမြို့နယ် တို့ ပါဝင်သည်။ ကျန်သည့် ၄မြို့နယ်တွင် ကားလမ်းများဖြင့် ပို့ဆောင်နိုင်သော် လည်း ခေါင်လန်းဖူးမြို့နယ်တွင် လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ရဟတ်ယာဉ်နှင့်လားများဖြင့်သာ ပို့ဆောင် ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ အရာရှိဒေါ်အိအိဖြိုးကပြောသည်။“လောလောဆယ်တော့ မဲရုံအသုံး အဆောင်တွေကို ပူတာအိုမှာပဲထိန်းသိမ်းထား သေးတယ်။ အဲပစ္စည်းတွေကို ပို့ဖို့အတွက်က အောက်တိုဘာလ ဒုတိယ အပတ်လောက်မှရမှာ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ပို့ဖို့ စီစဉ်ထား တယ်။ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ပို့ဖို့ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို စာတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ ဒုတိယအပတ်မှာ ပို့နိုင်အောင်လုပ်ဖို့တော့ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ကရာသီဥတု အခြေ အနေကလည်း ကြည့်ရသေးတယ်။”ဟု ဟု ဆိုသည်။
ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တွင်မူ ကားလမ်းများမရှိသည့်အပြင် ခေါင်လန်ဖူးထိ ရဟတ်ယာဉ်သွားရန်အဆင်မပြေသည့်အတွက် ရဟတ်ယာဉ်များသည် ဝူယန်ကျေးရွာထိ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ဝူယန်မှတစ်ဆင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်ထိ လား များဖြင့် ပြန်လည်သယ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တွင်သုံးမည့် မဲရုံလက်မှတ်သုံးပစ္စည်းပို့ဆောင်ရန် အတွက် ငွေကြေး ကျပ်၂၆ သိန်းကျော်သုံးစွဲရန် လျာထားပြီး အဆိုပါ မဲရုံသုံး ပစ္စည်းများတွင် မဲလက်မှတ်နှင့် မှင်အိုးများ အခြားပစ္စည်းများအားကျန်နေသေးကာ ယင်း သုံးစွဲမည့် ငွေကြေး ၂၆ သိန်းတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြော သည်။
ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ဒုတိယအကြိမ်မဲစာရင်းကြေညာရာတွင် ၈၅၆၀ ရှိပြီး ပထမ အကြိမ်မဲစာရင်း ထုတ်ပြန်ရာတွင် ၈၄၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သည်။ မဲရုံပေါင်း ၃၆ ရုံရှိကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိချိန်တွင် မဲရုံအသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် ပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ကာ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်သာ ကျန်တော့ သည့် အတွက် အောက်တိုဘာလအတွင်း တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး(ခွဲ)မှ အရာရှိဦးထွန်းအောင်ခိုင်၏ ပြောဆိုချက်အား ကချင်ပြည်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဌာနမှ သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/08/l2-2/
မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်နေတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ မဲပေးနိုင်ဖို့အတွက် အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွေမှာ လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မနည်း မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်နေသူတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ အမြဲတမ်းနေရပ်ကို သွားရောက်ပြီး မဲပေးလိုခြင်းမရှိပါက မိမိတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်က ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို မဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မဲ ပေး နိုင်ဖို့အတွက် မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်နေသူတွေဟာ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ကနေ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့ နောက် ဆုံးထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကျေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွေမှာ ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ရက်ပိုင်းကိုးဆယ်ထက်မနည်း နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မဲပေးခွင့်ရဖို့အတွက် ပုံစံ (၃-က)နဲ့ လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒီဟာ ကိုတော့ အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးလျှောက်ရမှာပါ”လို့ မော်လမြိုင်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဌ ဦးဌေးလွင်က ပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ခရီးသွားကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတဲ့ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ အမြဲတမ်းနေရပ်ကို ပြန်ပြီး မဲပေးဖို့ အခက်အခဲ နေရှိနေတာပါ။ ရေးမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်သူတွေများတဲ့အတွက် သူတို့ မဲပေးခွင့်ရရှိအောင် ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
“ရေးတောင်ပိုင်းမှာက ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ တော်တော်များတယ်။လက်ရှိဥပဒေအရ ရက်ပေါင်းကိုးဆယ်နေထိုင်ရင် မဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေအတိုင်း မဲပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးနေတာတွေရှိတယ်”လို့ ရေးမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မင်းအောင်ထူးက ပြောပါတယ်။ ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လျှောက်ထားသူတွေရဲ့ မဲစာရင်းကိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီ တစ်ပတ်အလိုမှာ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်/ကျေးကော်မရှင်ရုံးတွေမှာ ကပ်ထားကြေညာပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံ လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76100
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသုံးခုတွင် မဲရုံဖွင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗန်းမော်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မ ရှင်ရုံးမှ သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်လေးမြို့နယ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းပေါင်း ၂ဝ ခုရှိပြီး မန်စီမြို့နယ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသုံးခုတွင်သာမဲရုံထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“မန်စီမြို့နယ်တွင်းမှာ စစ်ရှောင် စခန်းက သုံးခုရှိတယ် အဲစစ်ရှောင်စခန်းတွေက ရပ်/ကျေး၊ ရပ်ကွက်မှာထားမယ့် မဲရုံနဲ့ ဝေးတဲ့တွက် မဲဆန္ဒရှင်တွေမဲ လာ ပေးဖို့ ခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မဲရုံသုံးရုံထားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ လက်ရှိချိန်ထိတော့ တစ်ခြားမြို့နယ်က ထားဖို့မ ရှိသေးပါဘူး။ ကော်မရှင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်အရ စစ်ရှောင်တွေအနေနဲ့ မိမိနေထိုင်တဲ့ ရက်ကွက်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာဘဲ မဲသွားပေးရ မှာဖြစ်တယ်”ဗန်းမော်ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ထွန်းကပြောသည်။ မဲရုံထားရှိမည့် မံစီမြို့ မှ စစ်ရှောင်စခန်းသည် လူဦးရေအားဖြင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၄၄၆ ရှိပြီး လူဦးရေစာရင်းအားဖြင့် ၇၂၀၆ ရှိကာ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၄၉၇၅ ရှိကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ စခန်းမှာတော့ မဲရုံသီးသန့်ထောင်ပေးမယ်လို့တော့ ပြောကြတယ်။ဒါပေမယ့် မဲထည့်ဖို့ကကျနော်တို့ စစ်ရှောင် တွေရဲ့အရေးမဟုတ်တော့ဘူး ၂၀၁၅ တုန်းက ကျနော်တို့ NLD ကိုမဲထည့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့နေရပ်ပြန်ဖို့က ဘာမှ မထူးလာဘူး။ ဒါကြောင့် လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ထည့်ဖို့မသေချာသေးဘူး။ စခန်းမှာမဲရုံလာထားပေ မယ့် စစ်ရှောင်တွေများစုက မဲထည့်ဖို့စိတ်မဝင်စားကြဘူး”ဟု ဗန်းမော်မြို့တွင်းရှိ ရောဘတ်စစ်ရှောင်စခန်းမှ စခန်းတာဝန်ခံ ဆရာအင်ဒေါင်တန်ဂွန်းက ပြောသည်။ ယင်းရောဘတ်စစ်ရှောစခန်းတွင် အိမ်ထောင်စုအားဖြင့် ၅ဝဝ ကျော်နေထိုင်ပြီး ကျေးရွာပေါင်းများဆုံး စုနေထိုင်ရာ စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကာ စခန်းတွင်မဲစာရင်းလာရောက်ကပ်ထားသော်လည်း စစ်ရှောင်များ အနေဖြင့် မဲစာရင်းကြည့်သူလွန်နည်း ပါးကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
ဗန်းမော်ခရိုင်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စစ်ရှောင်စခန်းများမှာ ဗန်းမော်မြို့နယ်တွင် စစ်ရှောင်စခန်း ၆ ခု၊ မံစီမြို့နယ်တွင် သုံးခု၊ မိုးမောက်မြို့နယ်တွင် ကိုးခု၊ ရွှေကူမြို့နယ်တွင် နှစ်ခုရှိပြီး လူဦးရေအားဖြင့် ၁၇၃၂၁ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ “ကျမတို့ ကျတော့ ခုချိန်ထိ မဲရုံကိစ္စတွေ မဲထည့်မယ့်ကိစ္စဘာမှမသိရသေးဘူး။ ရပ်ကျေးကလည်း စာရင်းတော့ လာကောက် သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မဲစာရင်းလာကြည့်ဖို့ သေသေချာချာပြောတာတောင်မရှိဘူးဆိုတော့ စစ်ရှောင်တွေလည်း မဲစာရင်း ကြည့်ဖို့ မပြောထားဘူး”ဟု ထွယ်ဆန်စစ်ရှောင်စခန်းမှ တာဝန်ခံဒေါ်ဘောက်ခေါန်က ပြောသည်။ https://burmese. kaဘchinnews.com/ 2020/10/07/%e1%80%97%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1
လက်ရှိ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါပြန့်နှံ့နေသည့်ကာလအတွင်း မွန်လူငယ်များအကြား မူးယစ်ဆေးပြားများထက် ဒေသတွင်း ထွက်ရှိသော ဘိန်းစာရွက်ကို ပို၍သုံးစွဲလာကြောင်း ကျေးရွာအကြီးအကဲများက ပြောသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသွား လာမှု အခက်အခဲနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် မူးယစ်ဆေးပြား ဝယ်ယူသည့်စရိတ် မရှိသည့်အတွက် ထိုင်းဘာသာဖြင့် “ဗိုင်ခတွန်” ဟုခေါ်သော ဘိန်းစာရွက်ကို အရည်ပြုတ်သောက်၍ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း မုဒုံမြို့နယ်၊ နိုင်လှုံကျေးရွာ အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ＂နိုင်စိုးနွယ်＂က ဆိုသည်။“အလုပ်အကိုင်ရှားပါးလာပြီး ဝင်ငွေမရှိဖြစ်လာတယ် ဆေးပြားဝယ်ဖို့ မတတ်နိုင်ကြဘူး၊ စာသင်ကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားတယ် ကျောင်းသားတွေလည်း အလုပ်မရှိသလို အားအားယားယား ဖြစ်နေကြတယ်၊ လူ စုပြီး ဘိန်းစာရွက်ကိုပြုတ်ပြီး အချိုရည်မျိုးစုံနဲ့ဘာတွေပါမှန်းမသိပါဘူး၊အဲဒီလိုသုံးစွဲနေကြတယ်”ဟု နိုင်စိုးနွယ်ကပြောသည်။
“မူးယစ်ဆေးဝါး မသုံးကြဖို့ ရွာလှည့်ပြီး လိုက်သတိပေးတာ ရှိတယ်။ အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေ ဘိန်းစာရွက်ကို သောက် သုံးတာ အရမ်းများလာတယ်၊ ဆေးပြားသုံးတာလည်း ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘိန်းစာရွက်အရည် သုံးစွဲတာက ပိုများတယ်” ဟု ပြောသည်။ အလားတူ ကျေးရွာများအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး လက်လီဖြန့်ဖြူးနေသူများကို သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားခဲ့ သော်လည်း ဖမ်းဆီးမှုမရှိဟု ရေးမြို့နယ် ကော့ဒွတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နိုင်မောင်က ဆိုသည်။ “ကျနော်တို့က ဌာန ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွေမှာ တင်ပြတယ်၊ ဖမ်းရမယ့်တာဝန်က သူတို့တာဝန်ပါ ဒါပေမယ့် ဖမ်းဆီးမှုမရှိဘူး၊ ဘိန်းစာရွက် လည်း ပိုပိုများလာတယ်” ဟု ပြောသည်။
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ကျုံကဒတ် ကျေးရွာ အနီး၌ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က မောင်သူရလွင် (၂၀) နှစ်နှင့် မောင်ထက်လင်းအောင်(ခ)ဖေသန်း (၁၉)နှစ်တို့ထံမှ ဘိန်းစာရွက်အလေး ချိန် (၅၀၀)ဂရမ်ခန့် ရှာဖွေတွေ့ရှိဖမ်းဆီးခဲ့ ကြောင်း၊ စခန်းကြီးကျေးရွာ အဝင်လမ်းတွင် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့က ဂျော့ဓမင်းဆိပ်၊ ထင်းရှူးကျေးရွာနေထိုင်သူ မောင်ထူး(၃၈)နှစ်ထံမှ ပန်းရောင်စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေးပြား(၁၁)ပြားနှင့် ဘိန်းစာရွက်(၂၀)ကျပ်သားခန့် ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သံဖြူဇရပ်မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/10/07/%e1%80%80%e1%80%ad% e1%80%af%e1%80%97%e1%
၃၀။ မြ၀တီမြို့ရှိ ကိုဗစ်လူနာ(၃) ဦး ရောဂါပျောက်ကင်း၍ ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရသော်လည်း အမှုဆက်ရင်ဆိုင်ရမည်
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကုသမှုခံယူနေသော ရန်ကုန်ပြန် Covid-19 အတည်ပြုလူနာ (၃)ဦးမှာ ရောဂါပျောက်ကင်းကာ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရသော်လည်း ၎င်းတို့အား မြဝတီ မြို့မရဲ စခန်းတွင် (ပ)၅၀၉/ ၂၀၂၀ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅/၃၀(က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထား၍ အမှုဆက်ရင်ဆိုင်ရဦးမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မြဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၄ ဦးရှိသည့်အနက် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆေးဝါးကုသ၍ ပြန်လာသည့် မြဝတီဆေးရုံတွင် အသွားအလာကန့်သတ်ထားသူ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားမှာ ကင်ဆာ ရောဂါအခံဖြင့် ကွယ်လွန် သွားပြီဖြစ်ပြီး ကျန်လူနာ ၃ ဦးကလည်း ရောဂါပိုးကင်းစင်သွားပြီဖြစ်၍ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရကြမည်ဟု မြဝတီခရိုင် ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာနန္ဒဝင်းက ပြောသည်။“ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ လူနာအမှတ် case.9132 မြဝတီမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် ဇနကလမ်းက အသက်(၂၁)နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရပြီးဖြစ်သလို မနက်ဖြန် (၈)ရက်နေ့မှာလည်း လူနာအမှတ် case 10473 သင်္ကန်းညီနောင် မြို့သစ် ၇ လမ်းက အသက်(၄၇)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လည် ရောဂါပိုးကင်းစင်ပြီးဖြစ်၍ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့် ပြုသွားမယ်”ဟု ဒေါက်တာနန္ဒဝင်းက အတည်ပြု ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိုဗစ် အတည်ပြုလူနာဖြစ်ခဲ့သူ ၃ ဦးမှာ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို မလိုက်နာသည့်အတွက် တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာ အောင်က ပြောဆို ခဲ့သည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%bb% e1%80%9 9%e1%81%80%e1%80%90%e1%80%ae
ဆိုးရွားသည့် ရေကြီးရေလျံမှုကြောင့် ရေဘေးဒဏ်ကြုံတွေ့ရသော လီဒိုလမ်းမပေါ် ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာတွင် ချောင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဒေသခံများ၏ သဘောတူညီမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု ဒေသခံများ ပြောသည်။ ရှဒူးဇွပ် (Ja Htu Zup) ကျေးရွာရှိ မိုးကောင်းချောင်းနှင့် ရှဒူးခ ချောင်းဆုံ ရေကြောင်းတစ်လျောက် ရွှေတူးဖော်မှုကြောင့် ချောင်းအလယ်တွင် မြေစာပုံအဖြစ် ကျန်ရှိနေမှုကို ရှင်းလင်းရန်အတွက် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ယခုလမှ စတင်ရှင်းလင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ချောင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ဆောင်မည့် ကုမ္ပဏီက ချောင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းသာမက ရွှေတူးဖော်ရေး ပါ လုပ်ကိုင်နိုင်သဖြင့် ပွင်းလင်းမြင်သာမှုရှိစေချင်သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။“သူတို့အနေနဲ့ ချောင်းရှင်းလင်းရေးဖို့ဝင်လာတာက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတော့ ဒေသခံ တွေအတွက် ဆိုးကျိုး တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒေသခံတွေကမသိကြဘူးလေ။ တစ်ချို့က ချောင်းရှင်းလင်းရေးအတွက် ဝင်လာမှန်းတောင်သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုချောင်း ရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ့် ကမ်းစပ်အနီး တဝိုက်မှာက ဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးအတွက် အားထား လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရာသီ သီးနှံစိုက်ခင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲ့ဒါကို သူတို့က ဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးဖို့ ဘယ်သူက တာဝန်ယူ ပေးမှာလဲ”ဟု ပြောဆိုသည်။ မိုးကောင်းချောင်းနှင့် ရှဒူးခချောင်း ၂ ခု ရှင်းလင်းရန်အတွက် ထွန်းရတနာသိန်း အမည်ရှိ ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီကို ဘက်ဟိုး (၂၂)စီး၊ ဝိလူဒါ (၂)စီးနှင့် မြေသယ်ယာဉ် အစီး ၄ဝ စသော စက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် ၇လအကြာ ရှင်းလင်းရေးလုပ်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုထားကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရ သယံဇာတရုံးမှ သိရသည်။
ရှဒူးဇွပ်ဒေသခံ ရပ်မိရပ်ဖများ၏ တင်ပြတောင်းဆိုချက်အပေါ် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ခွင့်ပြုမိန့်ချ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးဒရှီလဆိုင်းက KNG သတင်းဌာနကို ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ချောင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့ကိုဒေသက ရပ်မိရပ်ဖများနဲ့ ချောင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ့် ကုမ္ပဏီက ညိနှိုင်းအဆင်ပြေမှု ရှိတဲ့အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရကိုတင်ပြခဲ့တယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရကလည်း ဒါကို ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ပေးရ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်း ကျေးရွာအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးလိုတဲ့အကြောင်း တင်ပြလာတဲ့အတွက် ယုံကြည် စွာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာတွင် နိုင်ငံတော်အခွန်လုံးဝမရရှိဘဲ တရားမဝင် ရွှေတူး ဖော်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်အများ ရှိနေသောကြောင့် ချောင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်း ထိရောက်မှုရှိ မရှိကို ရာနှုန်းပြည့် အာမမခံနိုင်သေးကြောင်း သယံဇာတ ဝန်ကြီး ဦးဒရှီလဆိုင်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ ယခုနှစ်အတွင်း ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာတွင် ရေကြီးရေလျံမှု ၃ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်း ရပ်ကွက် ၄ ခုစလုံးရှိ နေအိမ်များသည် ၇ ပေခန့်ထိ နှစ်မြုပ်သွားကာ အိမ်ခြေ ၃၀ ခန့်ကလည်း မျော်ပါသွားခဲ့ သည်ဟု ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ https://burmese .kachinnews.com/2020/10/07/jahtu-zup/
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက် ခံရမှုဖြင့် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေသူ ပြည်နယ် ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာမှ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် ညွန်ကြားရေးမှူး ၁ ဦးမှာ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ ခန့်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါသေဆုံးသူမှာ အသက်ရှုကျပ်သဖြင့် အရေးပေါ်အခန်းတွင် အောက်ဆီဂျင်ပေး၍ ကုသမှုခံယူရင်း ယနေ့ မနက်ပိုင်း တွင် သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဇော်လွင်က ပြောသည်။ ဒေါက်တာဇော်လွင်က “ဒီနေ့ တယောက်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ မနက် ၉ နာရီလောက်မှာ ဆုံးသွားတာ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် စစ်တွေပြည်သူဆေးရုံကြီးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေရှိသူ လူပေါင်း ၉၀၀ တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရာ ရောဂါ ပျောက်ကင်းသည့်အတွက် ဆေးရုံဆင်းခွင့် ရရှိသူ ၈၅၀ ကျော် ရှိခဲ့ရာ ကျန်လူပေါင်း ၉၀ ကျော်မှာ ကုသမှုခံယူနေရဆဲ ဖြစ် ကြောင်းလည်း စစ်တွေဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက်ခံသူများထဲတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးစီးဌာမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအို ဝန်ထမ်းများပါ ပါဝင်ပြီး အများဆုံး ရောဂါ ကူးစက်ခံရသည့် မြို့နယ်များတွင် စစ်တွေမြို့ နယ်နှင့် ကျောက်ဖြူ မြို့နယ်တို့ ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်ကတော့ ပြည်သူများအနေဖြင့် မလိုအပ်ပဲ အပြင် မထွက်အောင် စည်းကမ်းများ ထုတ်ပြန်ပြီး Mask မတတ်သည့် ပြည်သူများနှင့် စည်ကမ်းမလိုက်နာသည့် ပြည်သူများ အပေါ် အသိပညာပေးခြင်း၊ ဒဏ်ရိုက်ခြင်း၊ ဝန်ခံဂတိများထိုးကာ ပြန်လွတ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ကိုဗစ်ရောဂါကူး စက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အခြေအနေရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
သို့သော်လည်း ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုများ ဆက်လက်ရှိနေသေးသည့်အတွက် လုံးဝ စိတ်ချရသည့် အခြေအနေ မရှိသေးဘဲ လက်ဆက်စောင့်ကြည့်ရမည့် အခြေအန ရှိနေသေးကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ အစည်းအရုံးမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်ထွန်းက ပြောသည်။ ဦးဇော်ဇော်ထွန်း က “ကိုဗစ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ အမှန်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကူးစက်မှုတွေက ရှိနေသေးတော့ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေ ရှိသေးတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။ https://burma.ir rawaddy.com/news/2020/10/07
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြင်ရှည်ကျေးရွာက ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်နှစ်ဦး သေဆုံးသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက် လို့ ဒေသခံတွေ ပြောကြားချက်နဲ့ တပ်မတော် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ကွဲလွဲနေပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ တပ်က ခေါ်သွားပြီ နောက် သေဆုံးတာလို့ ဒေသခံတွေကပြောပေမယ့် တပ်ကတော့ ဒါဟာစွပ်စွဲချက်သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြင်ရှည်ရွာအပြင်မှာ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က နွားကျောင်းနေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာကလေးတွေနဲ့ လူကြီး စုစုပေါင်း ၁၅ ယောက်ကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုက ခေါ်သွားရာကနေ ကလေးနှစ်ယောက်သေဆုံးပြီး လူကြီး တစ်ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါ တယ်။ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် အရသူရာ နဲ့ အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ် အနဝါဟူဆမ် ဆိုတဲ့ ကလေးနှစ် ယောက်ဟာ တပ်မတော်နဲ့ AA နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြားမှာ သေဆုံးခဲ့ပြီး အသက် ၃၀ အရွယ် ဆေရနိုလ် အာမိန် က ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ RFA က အဆက်အသွယ်ရတဲ့ ပြင်ရှည်ရွာသား ၄ ယောက်နဲ့ ပေါ်တာဆွဲ ခေါ်ခံထားရာကနေ ပြန်လွတ်လာတဲ့ ရွာသားတစ်ယောက်က၊ သူတို့ကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်း က လမ်းပြ အဖြစ်ခေါ်သွား တာလို့ အခိုင်အမာပြောပါတယ်။
တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်း ကတော့ တပ်မတော်က ပေါ်တာဆွဲသွားတာ မဟုတ်ဘဲ ပစ်ခတ်သံကြားလို့ အဲဒီရွာဘက် သွားရောက်စစ်ဆေးရာမှာ AA အဖွဲ့ ပစ်ခတ်ထားလို့ နွားကျောင်းနေတဲ့ ကလေး နှစ်ဦး သေဆုံးနေတာ တွေ့ရပြီး၊ ဒဏ်ရာရရှိထားသူ တစ်ယောက်ကို တပ်မတော်က ကူညီပေးခဲ့တာလို့ အောက်တိုဘာ ၆ ရက် နေ့က RFA ကိုပြော ထားသလို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကနေလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ လမ်းပြအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေထဲက တစ်ဦးကတော့ RFA ကို အခုလိုပြောပါတယ်။ ” နွားကျောင်းနေတဲ့နေရာမှာ အပစ်ခံရ တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ စစ်တပ်ကခေါ်သွားပြီး လမ်းမှာ အပစ်ခံရတာပါ၊ တပ်မတော်ကပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး” သူတို့ ၁၅ ယောက် ကို ပစ္စည်းတွေ မသယ်ခိုင်းဘဲ တယောက်လက် တယောက်ကိုင်ပြီး ရှေ့ကနေ သွားခိုင်းနေရင်းကနေ နာရီဝက် လောက်အကြာမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်တာလို့၊ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ ပြင်ရှည်ရွာသားက ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်က ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ၇ ယောက်ပါပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အထက် ၈ ယောက် ပါဝင်တယ်လို့ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/Army-denies-for-Rohingya-children-killed-in-Buthidaung-100820201 90 358.html
၁။ ကြောကျမဲတိုကျပှဲ အစိုးရတပျ စဈရဟတျဖွငျ့ လကျနကျကွီး ပဈခတျ
၂။ RCSS အန်တရာယျပွုမညျကို စိုးရိမျ၍ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ရပျဆိုငျးထား ဟု TNP ပွော
၃။ မိုးကောငျးမွို့နယျ စာသငျကြောငျးမွတှေငျ ဘုနျးကွီးကြောငျးဆောကျလုပျရနျကိစ်စ ဒသေခံတခြို့ ကနျ့ကှကျ
၄။ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အမြိုးသမီးကို အနိုငျရနိုငျသညျ့နရောမြိုးထကျ ဟနျပွပွိုငျခိုငျးခွငျးမြိုးတှရေ့ဟု WLB ပွော
၅။ ကြောကျမဲ တိုကျပှဲကွောငျ့ စဈရှောငျ ၃၀၀၀ ဝနျးကငျြ ထိရှိလာ
၆။ ပူတာအိုခရိုငျ၌ မဲဆန်ဒရှငျ ၆၀,၀၀၀ ကြျောရှိပွီး ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲထကျပိုမြားလာ
၇။ ကြောကျကွီးတှငျ KPP အငျအားထောငျခြီ လှညျ့လညျမဲဆှယျ
၈။ ပလကျဝမွို့နယျအတှငျး ကြေးရှာပေါငျး ၂၀၀ ကြျော ဆနျပွတျလပျဟုဆို
၉။ ကခငျြပွညျနယျတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ နာဂ အမြိုးသားပါတီ
၁၀။ အမတျတဈဦးကို တရားစှဲမယျလို့ ကယားလှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌ ပွော
၁၁။ ထိုငျးရောကျ ကရငျတိုငျးရငျးသား သုံးထောငျကြျော ကွိုတငျဆန်ဒမဲ ပေးသှားမညျ
၁၂။ ပွညျလုံးကြှတျအထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ “ဖယျကွဉျမရှိမှ လှတျမြှတ” အစီရငျခံစာကို မှနျပွညျလူ့အခှငျ့အရေး ဖောငျဒေးရှငျးထုတျပွနျ
၁၃။ COVID-19 ကူးစကျရောဂါကာလ ဖွဈသညျ့အတှကျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးဆငျးရာတှငျ အခကျအခဲမြားတှကွေုံ့နရေဟု မှနျညီညှတျရေးပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျး ပွောကွား
၁၄။ ကိုဗဈကာကှယျရေး RCSS/SSA ထိနျးခြုပျသညျ့ ကြေးလကျမြားအတှငျး ပွငျပလူဝငျထှကျသှားလာခှငျ့မပွု
၁၅။ ဗနျးမျောခရိုငျတှငျ မဲဆန်ဒရှငျစာရငျး ၈၀၀၀ ကြျောတိုးလာ
၁၆။ ဒသေတှငျး တိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေးပါတီမြား ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး မှနျ၊ ပအိုဝျးနှငျ့ ကရငျ လူငယျမြား အလှတျသဘော တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့
၁၇။ မိုငျရှလှေတေီာလျ ရုပျအလောငျး လမျးဘေးမွမွေုပျခိုငျးမှု သကျဆိုငျသူမြားကို ထိရောကျစှာအရေးယူရနျ ခငျြး ကြောငျးသား/လူငယျ (၁၃) ဖှဲ့ကတောငျးဆို
၁၈။ တိုကျပှဲမြား ရပျတနျ့ရနျ အရပျဘကျအဖှဲ့မြားနှငျ့ ဒသေခံမြား တောငျးဆို
၁၉။ ရှကေုက်ကိုလျ စီမံကိနျးနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ တပျအရာရှိကွီးတခြို့ စုံစမျးစဈဆေးခံနရေ
၂၀။ ဘီးလငျးတှငျ ကြေးရှာ ၅ ရှာက ပွညျသူ ၁၀၀၀ ခနျ့ မဲပေးခှငျ့မရ
၂၁။ ခငျြးမှာ ကုနျတငျယာဉျမောငျးနဲ့ နောကျလိုကျတှေ ကိုဗဈ စဈရမညျ
၂၂။ မိုးညှငျးခရိုငျတှငျ မသနျစှမျးမြား မဲပေးရနျ မဲရုံပေါငျး ၁၄၀ ရှိ
၂၃။ မှနျညီညှတျရေးပါတီက ရနျကုနျတှငျ ၆ နရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ
၂၄။ ကော့မှူးမွို့နယျတှငျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး မဲဆှယျဆိုငျးဘုတျမြားကို မွို့နယျစညျပငျက COVID-19 အကွောငျးပွခကျြဖွငျ့ စိုကျထူခှငျ့ မပေးဟု UNDP ပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား ပွောကွား
၂၅။ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ အအေေ တို့ တိုကျပှဲဖွဈ၊ ဒသေခံမြား ဘေးလှတျရာ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျ
၂၆။ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျအတှကျ မဲရုံသုံးပစ်စညျးမြားကို ရဟတျယာဉျနှငျ့ လား ဖွငျ့ ပို့ဆောငျမညျ
၂၇။ မဲဆန်ဒနယျပွငျပ မဲပေးခှငျ့ အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျနေ့ နောကျဆုံးထား လြှောကျရမညျ
၂၈။ ဗနျးမျောခရိုငျရှိ စဈဘေးရှောငျစခနျးသုံးခုတှငျ မဲရုံဖှငျ့ရနျလြာထား
၂၉။ ကိုဗဈကပျရောဂါကာလအတှငျး မှနျလူငယျမြား ဘိနျးစာရှကျသုံးစှဲမှုပိုမြားလာ
၃၀။ မွဝတီမွို့ရှိ ကိုဗဈလူနာ (၃) ဦး ရောဂါပြောကျကငျး၍ ဆေးရုံဆငျးခှငျ့ရသျောလညျး အမှုဆကျရငျဆိုငျရမညျ
၃၁။ ရှဒူးဇှပျခြောငျးရှငျးလငျးမှုကို ထိရောကျစှာဆောငျရှကျစလေိုကွောငျး ဒသေခံမြားပွော
၃၂။ စဈတှတှေငျ ကိုဗဈဖွငျ့ ကြေးလကျ လမျးဦးစီးဌာန ညှနျမှူး ၁ ဦး သဆေုံး
၃၃။ ရိုဟငျဂြာကလေးနှဈဦးသဆေုံးမှု တပျနဲ့ဒသေခံ ပွောဆိုခကျြ ကှဲလှဲ
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး အစိုးရတပျမတျောမှ စဈရဟတျယာဉျသုံးပွီး လကျနကျကွီးဖွငျ့ ပဈခတျခဲ့ ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ အစိုးရတပျမတျောသညျ ယမနျနေ့ (အောကျတိုဘာ ၇)ရကျ နလေ့ညျ ၁ နာရီဝနျးကငျြတှငျ စဈ ရဟတျယာဉျ ၂ စငျးဖွငျ့ တပျမတျောသားမြားအတှကျ ရိက်ခာနှငျ့အငျအားဖွညျ့တငျးခငျြပေးပွီး အပွနျလမျးတှငျ ရဟတျယာဉျ ပျေါမှ လကျနကျကွီးပဈခခြဲ့ကွောငျး RCSS/SSA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွော သညျ။“ မနကေ့ ရဟတျယာဉျ နဲ့ ၂ စီးလာတယျ။ နောကျ လကျနကျလာပဈသှားတယျ။ အဲ့နရောက ကနြျောတို့မနဘေူး။ သူတို့က ပွညျသူတှကေို ထိတျလနျ့အောငျလုပျနတော။ ပွညျသူတှေ ထှကျပွေးအောငျလုပျနတေဲ့သဘောပါ”ဟု ဒုဗိုလျမှူး ကွီး အုမျခေး က ပွောသညျ။
ယမနျနေ့ စဈရဟတျယာဉျပျေါမှ ပဈခလြိုကျသညျ့ လကျနကျကွီးသညျ တောပိုငျးတှငျမကဘြဲ ရှာ နှငျ့မလှမျးမကမျးနရောတှငျ ကသြဖွငျ့ အမြိုးသမီးတဦး လကျနကျကွီးကညျြစ အနညျးငယျ ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။“မနကေ့ ကတြဲ့ လကျနကျကွီးက လူနတေဲ့အိမျနဲ့ နညျးနညျးဝေး ကတြယျ။ လကျနကျကွီးကလြို့ စငျလာတဲ့ ကြောကျခဲက အမြိုးသမီးတဦး ကိုထိတာပါ။ ကြောကျခဲစထိတဲ့ဒဏျရာပါ။ မပွငျးထနျပါဘူး။ ကနြျောတို့ သှားချေါတာတောငျ လိုကျမလာဘူး”ဟု ကမျးလငျ့ လကျမြား လူမှုကူညီရေးအသငျး (နောငျပိနျ) မှ ဥက်ကဌ စိုငျးနအေောငျက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ ထိုစဉျက အစိုးရတပျမတျောသညျ စဈရဟတျယာဉျဖွငျ့ စဈအငျအား (၁၀၀)ကြျောအား ကြောကျမဲမွို့နယျ ပုံဝိုးကြေးရှာအရှဘေ့ကျ တောငျကုနျးပျေါတှငျ လာရောကျဖွညျ့ဆညျးခပြေးခဲ့ပွီး၊ အပွနျတှငျ လကျနကျကွီးပဈခခြဲ့သညျကို စဈရှောငျ မြားကလညျး မွငျတှကွေ့ောငျး သိရသညျ။
“ ရဟတျယာဉျ ၂ စီးနဲ့ စဈသားတှလောခတြာ မွငျရတယျ။ ကနြျောတို့ နတေဲ့စဈရှောငျနဲ့နီးတယျ။ အပွနျလကျနကျကွီး ပေါကျကှဲတဲ့အသံလညျးကွားရတယျ။ ကနြျောတို့လညျး ရငျတထိတျထိတျနဲ့ နနေရေတယျ”ဟု ပုံဝိုးကြေးရှာ ဘုနျးကွီး ကြောငျးတှငျ စဈဘေးရှောငျလာသညျ့ အမြိုးသားတဦးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ အောကျတိုဘာ ၂ရကျမှ စတငျကာ အစိုးရတပျမတျောသညျ (RCSS/SSA) လှုပျရှားသညျ့နရောကို လာရောကျ ရှာဖှေ တိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ တိုကျပှဲ ပွငျးထနျနရေခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူကို လကျရှိဖွဈပှားနေ သညျ့ တိုကျပှဲအခွအေနနှေငျ့ ပတျသကျပွီး သြှမျးသံတျောဆငျ့ သတငျးဌာန မှ အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျမေးမွနျးသျောလညျး မရရှိခဲ့ပေ။ https://burmese.shannews.org/archives/18800
ရှမျးပွညျ ပွနျလညျထူထောငျရေး ကောငျစီ (RCSS/SSA) ဘကျမှ အန်တရာယျပွုမညျကို စိုးရိမျသဖွငျ့ ရှမျးပွညျနယျ တောငျ ပိုငျး၊ မိုငျးကိုငျမွို့နယျတှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး လုပျငနျးအားလုံးကို ရပျဆိုငျးလိုကျရကွောငျး မိုငျးကိုငျမွို့နယျ၊ တအာနျး (ပ လောငျ) အမြိုးသားပါတီ (TNP) ၊ ဥက်ကဋ်ဌ မိုငျးနုမျဟနျက ဧရာဝတီကို ပွောသညျ။ မိုငျးနုမျဟနျက “ကနြျောတို့ မိုငျးကိုငျမှာ မဲဆှယျရတာ လှတျလှတျလပျလပျရှိဖို့ လုံးဝ အဆငျမပွပေါဘူး။ ကနြျောတို့ လူထု ရှာသူရှာသားတှလေညျး ဘေးအန်တရာယျ ကငျးမယျ့ လမျးကိုပဲ ရှေးတဲ့အနနေဲ့၊ ကနြျောတို့ အန်တရာယျမကွုံပမေယျ့ နောကျကှယျမှာ ဘာတှေ ဖွဈလာမလဲဆိုတာကို တှေးပွီး မဲဆှယျတာကို ရပျဆိုငျးလိုကျတာပါ။ အောကျတိုဘာ ၁ ရကျကတညျးက စညျးရုံးရေး ဆငျးတာကို ရပျလိုကျရပါ တယျ။ အဓိကကတော့ RCSS ဘကျက အန်တရာယျပွုမှာကို စိုးရိမျလို့ပါ”ဟု ပွော သညျ။
TNP ပါတီမှ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ဆငျးရနျ ကြေးရှာမြားသို့ သှားရာတှငျ COVID -19 ရောဂါ ကွောငျ့ဟု အကွောငျးပွကာ RCSS တပျဖှဲ့ဝငျမြားမှ လမျးမြား ပိတျဆို့ထားခွငျး၊ TNP ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား မဲလာ ဆှယျသညျကို လကျခံပါက ကြေးရှာ ဥက်ကဋ်ဌမြားမှ ဒဏျငှေ ၁၀ သိနျး ပေးရမညျ ဟု စာပို့ပွောဆိုထားခွငျးမြားအပွငျ လမျး ခရီးတှငျ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား၏ လုံခွုံရေးကို အာမ မခံနိုငျပါဟု ပွောဆိုမှုမြား ရှိသဖွငျ့ မဲဆှယျမှုကို ရပျဆိုငျးရခွငျး ဖွဈပါသညျ ဟုလညျး ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ “ကြားခေါငျး (SNLD) ဆိုလညျး ရှာတိုငျး သှားလာရေး လှတျလပျတယျ။ ကနြျောတို့ ပါတီကိုပဲ ဘာလို့ အဲဒီလို လုပျလဲ စဉျးစားမရပါဘူး။ မိုငျးကိုငျမှာ တိုငျးရငျးသားအမြားစုက ရှမျးနဲ့ပလောငျပဲ ရှိပါတယျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကို အကွောငျးပွု တယျ ဆိုပမေယျ့ အစိုးရပိုငျးက လမျးတကွောလုံးမှာ လမျးမကွီး စဈဆေးရေးဂိတျ၊ စမျးသပျမေးမွနျး တာ ရှိတယျ။ ရောဂါ မရှိရငျ သှားလာလို့ ရတယျ။ RCSS ကတြော့ လုံးဝကို အကွမျးသမားနညျးနဲ့ ရှာထဲမှာ အိပျ၊ ရှာထဲမှာ စားပွီး စောငျ့တာ၊ တရှာကို ၁၀ ပေါကျ ရှိရငျ ၁၀ ပေါကျလုံး စောငျ့နတော။ လုံးဝကို မတရားပါဘူး”ဟု ပွောသညျ။
TNP ပါတီသညျ မိုငျးကိုငျမွို့နယျတှငျ အမြိုးသားလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ၊ ပွညျသူ့ လှတျတျောမဲဆန်ဒနယျ ၊ ပွညျနယျလှတျ တျော မဲဆန်ဒနယျ (၁) နှငျ့ (၂) တို့တှငျ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၄ ဦး ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ အဆိုပါ ကိုယျစား လှယျလောငျး ၄ ဦးက မဲဆှယျစညျးရုံးရနျ ၎င်းငျးတို့က မဲဆန်ဒနယျမွမြေား အတှငျးမှ ရှာပေါငျး ၉၀ ကြျောကို စညျးရုံးရေးဆငျး ရနျ စီစဉျထားသျောလညျး ရှာ ၃ ရှာသာ သှားနိုငျခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/election-2020 /2020/10/06/231141.html
ကခငျြပွညျနယျ၊ မိုးကောငျးမွို့နယျ၊ လှယျလငျယာနျအုပျစု ကြေးရှာတှငျ ပွညျသူပိုငျစာသငျကြောငျး မွဧေရိယာတှငျ ဗုဒ်ဓဘာသာ ဘုနျးကွီးကြောငျးတညျဆောကျရနျကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး အငွငျးပှားမှုရှိနကွေောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါကိစ်စကို အမွနျဖွရှေငျးပေးရနျ ဒသေခံ ၃၀ ကြျောက အောကျတိုဘာလ ၇ ရကျနေ့ မနကျ ၇ နာရီခနျ့က ဆန်ဒပွခဲ့ကွသညျ။
မိုးကောငျးမွို့မှ ၄ မိုငျခနျ့သှားရသညျ့ လှယျလငျယာနျမွို့ဟောငျးကြေးရှာ ကြောငျးမွနေရော ၁၀ ဧက၏ ထကျဝကျခနျ့ကို ကြေးရှာ ရာအိမျမှူး ဦးဝငျးကွိုငျက ဦးဆောငျပွီး သာသနာမွပေိုငျအဖွဈ ခွံစညျးရိုး ကာလိုကျသောကွောငျ့ ကနျ့ကှကျရခွငျး ဖွဈသညျဟု ဦး Hkangda Tu Ring က ယခုလို ပွောဆိုသညျ။“အခုဒီမွနေရောက ရှာစတငျတညျရှိကတညျးက ပွညျသူပိုငျ ကြောငျးမွနေရောအဖွဈသတျမှတျထားတာဖွဈတယျ။ အခုလညျးအဲမှာ ကြောငျးဆောကျထားတာဖွဈတယျ။ အဲ့ဒါကို အခု လကျရှိ ရာအိမျမှူးက သာသနာပိုငျနယျမွအေဖွဈ ကြူးကြျောသိမျးပိုကျနတေယျ။ အခုကမွဧေက တဈဝကျလောကျမှာ ခွံစညျးရိုးတှကောထာတယျ။ ဒသေခံတှကေ ဒါကိုလုံးဝ သဘောမတူဘူး။ အမြားပိုငျကြောငျးနယျမွလေို့ သတျမှတျထားတဲ့ မွနေရောဖွဈတဲ့အတှကျ ဘယျဘာသာရေး အဖှဲ့အစညျးလညျး ကြူးကြျောလို့မရဘူး”ဟု ပွောဆိုသညျ။
ကြောငျးပိုငျမွနေရောတှငျ မူလတနျးကြောငျးဖှငျ့ရနျ ကြောငျးဆောငျတဈခုတညျဆောကျထားပွီဖွဈသျောလညျး ကြေးရှာ၏ အနအေထားအရ ငှကွေေးခကျခဲမှုကွောငျ့ ကြောငျးမဖှငျ့နိုငျသေးသညျ့အပွငျ ကြောငျးတကျမညျ့ ကြောငျးသားဦးရေ နညျးပါး နသေညျ့အတှကျ ကြောငျးမဖှငျ့နိုငျသေးပဲ ရပျနားထားဆဲဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါ ကြောငျးနယျမွတှေငျ စတငျဝငျ ရောကျကြုးကြျောလာအခြိနျကတညျးက တားမွဈခဲ့သျောလညျး လိုကျနာမှုမရှိကွောငျး လှယျလငျယာနျကြေးရှာ အပါအဝငျ ကြေးရှာအုပျစု ၅ ခု၏ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦး Gum Ja Naw က ယခုလို ပွောဆိုသညျ။
“အခုက အမြားပွညျသူပိုငျတဲ့စာသငျကြောငျးဝနျးဖွဈတဲ့အတှကျ အစိုးရနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဆေးပေးခနျးတို့၊ အစိုးရုံးတို့က လိုအပျ ရငျက အသုံးပွုလို့ရတယျ။ ဒါပမေယျ့သီးခွား ဘာသာရေးကြောငျးတှကေ မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးကမှ အသုံးပွုလို့မရဘူးလို့ တားမွဈခဲ့ကွတယျ။ အဲလိုကနျ့ကှကျနတေဲ့ကွား သူတို့က ၅ ဧကလောကျကို ခွံစညျးရိုးတှကောပွီး သိမျးယူဖို့ လုပျနတေယျ။ ထှအေုပျရုံကိုလညျး စာတငျပွထားတယျ။ လိုကျနာမှုမရှိဘဲ ဆကျလုပျတော့ အငွငျးပှားမှုဖွဈသှားခဲ့တယျ” ဟု ပွောဆိုသညျ။ ဒသေခံမြား တောငျးဆိုခဲ့သညျ့အပျေါ မွယောကြူးကြျောမှုကို ဖကျြသိမျးခိုငျးထားပွီး ဆကျလကျလုပျဆောငျခဲ့ပါက မွို့နယျ ထှအေုပျရုံးမှ တရားဥပဒနှေငျ့ ဖွရှေငျးဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး ဦး Gum Ja Naw က ဆကျလကျပွောဆိုခဲ့ သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/08/%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အမြိုးသမီးမြားကို အနိုငျရနိုငျသညျ့ မဲဆန်ဒနယျမွမြေားထကျ ဟနျပွပွိုငျခိုငျးခွငျးမြိုးမြား တှရေ့ သညျဟု အမြိုးသမီးမြားအဖှဲ့ခြုပျ(မွနျမာနိုငျငံ)-WLB ၏ တှဲဖကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး-၂ လှေးပိုးငယျ က ပွောသညျ။ အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အမြိုးသမီးမြားအဖှဲ့ခြုပျ (မွနျမာနိုငျငံ)က ထုတျလှငျ့မညျ့ “၂၀၂၀ စိနျချေါသံမြား” အငွိမျ့နှငျ့ ပတျသကျ၍ အောကျတိုဘာ ၆ ရကျနတှေ့ငျ ပွုလုပျသညျ့ အှနျလိုငျး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ သူမက ယခုလို မှတျခကျြပွု ပွောဆိုလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။
“ ဒီ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတဲ့ နရောတှမှေလညျး တခြို့နိုငျငံရေးပါတီတှေ ဆိုလို့ရှိရငျ မွငျရတာက အမြိုးသမီးတှကေို မူအရထညျ့ထားတာပဲ ရှိတယျ။ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ အမြိုးသမီးတှေ အောငျနိုငျမဲ့ နရောမှာ ထညျ့ထား တာမရှိဘူး။ ဟို ဟနျပွ ထညျ့ထားတာမြိုးတှေ အမြားကွီးမွငျတှနေ့ရေတာကို ကမြတို့ ဖျောပွထားတာပေါ့နျော”ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။ ယခုလို အခွအေနမြေိုးသညျ ပါတီကွီးမြားတှငျလညျးတှနေို့ငျသလို တိုငျးရငျးသားပါတီမြားတှငျလညျးရှိ ကွောငျး၊ အထူးသဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားတှငျ အခှငျ့အလမျးနညျးသညျ့အတှကျ လာပွိုငျရနျ စညျးရုံး ရခွငျးမြိုးလညျးရှိ သညျဟု ကရငျပွညျသူ့ပါတီ တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး-၁ နနျ့ခငျအေးဦးက ပွောသညျ။
“ ဆရာမကိုတော့ နိုငျခွရှေိလို့ပါတီက လကျမလှတျပဲ ဝငျပွိုငျခိုငျးတာ။ တခြို့အမြိုးသမီးတှကေတြော့ ပွိုငျခငျြတယျဆို တော့ အတှအေ့ကွုံရ အောငျ ပေးပွိုငျရတာပဲ။ ကိုယျ့တိုငျးရငျးသားပါတီတှမှောတော့ အနဈအနာခံနိုငျဖို့ အဓိကလိုတယျ” ဟု ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ကရငျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာ ကိုယျစားလှယျလောငျး နနျ့ခငျအေးဦး က မှတျခကျြပွုပွော သညျ။ WLB က ထုတျလှငျ့မညျ့ ၂၀၂၀ စိနျချေါသံမြားအငွိမျ့တှငျ အမြိုးသမီး လူရှငျတျောမြားက ဦးဆောငျ တငျဆကျထားပွီး လကျရှိမွနျမာနိုငျငံတှငျ ကွုံတှနေ့ရေသညျ့ နိုငျငံရေးအခွအေနမြေား၊ အမြိုးသမီးမြားကို စဈဘေးရှောငျနရေမှု၊ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အမြိုးသမီးအမတျမြားကို ပိုမိုမဲပေးရနျ ရညျရှယျထုတျလှငျ့ခွငျး ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ http://kicne ws.org/2020/10/%e1%80%b1%e1%82%90%e1%80%bc%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ အတှငျး RCSS/SSA နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ကွား တိုကျပှဲကွောငျ့ စဈရှောငျ ၃၀၀၀ ဝနျးကငျြ ရှိလာကွောငျး လူမှုပရဟိတအဖှဲ့မြားထံစုံစမျးသိရသညျ။ ကြောကျမဲမွို့နယျ အတှငျး အောကျတိုဘာ ၂ ရကျ ကစပွီး ယနေ့ အခြိနျထိ အစိုးရတပျမတျောနှငျ့ သြှမျးပွညျ ပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျတပျမတျော( RCSS/ SSA) တို့သညျ တိုကျပှဲဆကျလကျပွငျးထနျနသေေးသဖွငျ့ စဈရှောငျမြားလညျး တိုးလာနခွေငျးဖွဈပါသညျ။
လကျရှိ ကြောကျမဲမွို့နယျ ပုံဝိုးကြေးရှာ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျ စဈရှောငျ (၇၀၀)ကြျော၊ တောငျထိပျ တှငျ (၇၀၀)ကြျော၊ နားဆောငျရှာ တှငျ ၁၀၂ ဦး၊ နောငျကှမျရှာတှငျ ၁၀၀ ဦး၊ နမျ့ဟနျခိနျရှာတှငျ ၄၀၀ ကြျော ၊ ကှမျဟငျရှာ တှငျ ၄၀၀ ကြျောနှငျ့ ကောငျးလနျးရှာတှငျ (၂၀၀)ဝနျးကငျြရှိကွောငျး ကြောကျမဲမွို့စဈရှောငျကျောမတီမှ သိရသညျ။“စဈရှောငျတှေ မြားလာရငျ တော့ နဖေို့နဲ့စားသောကျဖို့ခကျခဲမယျ။ အခုရငျဆိုငျနရေတာကတော့ အိမျသာကိစ်စပါပဲ။ ကနြျောတို့အမွနျဆုံး အိမျသာတှေ တူးပေးနရေတယျ”ဟု ကမျးလငျ့လကျမြား လူမှုကူညီရေးအသငျး (နောငျပိနျ)မှ ဥက်ကဌ စိုငျးနအေောငျ က သြှမျးသံတျော ဆငျ့ကိုပွောသညျ။ လတျတလောအခွအေနအေရ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ အစားအသောကျအရေးပျေါလိုအပျနေ ကွောငျး၊ တိုကျပှဲမြား ဆကျလကျဖွဈပှားပါက စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ စားနိပျရိက်ခာ ခကျခဲလာနိုငျကွောငျး စိုငျးနအေောငျ က ပွောသညျ။“ တောငျထိပျမှာ ရှိတဲ့ စဈရှောငျ ၇၀၀ ကြျော အတှကျ အခုစားသောကျဖို့ အခကျအခဲဖွဈနတေယျ။ ကနြျော တို့ ကို ဖုနျးဆကျ အကူအညီတောငျးတယျ။ တိုကျပှဲဖွဈတော့ သှားမပို့နိုငျဘူး။ တိုကျပှဲကလညျး ဒီနထေိ့ဖွဈနသေေး တယျ” ဟု စိုငျးနအေောငျက ဆိုသညျ။
လကျရှိ ကာလသညျ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျထိနျးခြုပျသညျ့ ကာလလညျးဖွဈသဖွငျ့ စဈဘေးရှောငျမြား လူစုလူဝေးမဖွဈအောငျ လညျး ထိနျးသိမျးနရေကွောငျး၊ ကနျြးမာရေးကိစ်စ အလေးထားစောငျ့ကွညျ့နရေကွောငျးလညျး စဈဘေးရှောငျမြားကို လိုကျ လံကူညီပေးနသေညျ့ ပရဟိတအဖှဲ့မြားက ပွောသညျ။“ဒီလို ဆကျသှားနရေငျတော့ ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး အခွေ အနေ ဆိုးလာနိုငျတယျ။ အဓိက ဝမျးပကျြဝမျးလြှော ဖွဈမှာစိုးရိမျရတယျ”ဟု ပုံဝိုးကြေးရှာသို့ စဈဘေးရှောငျနသေညျ့ အမြိုးသမီး တဦးက ပွောသညျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကာလကွောငျ့ အလှူရှငျမြားလညျး သှားလာမှု ကနျ့သတျထားသဖွငျ့ စဈဘေး ရှောငျ ပွညျသူမြားအတှကျ လကျရှိမှာ အစစအရာရာ အခကျအခဲ ရငျဆိုငျနရေကွောငျး လညျး စဈဘေးရှောငျမြားကို ကူညီ သညျ့ နနျးကြိနျက ပွောသညျ။
လကျရှိ RCSS/SSA နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ ဖွဈပှားနသေညျ့ တိုကျပှဲသညျ စဈရေးပွငျးထနျမှု၊ လြော့ကမြှုသညျ တပျမတျောအပျေါသာ မူတညျကွောငျးလညျး RCSS/SSA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပရနျလညျး ၁ လ နီးပါးသာကနျြနသေညျ့အခြိနျ၊ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး အသီးသီး မဲဆှယျနသေညျ့ ကာလအတှငျး အစိုးရတပျမတျော အနဖွေငျ့ ယခုကဲ့သို့ တိုကျပှဲဖနျတီး ခွငျးသညျ ရုပျဆိုးကွောငျးလညျး စဈရှောငျမြားက ပွောဆိုလိုကျသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/188
ကခငျြပွညျနယျ၊ ပူတာအိုခရိုငျမှာ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ အရအေတှကျဟာ စကျတငျဘာလ အ တှငျးစိစဈထားတဲ့စာရငျးအရ စုစုပေါငျး ၆၀,၂၅၆ ဦးရှိတယျလို့ ပူတာအိုခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဦးထမျးတနျဖီရမျ က ပွောပါတယျ။
၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတုနျးကထကျ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာ ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ အရအေတှကျ ပိုတိုးတာတဲ့ အကွောငျးနဲ့ ပူတာအိုခရိုငျမှာ မဲရုံစုစုပေါငျး ၁၃၈ ရုံ ဖှငျ့လှဈဖို့ ပွငျဆငျထားတညျလို့လညျးပွောပါတယျ။“မဲရုံ စုစုပေါငျး ၁၃၈ ရုံ ပွငျဆငျထားတယျ။ ပွီးတော့ ယှဉျပွိုငျမယျ့ ကိုယျစားလှယျပေါငျးက ၉၁ ဦး ရှိပါတယျ။ ပါတီအနနေဲ့က ၁၀ ပါတီ အမညျ စာရငျးတငျသှငျးထားပမေဲ့ တဈပါတီက ယှဉျပွိငျခွငျးမရှိဘူး။ နောကျတဈပါတီကလညျး ပွညျနယျမှာပွိုငျ‌ပမေဲ့ ကနြျောတို့ ဆီ မှာ မှတျပုံတငျထားခွငျးမရှိပါဘူး၊ ဒါကွောငျ့ မှတျပုံတငျထားတဲ့ ၈ ပါတီက ပူတာအိုခရိုငျမှာ ယှဉျပွိုငျဖို့ရှိတယျ”လို့ ပူတာအို ခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဦးထမျးတနျဖီရမျက ပွောပါတယျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကပျဘေးကာလမှ စညျးရုံးရေး လုပျနတေဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှနေဲ့ မိဘပွညျသူတှအေနနေဲ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနဲ့ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ‌ကျောမရှငျတို့က ထုတျပွနျထားတဲ့ လမျးညှနျခကျြအတိုငျး လိုကျနာဆောငျရှကျပေးဖို့ အထူးမှာကွားထားပွီး မွပွေငျမှာလညျး လိုကျနာဆောငျရှကျနကွေတယျလို့ ဦးဖီရမျက ပွောပါ တယျ။
ပူတာအိုခရိုငျမှာ စကျတငျဘာလအတှငျး ကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ အခငျြးခငျြးကွားမှာ မဲဆှယျစညျးရုံးရငျး ပုတျခတျမှုနဲ့ တိုငျကွားမှုတှရှေိခဲ့ပမေဲ့ အပွနျလှနျ တောငျးပနျခဲ့ကွလို့ နှဈဘကျ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယျ။ http://burmese.dvb.no /archives/415235
ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ကြောကျကွီးမွို့နယျတှငျ ကရငျပွညျသူ့ပါတီက အငျအားထောငျခြီပါဝငျသညျ့ လှညျ့လညျ မဲဆှယျပှဲကို ယမနျနေ့ (အောကျတိုဘာ ၆ ရကျ)တှငျ ပွုလုပျခဲ့သညျဟု ကရငျပွညျသူ့ပါတီ-KPP ကြောကျကွီး မွို့နယျ၊ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး စောသေးအားကလို ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ အဆိုပါ မဲဆှယျပှဲကို ကြောကျကွီးမွို့နယျ ကရငျပွညျသူ့ပါတီက ဦးဆောငျစီစဉျခွငျးဖွဈပွီး တိုငျးဒသေကွီး မဲဆန်ဒနယျ-၁ ဘကျတှငျ ကြောကျကွီး-မုနျး ကားလမျး တလြှောကျနှငျ့ တိုငျးဒသေကွီး မဲဆန်ဒနယျ-၂ ဘကျတှငျ ကြောကျကွီး-နံသားကှငျး လမျးတလြှောကျ နံနကျ ၇ နာရီခှဲတှငျ စတငျ လှညျ့လညျမဲဆှယျခဲ့ပွီး မှနျးလှဲ ၂ နာရီ တှငျ ကြောကျကွီးမွို့ပျေါတှငျ အဖှဲ့နှဈဖှဲ့ပွနျဆုံပွီးနောကျ မဲဆှယျပှဲကို ရုပျသိမျးလိုကျသညျ။
“ဒီနပှေဲ့ကို ဆိုငျကယျတှရေော ကားတှနေဲ့ပါ ခနျ့မှနျး လူ ၃, ၀၀၀ လောကျလာတယျ။ လမျးတလြှောကျ ရှာတှေ ကနြျောတို့ ကို အားပေးတာတှကေိုကွညျ့ပွီး အခွအေနကေောငျးမယျလို့ ယုံကွညျတယျဟု”ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး စောသေးအားကလိုက ပွောသညျ။ အဆိုပါ မဲဆှယျပှဲပွုလုပျရနျ မွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံ သုံးရကျကွို တငျခှငျ့ပွုခကျြရယူ ပွုလုပျခွငျး ဖွဈပွီး လူဦးရေ အကနျ့အသတျဖွငျ့ ပွုလုပျရနျ ကနဦး စီစဉျထားသျောလညျး လာရောကျ ဝနျးရံသူမြားသှားသညျ့ အခွအေနဖွေဈသှားသညျဟု KPP ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားက ပွောသညျ။
ကြောကျကွီးမွို့နယျ၊ အစိုးရအုပျခြုပျသညျ့ဒသေ အခကျြအလကျမြားအရ စုစုပေါငျး လူဦးရေ ၁၂၀,၀၀၀ ကြျောရှိသညျ့အနကျ ဗမာ လူမြိုး ၆၈,၆၂၁ ဦး ၅၅ ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့ ကရငျလူမြိုးစုစုပေါငျး ၅၂,၂၈၂ ဦး ၄၂ ရာခိုငျ နှုနျးခနျ့ရှိကာ ရှမျးလူမြိုး ၂၀၆၉ ဦး နထေိုငျလကျြရှိကွောငျး မွို့နယျအထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉ ခုနှဈစာရငျးမြားအရ သိရသညျ။ http://kicnew s.org/2020/10/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%80%e1%
တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA) တို့စဈမကျဖွဈပှားရာ ခငျြးပွညျတောငျပိုငျး ပလကျဝမွို့နယျတှငျ လုံခွုံရေးအခွအေနေ ကွောငျ့ ရလေမျး ကုနျလမျးမြားပိတျဆို့ကာ ကုနျစညျဝငျရောကျမှုမရှိတော့သညျ့အတှကျ ပလကျဝမွို့နယျအတှငျးက ကြေးရှာ ပေါငျး ၂၀၀ ကြျောဆနျပွတျလပျနပွေီဟု ခငျြးစဈဘေးရှောငျပွညျသူမြား အရေးပျေါကူညီးရေးနှငျ့ ပွနျလညျထူထောငျရေး ကျောမတီ RRCCI အဖှဲ့ထံမှ သိရသညျ။
ပလကျဝမွို့နယျတှငျ ယခုရကျပိုငျးအတှငျတိုကျပှဲဖွဈပှားမှုမရှိသျောလညျး ပလကျဝမွို့နယျ၏ အဓိကစားနပျရိက်ခာသယျ ဆောငျသညျ့လမျးကွောငျးမြားဖွဈသော ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောလမျး ပိတျဆို့သညျ့အပွငျ မတူပီ-ပလကျဝ လမျးသညျ လညျး လုံခွုံရေးနှငျ့ ကားလမျးအခွအေနကွေောငျ့ ဆမီးအထိ သှားရောကျနိုငျသညျ့အတှကျ ယခုကဲ့သို့ ဆနျပွနျလပျမှုဒဏျ ရငျဆိုငျနကွေရခွငျးဖွဈသညျဟု RRCCI မှ မနနျးဝကေပွောသညျ။ “ဒါကတကယျတော့ စဈပှဲပွငျးပွငျးထနျထနျဖွဈနတေဲ့ ၂၀၂၀ အစောကတညျးက ကမြတို့ ဆနျပွတျလပျနတေဲ့ကြေးရှာ တှရှေိနပွေီးသားဖွဈတယျ ဒါပမေဲ့အခုလိုမြိုးအရအေတှကျ တကျလာတာ ကြေးရှာပေါငျး (၂၀၀) ကြျော (၃၀၀) ကြျောပွတျလပျသှားတယျဆိုတာမြိုးကတော့ တဈလနီးပါး ရကျ (၂၀) ဝနျးကငျြလောကျရှိနပွေီ မွို့ပျေါမှာတော့ ဆနျလုံးဝဝယျစရာတော့မရှိဘူး’ဟု မနနျးဝကေပွောသညျ။“အထူးသဖွငျ့ စဈတပျဘကျကပေါ့နျော လုံခွုံရေးကိုအကွောငျးပွုပွီးတော့ ပိတျဆို့မှုတှပေေါ့နျော ဖွတျလေးဖွတျပုံစံမြိူးနဲ့ လုပျထားတဲ့ အခါကတြော့ ကုနျဈေးနှုနျးကမွငျ့တကျနတေဲ့အနအေထားမှာရှိနပွေီးတော့ နောကျတဈခကျြက ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူစကျမှု ထိနျးခြူပျဖို့ ဥပဒမြေိူးနဲ့ထုတျပွနျတဲ့အခါကတြော့ လမျးကွောငျးတှကေ အရငျထကျပိုပွီးတငျးကွပျသှားတော့ ခုလိုမြိူးဆနျက ပွတျလပျသှားတာပေါ့နျော’’ဟု မနနျးဝကေပွောသညျ။
ယခုလကျရှိ ပလကျဝမွို့ပျေါတှငျ ဆနျတဈအိတျကို ကပျြငှေ (၇၀၀၀၀) ခနျ့ဈေးပေါကျနပွေီး ကွကျဥတဈလုံးမှာလညျး ၅၀၀ ခနျ့ဈေးပေါကျနသေညျဟုသိရသညျ။ လူဦးရတေဈသိနျးကြျောနထေိုငျပွီး ကြေးရှာပေါငျး ၄၀၀ နီးခနျ့ရှိသညျ့ ပလကျဝမွို့နယျ တှငျ ကြေးရှာထကျဝကျကြျောသညျ ဆနျပွတျလပျသညျ့အနအေထားရှိရောကျရှိနခွေငျးဖွဈသညျ။ ပလကျဝမွို့နယျ ဆနျပွတျ လပျမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ကတော့ ပလကျဝမွို့နယျသို့ ဆနျအိတျမြားအမွနျ ဆုံးပို့ဆောငျနိုငျရနျ ဆောငျရှကျနသေညျဟု ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ စညျပငျဝနျကွီးဦးစိုးထကျကပွောသညျ။ ယခုလကျရှိ ဆနျပွတျလပျမှု အမြားစုကြေးရှာမြားသညျ ပလကျဝမွို့ အထကျပိုငျး၊ အရှခွေ့မျးနှငျ့ ကုလားတနျမွဈ၏ အနောကျဘကျကမျး တို့မှ ကြေးရှာမြားဖွဈကွသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76129
လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျပါက ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေး၊ အခွခေံဥပဒေ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျရေးနှငျ့ ပငျလုံကတိကဝတျ အတိုငျး တိုငျးပွညျပုံဖျောသညျ့လုပျငနျးမြားတှငျ ပါဝငျဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး နာဂအမြိုးသားပါတီမှ ဥက်ကဌ ဦးရူမောငျ က ပွောသညျ။“အနိုငျရသှားပွီဆိုရငျ တိုငျးရငျးသားပါတီတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ၂ ပိုငျးရှိမယျလို့ထငျတယျ။ တဈပိုငျး ကကတြော့ ကိုယျ့ရဲ့မဲဆန်ဒနယျရဲ့နယျမွေ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးရှိမယျ။ အခွားတဈဖကျမှာလညျး တိုငျးရငျးသားပါတီ တှဖွေဈတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ ပိုအရေးကွီးတဲ့အပိုငျးတဈခု မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပွနျလညျတညျဆောကျရေးလုပျငနျးစဉျတဈခုမှာ အခွခေံဥပဒရေေးဆှဲတဲ့ခါမှာ အဖှဲ့စညျးတဈခုဘဲရေးဆှဲတာမြိုးမဟုတျဘဲ တိုငျးပွညျတဈခုလုံးရဲ့အနာဂတျကံကွမ်မာကိုလှမျးမိုး အကြိုးသကျရောကျစမေယျ့ အခွခေံဥပဒပွေငျဆငျရေးဆှဲတဲ့နရောမှာ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးပေါငျးစုံ (နိုငျငံရေးပါတီကိုယျစား ပွုမူပေါငျးစုံ) အတူတူရေးဆှဲမယျ။ ဒါကကနြျောတို့ရဲ့မူဝါပိုငျးတှေ ပွောရရငျတော့ ဒီထကျပိုရှညျပါတယျ အခြုပျဘဲပွောတာ ဖွဈတယျ။” ဟု နာဂအမြိုးသားပါတီမှ ဥက်ကဌ ဦးရူမောငျကဆိုသညျ။
နာဂအမြိုးသားပါတီသညျ ၂၀၁၆ ခုနှဈတှငျစတငျတညျထောငျခဲ့သော ပါတီဖွဈပွီး လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ နာဂကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ မဲဆန်ဒနယျ ၁၀ နရောနှငျ့ တနိုငျး၊ ရှငျဗှယေနျ၊ ခန်တီး၊ ဟုမ်မလငျး စသညျ့ဒသေမြားတှငျ ၅နရော ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး စုစုပေါငျး မဲဆန်ဒနယျ ၁၅ နရောတှငျဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ ယငျး မဲဆန်ဒနယျ ၁၅ နရောတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၁၅ ဦးအနကျ အမြိုးသမီးကိုယျစားလှယျလောငျး တဈဦးပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။
လကျရှိခြိနျထိ နာဂအမြိုးသားပါတီသညျ ပါတီအငျအား ၂ သောငျးခနျ့ရှိနပွေီဖွဈပွီး နာဂ အမြိုးသားပါတီ၏ အားသာခကျြ သညျ မြိုးနှယျစုမြားအား အခွခေံကာ တညျထောငျထားသညျ့ပါတီဖွဈတဲ့တှကျ နာဂ လူမြိုး မြား၏ ထောကျခံမူအပွညျ့အဝ ရရှိထားသျောလညျး အားနညျးခကျြအနနှေငျ့မူ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးခကျခဲမူ၊ ဖုနျး၊ အငျတာနကျလိုငျး မရရှိမူတို့ကွောငျ့ ပွညျမနိုငျငံရေးစီးဆငျးမူပုံစံအား ထဲထဲဝငျဝငျမသိသေးသညျ့ ပွညျသူမြားရှိခွငျးသညျ အားနညျးခကျြတဈခုဖွဈကွောငျး ပါတီဥက်ကဌ ဦးရူမောငျကပွောသညျ။ နာဂအမြိုးသားပါတီသညျလာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျ ပှဲ တှငျ အောငျနိုငျရေးတှကျ ရာခိုငျနူနျးအပွညျ့မြှျောမှနျးထားကွောငျးနှငျ့ ပါတီဆောငျပုဒျအနဖွေငျ့ “ပွနျလညျတညျဆောကျ ကွပါစို့”ဟူသညျ့ ဆောငျပုဒျဖွဈကွောငျး နာဂအမြိုးသားပါတီမှ ဥက်ကဌ ဦးရူမောငျကပွောသညျ။ https://burmese.kac innews.com/2020/10/06/%e1%80%80%e1%80%81%e1%80
ဝနျကွီးခြုပျကို ရာထူးကနဖေယျရှားရေးအတှကျ လှတျတျောရဲ့ စှပျစှဲပွဈတငျတဲ့ ငါးဦးထဲမှာ လကျမှတျကို ပွနျရုပျသိမျးခဲ့သူ ဒီးမော့ဆို မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ ၁ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးသိနျးအောငျကို တရားစှဲမယျလို့ ပွညျနယျလှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌက ပွောထားပါတယျ။ စှပျစှဲပွဈတငျတဲ့အဖှဲ့ထဲကနေ နုတျထှကျခဲ့တဲ့ဖွဈရပျဟာ လှတျတျောပုံရိပျကို ထိခိုကျစခေဲ့တာကွောငျ့ တရားစှဲဆိုသှားမယျလို့ အောကျတိုဘာလ ၆ ရကျနကေ့ သတငျးထောကျတှနေဲ့ တှဆေုံ့ရာမှာ ပွညျနယျလှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌ ဦးလှထှေးက ပွောလိုကျတာပါ။“ ဦးသိနျးအောငျကို ကနြျော တရားစှဲမှာပါ၊ မကွာခငျလေ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောတာပါ၊ မကွာခငျ လုပျမှာပါ။ ကနြျောကလညျး ပွောလညျးပွောမယျ၊ လုပျလညျးလုပျမယျ”ပွငျးထနျထဲပုဒျမ ၃ ခုနဲ့ တရားစှဲမယျ ဆိုပမေယျ့ ဘယျပုဒျမတှလေဲ ဆိုတာကိုတော့ ထုတျဖျောပွောကွားခွငျး မရှိသေးပါဘူး။
စှပျစှဲပွဈတငျရာမှာ စှပျစှဲသူက ကယားပွညျနယျ လှတျတျောအတှငျး ကိုယျစားလှယျ လေးပုံတဈပုံ၊ အရအေတှကျ အားဖွငျ့ ငါးဦးရှိမှသာ ဥပဒအေရ စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ ဖှဲ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ စှပျစှဲသူ အရအေတှကျ လေးဦးပဲ ရှိခဲ့ခြိနျမှာ ဆကျလကျ စုံစမျးခဲ့ခွငျးဟာ အငွငျးပှားစရာ ဖွဈလာနတေဲ့ ဒီအမှုကို ရှငျးပေးဖို့ ဝနျကွီးခြုပျဟောငျးက နိုငျငံတျော ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒခေုံရုံးကို တငျပွထားရာမှာ ခုံရုံးက အောကျတိုဘာ ၆ ရကျနမှေ့ာ ကွားနာခဲ့ ပါတယျ။ အခုလို ပွညျနယျလှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌ ကနေ ပွညျနယျလှတျတျော အမတျတဈဦးကို ပွနျတရားစှဲနိုငျတဲ့ အခွအေနေ ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာ နုတျထှကျစာမှာ ရေးသားထား ခကျြအပျေါ မူတညျတယျလို့ ကယားပွညျနယျအခွစေိုကျ ဥပဒပေိုငျး ဆိုငျရာ အကွံပေးအဖှဲ့ဖွဈတဲ့ Law Home အဖှဲ့က အထကျတနျးရှနေ့ေ ဦးကြျောဝဏ်ဏအောငျက ပွောပါတယျ။
အခုလို ကယားပွညျနယျလှတျတျောကနေ ဝနျကွီးခြုပျကို ဖွုတျခလြိုကျတဲ့ကိစ်စကို ခုံရုံးကနေ ကွားနာခြိနျ ရှနေ့ခြေုပျကနပွေီး လုပျထုံး လုပျနညျးနဲ့ မကိုကျညီဘူး ဆိုတာပွောသှားပမေယျ့ နောကျဆုံးတော့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေတိုငျး လိုကျနာ ကငျြ့သုံးရမှာဖွဈတယျလို့ ဦးကြျောဝဏ်ဏအောငျက ပွောပါတယျ။ ဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ဦးအယျလျဖောငျးရှိုကို ပွညျနယျအစိုးရရဲ့ စကျယန်တာယားငှားရမျးခငှေ ကပျြသိနျးပေါငျး လေးထောငျကြျောနဲ့ အမြားပိုငျပွညျသူမွကေို ငှားရနျးထားတဲ့ငှတှေကေို အလှဲ သုံးစားမှုနဲ့ ပွညျနယျလှတျတျောကနေ စုံစမျးစဈဆေးပွီး ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေရ လှတျတျောကနေ ဖွုတျခခြံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဦးအယျလျဖောငျးရှိုကလညျး သူ့ကိုစှပျစှဲပွဈတငျထားတာတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ မဟုတျမှနျကွောငျး၊ သူ့ကို ဖယျရှားဖို့ လှတျတျောက ဆုံးဖွတျခဲ့တာဟာ အငျအားရှိသူတှကေ မတရား ဆောငျရှကျခဲ့တာဖွဈသလို ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒေ ရဲ့ အားနညျးခကျြကွောငျ့ဖွဈကွောငျး RFA ကို ပွောထားပါတယျ။ https://www.rfa.org/ burmese/news/kayah-
ထိုငျးနိုငျငံ ဒသေအသီးသီးတှငျ ရောကျရှိနသေညျ့ ကရငျလူမြိုး ၃ထောငျကြျော ကွိုတငျဆန်ဒမဲပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ဘနျကောကျမွို့တှငျ လူမှုရေးလုပျငနျးလုပျဆောငျနသေူ ကရငျဒုက်ခသညျမြားဆိုငျရာ လူမှုစောငျ့ ရှောကျရေးအဖှဲ့ (OKRSO) ထံမှ သိရသညျ။
လကျရှိ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျမှ ပွနျလညျပေးပို့လာသညျ့ ကွိုတငျဆန်ဒမဲပေးနိုငျသူ စာရငျးအရ ကရငျပွညျ နယျအတှငျး နထေိုငျသညျ့ ကရငျလူမြိုးစုစုပေါငျး (၃,၃၄၃)ဦးရှိပွီး လာမညျ့ အောကျတိုဘာလ ၁၁ ရကျနတှေ့ငျ ကွိုတငျ ဆန်ဒမဲမြားသှားပေးကွညျဟု ဆန်ဒမဲပေးနိုငျရေးအတှကျ ဦးဆောငျလုပျဆောငျနသေူ OKRSO အဖှဲ့အကွံပေး စောဆိပျပလောငျ က ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “လကျရှိ ကရငျပွညျနယျအတှငျးနတေဲ့ ကနြျောတို့ကရငျတှေ ဘနျကောကျမှ မဲ ထညျ့ခှငျ့ရတဲ့ အမညျ ကလြာတဲ့သူက ၃,၃၄၃ ဦးရှိတာပေါ့။ အဲ့လူတှကေို မနေ့ တနကေ့ ဘယျလို မဲထညျ့ရလဲ။ ပယျမဲ ဆိုတာ ဘယျလိုမြိုးလဲ၊ အသိအမှတျပွုမဲဆိုတာ ဘယျလိုလဲ ဆိုတာကို ချေါပွီး ပွောပွတယျ။ ဒါပမေဲ့ လူနညျးနညျးလေးပဲ လာတယျ။ ဒါပမေဲ့ အှနျလိုငျးကနလေညျး သူတို့ကို သငျပေးတာမြိုးရှိတယျ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွော သညျ။
အဆိုပါ မဲပေးသူ စာရငျးဦးရအေရ ဘနျကောကျရောကျ ကရငျလူမြိုးမြားအတှကျ ရာခိုငျနှုနျးအားဖွငျ့ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့သာရှိ ကွောငျးနှငျ့ အခြိနျအခကျအခဲကွောငျ့ အရအေတှကျ နညျးရခွငျးဖွဈကွောငျးလညျး စောဆိပျပလောငျ က ဆကျပွော သညျ။ အဆိုပါ ကွိုတငျဆန်ဒပေးနိုငျရနျ OKRSO မှ ဦးဆောငျ၍ ဘနျကောကျမွို့အပါအဝငျ ဘနျကောကျမွို့အနီးအနားရှိ ကရငျ တိုငျးရငျးသားမြားကို ပွီးခဲ့သညျ့ ဇူလိုငျလက ချေါယူ၍ ဆန်ဒမဲပေးနိုငျရေးနှငျ့ လိုအပျသညျ့ ပုံစံ(၁၅) ဖောငျ ဖွညျ့စှကျ တငျပွ ခွငျးတို့အတှကျ သံရုံးနှငျ့ ခြိတျဆကျဆောငျရှကျ၍ ကူညီပေးခဲ့ကွောငျးလညျး သိရသညျ။ လကျရှိ ထိုငျးနိုငျငံရောကျ မွနျမာ နိုငျငံသားမြား ကွိုတငျ ဆန်ဒမဲကို ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာလ ၃ ရကျနကေ့ စတငျပေး ခဲ့ကွပွီး ၁၈ရကျနအေ့ထိ သတျမှတျ ထားကာ ထိုငျးနိုငျငံအတှငျး တရားဝငျ မွနျမာအလုပျသမားမြား ၁.၁၅ သနျးရှိသညျ့ အနကျ ကွိုတငျဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ လြှောကျ ထားသူ ၄ သောငျးနီးရှိကွောငျး မွနျမာသံရုံးထံမှ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80 %91%e 1%80 %ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
မကွာမီကငျြးပမညျ့ ၂၀၂၀ ပွညျလုံးကြှတျအထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ မွနျမာပွညျတောငျပိုငျးရှိ တိုငျးရငျးသားလကျနကျ ကိုငျ EAOs ထိနျးခြုပျရာဒသေမြားနှငျ့ ကြေးလကျနပွေညျသူတို့၏ မဲပေးပိုငျခှငျ့အခကျအခဲနှငျ့ စိနျချေါမှုမြားအပျေါ မီးမောငျး ထိုး ဖျောပွထားသညျ့ “ဖယျကွဉျမရှိမှ လှတျမြှတ” အမညျရှိ အစီရငျခံစာကို မှနျပွညျလူ့အခှငျ့အရေးဖောငျဒေးရှငျး Hurfom က (အောကျတိုဘာ ၈) တှငျ ထုတျပွနျလိုကျသညျ။
“၂၀၀၈ အခွခေံဥပဒေ အတညျပွုပွီးတဲ့နောကျပိုငျး အခုရှေးကောကျပှဲက ၃ ကွိမျမွောကျဖွဈတာပေါ့၊ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမှာ မှနျပွညျနယျမဲဆန်ဒရှငျတဈဝကျလောကျပဲ မဲလာပေးကွတယျ၊ ဒီအရအေတှကျက နညျးတယျလို့ပွောရမယျ၊ သူတို့က အပွောငျးအလဲကို လိုလားပမေယျ့ ဘာလို့ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲမပေးကွတာလဲ။ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီး သူတို့ကွုံတှနေ့ရေတဲ့အခကျအခဲတှကေို သသေခြောခြာ သိရှိပွီးတော့ လကျတှကေ့တြဲ့ဖွရှေငျးမှုတှေ ပွုလုပျပေးသှားနိုငျဖို့ ရညျရှယျပွီး ဒီအစီရငျခံစာကို လုပျဖွဈတာပါ”ဟု မှနျပွညျလူ့အခှငျ့အရေးဖောငျဒေးရှငျး စီမံကိနျးဒါရိုကျတာ နိုငျအဲမှနျက ပွောသညျ။ အထူးသဖွငျ့ အဆိုပါဖယျကွဉျခံအုပျစုမြားတှငျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား၏ ထိနျးခြုပျဒသေ နေ ပွညျသူမြား၊ ကြေးလကျနေ အမြိုးသမီးမြား၊ စာတတျမွောကျနှငျ့အသိပညာနညျးပါးသညျ့ သကျကွီးရှယျအိုမြား၊ နရေပျ စှနျ့ခှာတိမျးရှောငျရသူမြား၊ ပထမဆုံးမဲပေးကွမညျ့ လူငယျမြားနှငျ့ အခွားနညျးဖွငျ့ သနျစှမျးသူမြား၏ ရှေးကောကျပှဲ ဆိုငျရာ အခကျအခဲမြားနှငျ့ စိနျချေါမှုမြားကို ဤအစီရငျခံစာတှငျ မီးမောငျးထိုး ဖျောပွထားခွငျး ဖွဈသညျ။
နိုငျအဲမှနျက “မူဝါဒပိုငျးဆိုငျရာတှမှော အဆုံးအဖွတျပေးနိုငျတဲ့ တိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျတှကေို ကနြျောတို့တိုကျတှနျး လို တာက နိုငျငံသားဆိုငျရာအခှငျ့အရေးအတှကျ နိုငျငံသားတိုငျး သူတို့ယုံကွညျကိုးစားတဲ့ နိုငျငံရေးပါတီကို မဲထညျ့ခှငျ့ပေးသငျ့ တယျလို့ ကနြျောတို့မွငျတယျ ဒါမှလညျး ဒီမိုကရစေီနညျးလမျးကတြဲ့ အုပျခြုပျမှုတဈခုအောကျမှာ ရှိနတေဲ့အနအေထားအဖွဈ ထငျသာမွငျသာရှိအောငျ ကနြျောတို့ဖျောပွနိုငျမှာဖွဈတယျ”ဟု မှနျသတငျးအဂေငျြစီနှငျ့ အငျတာဗြူးတှငျ ပွောကွားသညျ။ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျထိနျးခြုပျရာဒသေတှငျးရှိ သာမနျပွညျသူလူထုမြားအနဖွေငျ့ နိုငျငံသားဖွဈမှု သကျသခေံအ ထောကျအထား လကျဝယျရရှိစရေေးအပွငျ ရှေးကောကျပှဲမြားတှငျ မဲပေးခှငျ့ရှိစရေနျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ နှငျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြားအကွား၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးနှငျ့ သကျဆိုငျသညျ့ဒသေန်တရ (သို့မဟုတျ) ပွညျနယျ/တိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအကွားတှငျ မူဝါဒတိတိကကြ သတျမှတျထားခွငျး မတှရေ့ကွောငျး ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
မှနျပွညျလူ့အခှငျ့အရေးဖောငျဒေးရှငျး Hurfom သညျ မွနျမာနိုငျငံဒီမိုကရစေီရေး၊ စဈမှနျသောငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ လူ့အခှငျ့ အရေး အခွအေနမြေား တိုးတကျကောငျးမှနျလာစရေေးအတှကျ တိုကျတှနျးနှိုးဆျောမှုမြား၊ ပညာပေးအစီအစဉျမြား၊ သတငျး အခကျြအလကျမြားနှငျ့ အစီရငျခံစာမြား ထုတျဝခွေငျးမြား ပုံမှနျဆောငျရှကျနသေညျ့ မှနျပွညျနယျအခွစေိုကျ လူ့အခှငျ့အရေး ဖောငျဒေးရှငျးတဈခုဖွဈသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/10/08/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80 %8a%e1%80%ba%e1%8
၁၃။ COVID-19 ကူးစကျရောဂါကာလဖွဈသညျ့အတှကျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးဆငျးရာတှငျ အခကျအခဲမြားတှကွေုံ့နရေဟု မှနျညီညှတျရေးပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျး ပွောကွား
COVID-19 ကူးစကျရောဂါ ဖွဈပှားနသေောကာလဖွဈသညျ့အတှကျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးဆငျးရာတှငျ အခကျအခဲမြား တှကွေုံ့နရေကွောငျး မှနျညီညှတျရေးပါတီမှ ကြိုကျထိုမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးဝငျးမငျးထှနျး က ပွောကွားသညျ။“စညျးရုံးရေးဆငျးတဲ့အခါမှာ တှကွေုံ့ရတာက ကြိုကျထိုမွို့ပျေါက ပွညျသူတှဆေိုရငျ အပွငျသိပျမ ထှကျကွတော့ဘူး။ ကြေးရှာတှကေိုသှားရငျလညျး ပါတီမိတျဆကျလုပျဖို့အတှကျကို သကျဆိုငျရာကြေးရှာက ရာအိမျမှူးတှေ ကို အကူအညီတောငျးပွီးတော့မှ ပွညျသူ လေး၊ ငါး၊ ၁၀ ယောကျလောကျ စုပေးဖို့ပွောဆိုပွီးတော့မှ ကြှနျတျောတို့က စညျးရုံးရတာတှရှေိပါတယျ။ တခြို့ရှာတှကေတြော့ ပေးမဝငျတာတှရှေိတယျ။ ဂိတျတှထေားပွီး တားထားတာတှရှေိပါတယျ။ ဘယျပါတီကိုမှ ပေးမဝငျဘူးဆိုပွီး ပွောတာတှလေညျး ရှိပါတယျ” ဟု ဦးဝငျးမငျးထှနျးက ပွောကွားသညျ။
“တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေ ကိုယျစားလှယျတှအေနနေဲ့ လှတျတျောတှထေဲမှာ နရောအသငျ့တငျ့ရရှိမှသာ တိုငျးရငျးသား တှရေဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ကိုယျတိုငျတောငျးဆိုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအတှကျကွောငျ့လညျး တိုငျးရငျးသားပါတီတှေ အားလုံးက ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေးအတှကျကို ကွိုးစားနကွေတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေို အားပေးကွဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ”ဟု ဦးဝငျးမငျးထှနျးက ဆိုသညျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီအနဖွေငျ့ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ၌ မှနျပွညျနယျအတှငျး ကြိုကျထို၊ မျောလမွိုငျ၊ ကြိုကျမရော၊ ခြောငျးဆုံ၊ မုဒုံ၊ သံဖွူဇရပျ၊ ရေးနှငျ့ ပေါငျမွို့နယျတို့တှငျ မဲဆန်ဒနယျအပွညျ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ သှားမညျဖွဈကွောငျး၊ ကရငျပွညျနယျအတှငျး ဘားအံမွို့နယျ၌ အမြိုးသားလှတျတျော တဈနရော၊ ပွညျနယျလှတျတျော နှဈ နရော၊ ကော့ကရိတျမွို့နယျ၌ ပွညျသူ့လှတျတျော တဈနရော၊ အမြိုးသားလှတျတျော တဈနရော၊ ပွညျနယျလှတျတျော တဈ နရောနှငျ့ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျတှငျ ပွညျသူ့လှတျတျော တဈနရော၊ အမြိုးသားလှတျတျော နှဈနရောနှငျ့ ပွညျနယျ လှတျတျော နှဈနရော၊ မှနျပွညျနယျတှငျ ဗမာတိုငျးရငျးသားရေးရာ ကိုယျစားလှယျ တဈနရောနှငျ့ ကရငျပွညျနယျတှငျ မှနျတိုငျးရငျးသားရေးရာ ကိုယျစားလှယျ တဈနရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထို့ပွငျ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီး၌ ရှပွေညျသာ-မှျောဘီ-ထနျးတပငျမွို့နယျမြားတှငျ အမြိုးသားလှတျတျော တဈနရော၊ တောငျဥက်ကလာပ၊ ဒေါပုံ၊ ရှပွေညျသာ၊ သာကတေနှငျ့ စမျးခြောငျးမွို့နယျမြားတှငျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော တဈနရောစီနှငျ့ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး ပဲခူးမွို့နယျတှငျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော နှဈနရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ အရှေးခယျြခံသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/194836
၁၄။ ကိုဗဈကာကှယျရေး RCSS/SSA ထိနျးခြုပျသညျ့ကြေးလကျမြားအတှငျး ပွငျပလူဝငျထှကျသှားလာခှငျ့မပွု
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ကိုဗဈကူးစကျမှုနှုနျးမွငျ့မားလာပွီး သဆေုံးမှုလညျးမြားပွားလာသညျ့အတှကျ ကြေးလကျနလေူထု ကနျြးမာ ရေး အလေးထားကာ မိမိထိနျးခြုပျလှုပျရှားရာဒသေ ကြေးလကျမြားအတှငျး ပွငျပလူဝငျထှကျသှားလာမှုကို ဟနျ့တားထား ကွောငျး RCSS/SSA က ကွညောခကျြတစောငျထုတျပွနျလိုကျသညျ။
အခကျြ ၆ ခကျြပါ RCSS/SSA ၏ အဆိုပါကိုဗဈရောဂါထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ကွညောခကျြကို အောကျတိုဘာလ ၅ ရကျနရေ့ကျစှဲဖွငျ့ ထုတျပွနျလိုကျခွငျးဖွဈပွီး၊ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ စညျးရုံးရေးဆငျးမညျ့ပါတီမြားအနဖွေငျ့ ကနျြးမာရေး ဌာနမှ ထုတျပွနျသော စညျးကမျးခကျြမြားအတိုငျး တိတိကကြလြိုကျနာရနျ ဟူသောအခကျြပါရှိပါသညျ။ ၎င်းငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး RCSS/SSA ပွောခှငျ့ရ ဒုဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေးက- “ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျမှုက အရမျးပွငျးထနျနပေါတယျ။ ကြေးလကျ ရပျရှာထဲ ကှငျးဆငျးစညျးရုံးရေးဆငျးမယျ့ ပါတီတှအေနနေဲ့လညျး လူထုရဲ့ ကနျြးမာရေးကိုအဓိက အလေးထားရမယျ။ ကှငျးဆငျးမှ စညျးရုံးနိုငျတာမဟုတျပါဘူး။ အခုဆိုရငျ အှနျလိုငျးကနေ စညျးရုံးရေးလုပျနကွေတာလညျးတှရေ့တယျ။ အခကျ အခဲလေးတှတေော့ရှိမှာပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့အလုပျမဖွဈတဲ့အထိ တော့မဖွဈပါဘူး။”ဟု သြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောသညျ။
ကွငွောခကျြတှငျ RCSS/SSA ထိနျးခြုပျနယျမွအေတှငျးရှိ ကြေးလကျမြားသို့ ပွငျပရှာမှလူမြားဝငျရောကျခှငျ့၊ ရှာသားမြားရှာ ပွငျထှကျခှငျ့ ကို အောကျတိုဘာလ ၅ ရကျမှ ၃၁ ရကျနအေ့ထိပိတျပငျထားသညျ။ အရေးပျေါအခွအေနေ မှသာ ရှာသားမြား စုပေါငျးပွီးမှ ရှာပွငျထှကျနိုငျကွောငျးလညျး ဒုဗိုလျမှူးကွီးအုမျခေးကပွောသညျ။ https://burmese.shannews.org/arch ives/18789
ကခငျြပွညျနယျ ဗနျးမျောခရိုငျတှငျ ပထမအကွိမျ မဲစာရငျးကွညောပွီးနောကျ မဲဆန်ဒရှငျစာရငျး ၈၀၀၀ ခနျ့ ပွနျတိုးလာ ကွောငျး ဗနျးမျောခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံးမှ သိရသညျ။
ပထမအကွိမျ မဲစာရငျးကပျရာတှငျ ဗနျးမျောခရိုငျအတှငျးရှိ မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသညျ့ မဲဆန်ဒရှငျ၂သိနျး ၄သောငျးခနျ့ရှိသျောလညျး ဒုတိယအကွိမျမဲစာရငျးတှငျ ၈ထောငျခနျ့တိုးလာသညျ့အတှကျ လကျရှိနောကျဆုံးစာရငျးအရ မဲဆန်ဒရှငျစာရငျး၂၄၈၁၈၁ ရှိနပွေီဖွဈကွောငျး ဗနျးမျောခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ အရာရှိ ဦးကြျောသိနျးက ဆိုသညျ။“ ခုစာရငျးက မပိတျသေးဘူး ဆိုတော့ အတိအကပြွောလို့မရသေးဘူး။ ဒီထကျတိုးခငျြတိုးလာနိုငျသေးတယျ။ လောလောဆယျတော့ ပုံစံ (၃-က) နဲ့လာ လြှောကျထားတဲ့ ဦးရကေ ၄၀၀ကြျောရှိနပွေီ။ ဒီ ၄၀၀ ကြျောက ခုန ဒုတိယအကွိမျ မဲစာရငျးကွညောတဲ့အထဲမှာ မပါသေး ဘူး။ ခုနောကျပိုငျးပွနျလာလြှောကျတဲ့ စာရငျးတှဖွေဈပါတယျ။” ဟု အရာရှိ ဦးကြျောသိနျးက ပွောသညျ။
ဗနျးမျောခရိုငျအတှငျး မွို့နယျပေါငျး ၄ ခုအနကျ မဲဆန်ဒရှငျစာရငျးမှာ ဗနျးမျောမွို့နယျတှငျ ၉၀၈၆၈ ၊ မနျစီမွို့နယျ ၄၀၁၈၂ ၊ မိုးမောကျမွို့နယျ ၅၂၁၈၇ နှငျ့ ရှကေူမွို့နယျ ၆၄၉၄၄ အသီးသီးရှိကွောငျး သိရသညျ။ ကခငျြပွညျနယျ တဈပွညျနယျလုံးတှငျ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ပါတီပေါငျး ၁၉ ပါတီရှိကာ လူဦးရအေားဖွငျ့ ၁၁ သိနျးနီးပါး ရှိသညျ။ ဗနျးမျောခရိုငျတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ပါတီပေါငျး ၁၁ ပါတီရှိပွီး တဈသီးပုဂ်ဂလ ပွိုငျမညျ့သူ ၂ ဦး ပါဝငျသညျ။ မဲရုံမြားမှာ ဗနျးမျောမွို့နယျတှငျ ၆၆ ရုံ၊ မံစီမွို့နယျ ၃၉ ရုံ၊ မိုးမောကျမွို့နယျ ၄၅ ရုံ၊ ရှကေူမွို့နယျ ၅၁ ရုံ ရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာမှ သိရ သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/20 20/10/07/%e1%80%97%e1%80%94%e1%80%ba%e1%
ဒသေတှငျး တိုငျးရငျးသား အခွပွေု နိုငျငံရေးပါတီမြား ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး မှနျ၊ ပအိုဝျးနှငျ့ ကရငျလူငယျမြား အောကျတိုဘာ ၇ ရကျက သထုံမွို့နယျ နောငျကုလားကြေးရှာရှိ ပအိုဝျးအမြိုးသား အဖှဲ့ခြုပျ (PNO) ပါတီ (မှနျပွညျနယျ) ရုံးတှငျ အလှတျသဘော တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ အဆိုပါ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲသို့ ကရငျ လူငယျမြား အစညျးအရုံး၊ ကရငျလူငယျကှနျရကျ၊ မှနျလူငယျအဖှဲ့၊ ပအိုဝျးလူငယျကှနျရကျ၊ ပအိုဝျးမြိုးဆကျသဈ လူငယျ ကှနျရကျတို့မှ လူငယျကိုယျစားလှယျမြား တကျရောကျခဲ့ကွကွောငျး သိရသညျ။
“ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့က လကျရှိမှာ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး စညျးရုံးရေးဆငျးဖို့က COVID-19 ရောဂါနဲ့က အခကျ အခဲတှေ ဖွဈနတေယျ။ အဲ့ဒီအတှကျကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ PNO ပါတီရယျ၊ ကရငျပွညျသူ့ပါတီရယျ၊ နောကျ မှနျညီညှတျရေး ပါတီတှကေို ဘယျလိုဝနျးရံကွမလဲပေါ့နျော။ အဲဒါတှကေို တိုငျပငျဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ ကြှနျတျောတို့ PNO ပါတီနဲ့ ကရငျပွညျသူ့ပါတီတို့က ပူးပေါငျးပွီးတော့ မဲဆှယျစညျးရုံးတာတှေ၊ နောကျ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဆိုငျးဘုတျတှကေို ပူးတှဲပွီးတော့ စိုကျထူတာတှတေော့ ဆောငျရှကျခဲ့ကွပါတယျ။ နောကျစညျးရုံးရေး ဆငျးကွတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုအခွအေနေ မြိုးတှေ ကွုံတှရေ့သလဲပေါ့။ နောကျဘယျလို နရောတှမှော တှဲလုပျမယျ။ ဘယျလိုနရောတှမှော ခှဲပွီးလုပျကွမယျပေါ့။ အဲဒါ တှကေို တိုငျပငျဆှေးနှေး ဖွဈခဲ့ပါတယျ”ဟု ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ (PNO) ပါတီ (မှနျပွညျနယျ) အတှငျးမှူး ခှနျတဇေ က ပွောကွားသညျ။ လာမညျ့ အောကျတိုဘာ ၁၈ ရကျတှငျ မှနျ၊ ကရငျ၊ ပအိုဝျးလူငယျတှေ ထပျမံတှဆေုံ့ ဆှေးနှေးကွရနျ ရှိကွောငျးနှငျ့ ဆှေးနှေးပွီးပါက ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေး Campaign လုပျဆောငျသှားရနျ တိုငျပငျထားကွောငျး ခှနျတဇေ က ဆကျလကျ ပွောကွားသညျ။
ထို့အတူ ကရငျလူငယျကှနျရကျ (မှနျပွညျနယျ) တာဝနျခံ စောသောကွာကလညျး “အဓိကကတော့ လူငယျတှေ အခငျြးခငျြး ကွားထဲမှာ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျနိုငျမယျ့ ကိစ်စတှကေို ပူးပေါငျးလုပျမယျပေါ့။ အမှနျက အလှတျသဘော တှဆေုံ့ဆှေးနှေး ကွတာပါဘဲ။ ရှေးကောကျပှဲမှာ တိုငျးရငျးသားပါတီတှအေောငျနိုငျရေးအတှကျကို အဓိကထားပွီး ဆှေးနှေးဖွဈကွပါတယျ။ နောကျလာမယျ့ အောကျတိုဘာ ၁၈ ရကျမှ ပအိုဝျးလူငယျ၊ ကရငျလူငယျ၊ မှနျလူငယျတှေ စုပေါငျးပွီးတော့ သထုံနဲ့ပေါငျ မွို့နယျအတှငျးမှာ ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေးအတှကျ စီတနျးလှညျ့လညျဖို့ အတှကျကိုတော့ အကွမျးဖငျြး ဆုံးဖွတျထား ပါတယျ”ဟု ပွောကွားသညျ။ လကျရှိတှငျလညျး သထုံမွို့နယျအတှငျး ပအိုဝျးအမြိုးသား အဖှဲ့ခြုပျ (PNO) ပါတီ နှငျ့ ကရငျ ပွညျသူ့ပါတီ (KPP) တို့ပူးပေါငျးကာ ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျ စိုကျထူခွငျးမြား ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ့အပွငျ သံဖွူ ဇရပျမွို့နယျနှငျ့ ရေးမွို့နယျမြားအတှငျး မှနျညီညှတျရေးပါတီမှ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျမြားစိုကျထူရာ၌ ဒသေခံ ကရငျတိုငျးရငျးသားမြားမှ တကျရောကျ ဝနျးရံပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/a rticle/195
မလေးရှားနိုငျငံတှငျ သဆေုံးသညျ့ အသကျ (၂၁) နှဈအရှယျ မိုငျရှလှေတေီာလျ၏ ရုပျအလောငျးအား ဇာတိမွို့ ခငျြးပွညျနယျ ထနျတလနျမွို့သို့ဝငျခှငျ့မပွုဘဲ မွို့အပွငျလမျးဘေးတှငျ မွမွေုပျခိုငျးခဲ့သညျ့ ထနျတလနျမွို့မှ သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိ သူမြားကို ထိထိရောကျရောကျအရေးယူရနျ ခငျြးကြောငျးသား/လူငယျအဖှဲ့အစညျးအပေါငျး (၁၃) ဖှဲ့က တောငျးဆိုလိုကျ သညျ။ အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့အနဖွေငျ့ ထနျတလနျမွို့ခံ (ရပျမိရပျဖ၊ လူငယျ) အဖှဲ့အစညျး မြား ပါဝငျသော လှတျလပျသညျ့စုံစမျးစဈဆေးမှုအဖှဲ့(Independent Inquiry) တရပျကိုဖှဲ့စညျးကာ မိုငျရှလှေတေီာလျရုပျ ကလပျ အား ထနျတလနျမွို့တှငျးသို့ ဝငျခှငျ့မပွုခွငျးနှငျ့ ဂုဏျသိက်ခာရှိစှာအသုဘခခြွငျးမရှိအောငျ တားဆီးပိတျပငျသညျ့ တာဝနျရှိသူမြားကို အမြားပွညျသူ သိရှိနိုငျရေးခပြွပေးပါရနျနှငျ ထိရောကျစှာအရေးယူဆောငျရှကျမှုမြားလုပျဆောငျပေးရနျ ခငျြးကြောငျးသား/လူငယျ အဖှဲ့အစညျး (၁၃) ဖှဲ့က အောကျတိုဘာလ (၇) ရကျနကေ့ ပူးတှဲကွညောခကျြတဈဆောငျထုတျ ပွနျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ဗဟိုခငျြးလူငယျမြားအဖှဲ့အစညျး၏ ဥက်ကဌ Salai An No Bik က “ရုပျကလာပျကို သံတမနျရေးအရ မလေးရှာကနေ၊ ရနျကုနျထိ၊ ရနျကုနျကနေ ထနျတလနျမွို့အထိတောငျမှသယျလာနိုငျပွီး ဘာဖွဈလို့ ကိုဗဈကျောမတီက ထနျတလနျမွို့ ထဲကို ဘာလို့ဝငျခှငျ့မပွုတာလဲ ဒါကို ကနြျောတို့ကနျ့ကှကျရှုခတြယျ၊ ကနြျောသိရသလောကျကတော့ အဲဒီထနျတလနျ ကိုဗဈ ကျောမတီက ဗမာတှကွေီးပဲ အဲမှာက သူတို့က ခငျြးဓလထေုံ့းတမျးစဉျလာကိုနားမလညျဘဲနဲ့ ကိုဗဈကိုအကွောငျး ပွပွီးမှ အဲလိုလုပျတာတော့ ကနြျောတို့ လုံးဝလကျမခံနိုငျဘူး၊ နောကျတဈခါဆိုရငျတော့ ကနြျောတို့ခှငျ့လှတျမှာမဟုတျဘူး၊ ကနြျော တို့ တောငျးဆိုထားတဲ့အတိုငျးလုပျစခေငျြတယျ အဲဒါမလုပျပေးဘူးဆိုရငျ ကနြျောတို့ မွို့နယျ (၉) မွို့က လူငယျတှေ ဆန်ဒ ဖျောထုတျတာလုပျနိုငျတယျ”ဟု ခိုနူမျးသုနျကိုပွောသညျ။ မိုငျရှလှေတေီာလျ အသကျ (၂၁) နှဈသညျ စကျတငျဘာလ (၂၉) ရကျနေ့ ည (၈) နာရီခနျ့အခြိနျ မလေးရှားနိုငျငံရှိ (၈) ထပျတိုကျပျေါမှပွုတျကသြဆေုံးခဲ့ပွီး ထနျတလနျမွို့တှငျ မွမွေုပျ သဂွိုလျရနျ မလေးရှားနိုငျငံမှ ရနျကုနျလဆေိပျ၊ မန်တလေး၊ ဟားခါး အဆငျ့ဆငျ့သယျဆောငျလာပွီးနောကျ ထနျတလနျမွို့နယျ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြူပျ၊ ကုသရေးကျောမတီ က ထနျတလနျမွို့အတှငျး ဝငျခှငျ့မပွုဘဲ ဟားခါးသှားသညျ့ လမျးမ ဘေးတှငျမွမွေုပျသဂွိုလျ ခိုငျးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
အဆိုပါဖွဈရပျနှငျ့ပတျသကျ၍ ခငျြးမီဒီယာမြားမှရေးသားဖျောပွပွီး ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါတှငျ ကနျ့ကှကျဝဖေနျမှုမြား မွငျ့တကျ လာပွီးနောကျ သကျဆိုငျရာအာဏာပိုငျမြားက ပွနျလညျခှငျ့ပွုသဖွငျ့ မိုငျရှလှေတေီာလျ၏ ရုပျအလောငျးကို ပွနျလညျ တူးဖျောကာ ထနျတလနျမွို့သခြိူငျးတှငျ အောကျတိုဘာလ ၆ ရကျနညေ့က ပွနျလညျသဂွိုလျခဲ့ကွသညျ။
မိုငျရှလှေတေီာလျ ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ တောငျးဆိုခဲ့ကွသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားမှာ Thantlang Youth Association ၊ Thantlang Sianghleirun ChungKhar ၊ Central Chin Youth Organization ၊ Chin Literature and Culture Committee (Universities-Yangon) ၊ Zomi Siamsin Kipawlna-Myanmar ၊ Chin Student Union,kalay ၊ Falam Phunsang Tlawngta Pawlkom,Myanmar ၊ Lairawn Zirsang Pawlkom,kalay ၊ Zo khangno Kipawlna (Tonzang) ၊ Zo Youth Organization (Tonzang) ၊ Mindat University Student’s Union ၊ Hakha University Student’s Organization ၊ Falam Mino Pawlkom တို့ဖွဈကွသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76121
ရှေးကောကျပှဲကာလ နီးလာနခြေိနျ ရှမျးမွောကျဒသေတှငျ ဆကျတိုကျဖွဈပှားလာနသေညျ့ တိုကျပှဲမြား ရပျတနျ့ပေးရနျ ဒသေခံမြားက တောငျးဆို လိုကျသညျ။ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ ပါတီစုံ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲကွီးတှငျ မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူမြား အနဖွေငျ့ မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးမှု မရှိရလအေောငျ အောကျတိုဘာလ ပထမအပတျအတှငျးက စတငျဖွဈပှား နသေညျ့ တိုကျပှဲမြားကို အမွနျဆုံးရပျတနျ့ ပေးရနျ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ကြောကျမဲဒသေခံမြားက တောငျးဆို လိုကျခွငျးဖွဈသညျ။
မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ရှမျးလူငယျကှနျရကျက နနျးပနျးအိဖွူက “၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ တုနျးကဆိုရငျ ကြ နျောတို့ ကြေးသီးသညျ လုံခွုံမှု မရှိသောကွောငျ့ စဈဖွဈနတေဲ့ အခါကတြော့ ကြေးသီး၊ မိုငျးရှုး၊ တနျ့ ယနျး တို့က ကနြျောတို့က ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပခဲ့ရတာရှိတယျ။ ပွီးတော့မှ ကွားဖွတျရှေး ကောကျပှဲကို ကြ နျောတို့ ပွနျကငျြးပရတာ ရှိတယျပေါ့။ အဲလိုမြိုး အခွအေနေ ဒီလိုမြိုး အခွအေနမှော ဆိုလို့ရှိရငျ ဒီရှေး ကောကျပှဲက အဲမှာ မဲပုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရငျ အဲဒီဒသေမှာ မဲ ထညျ့ခှငျ့ မရှိဘူးလေ။ အဲဒါကွောငျ့မို့လို့ အဲဒီ စဈပှဲ ကို အမွနျဆုံးရပျတနျ့ပေးပါလို့ တောငျးဆိုခငျြတာပါ” ဟု ပွောသညျ။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူမြားဖကျမှ ၎င်းငျးတို့ ရှေးခယျြမညျ့ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြားကို အဟနျ့ အတား တဈစုံတဈရာမရှိပဲ ရှေးခယျြနိုငျရနျနှငျ့ လကျရှိဖွဈပှားလကျြရှိသညျ့ ကပျရောဂါကွောငျ့ စီးပှားရေး ထိခိုကျနဈနာမှု မြားလညျး ရှိနသေညျ့အတှကျ တိုကျပှဲမြားကို အမွနျဆုံးရပျတနျ့ပေးရနျ နမျ့ခုံပရဟိတအသငျး တာဝနျရှိသူတဈဦးကလညျး တောငျးဆိုသညျ။
ကခငျြပွညျနယျရှိ ဆှမျပရာဘှမျ၊ ဝိုငျးမျော၊ ခေါငျလနျဖူး၊ မခမျြးဘော၊ ခြီဖှေ၊ ဆော့လျော၊ အငျဂနျြး ယနျ၊ မံစီ၊ တနိုငျး၊ ရှကေူ စသညျ့မွို့နယျမြားရှိ အခြို့ကြေးရှာအုပျစုမြားတှငျ မဲဆန်ဒခံယူပှဲမြား မပွုလုပျနိုငျခဲ့သညျသာမက ရှေးကောကျပှဲ မပွုနိုငျသညျ့ ကြေးရှာ အုပျစု စုစုပေါငျး ၂၂၁ ရှာခနျ့ရှိခဲ့သညျဟု ရှေးကောကျပှဲစောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသညျ့အဖှဲ့မြား၏ မှတျတမျးမြားထဲတှငျ တှရေ့သညျ။ ထို့နညျးအတူ ကရငျပွညျနယျရှိ မွဝတီ၊ သံတောငျကွီး၊ ဘားအံ၊ လှိုငျးဘှဲ့၊ ကော့ကရိတျ၊ ကွာအငျးဆိပျကွီး မွို့နယျမြား အတှငျးရှိ ကြေးရှာအုပျစု အခြို့တှငျ မဲဆန်ဒခံယူပှဲမြားကို ရုတျသိမျးခဲ့ သညျ့အပွငျ မှနျပွညျနယျ ဘီလငျးမွို့နယျရှိ ဘျောနျောကွီး ကြေးရှာအုပျစုတှငျလညျး မဲဆန်ဒခံယူနိုငျခွငျး မရှိဟု သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76119
ကရငျပွညျနယျ၊ မွဝတီမွို့နယျ၊ ရှကေုက်ကိုလျမွို့သဈ စီမံကိနျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကရငျပွညျ နယျခွားစောငျ့တပျ (BGF) အဖှဲ့ မှ ပေးသညျ့ လာဘျငှမြေားကို လကျခံရယူသညျဟု သံသယရှိသဖွငျ့ အနညျးဆုံး တပျမတျော အရာရှိကွီး ၃ ဦး စုံစမျး စဈ ဆေးခံ နရေကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ကရငျပွညျနယျရှိ စဈဆငျရေး ကှပျကဲမှု ဌာနခြုပျ (စကခ) ၁၃ တပျမမှူး၊ စကခ ၁၃ ဗြူဟာမှူးနှငျ့ ခလရ ၉၇ တပျရငျးမှူးတို့ မှာ ငှကွေေးလကျခံထားသညျဟု လူမှုကှနျရကျတှငျ ပြံ့နှံ့လာသဖွငျ့ တပျမတျောက စုံစမျးစဈဆေးကွညျ့ရာ သံသယဖွဈစရာ အခကျြမြား တှေ့ ရှိသဖွငျ့ နပွေညျတျောသို့ ချေါယူစဈဆေးနခွေငျး ဖွဈသညျ။
“ပွောနိုငျတာကတော့ စုံစမျးစဈဆေးလကျြရှိကွောငျး သိရတယျ။ အဲဒီအဖှဲ့ ကနေ ပေးတဲ့ငှကွေေးကို လကျခံထားတယျလို့ သံသယရှိတဲ့အတှကျ စုံစမျးစဈဆေးနတေယျ။ ဥပဒအေတိုငျး ဆကျလကျ ဆောငျရှကျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ”ဟု တပျမတျော သတငျးရငျးမွဈတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ ယခုလို စုံစမျးစဈဆေးခံရခွငျးမှာ ယငျးစီမံကိနျး တညျဆောကျ ခွငျးနှငျ့ လုံးဝ မသကျဆိုငျဘဲ စီမံကိနျးအတှငျးရှိ ကာစီနို လောငျးကစားဝိုငျးမြားနှငျ့ ဆကျစပျလကျြရှိကွောငျး၊ ယခု ဖွဈစဉျ တှငျ တပျမတျော အရာရှိမြားသာမက ဒသေဆိုငျရာ အာဏာပိုငျမြား ပါဝငျပတျသကျမှုလညျး ရှိနကွေောငျးသိရသညျ။ ဖွဈစဉျ အသေးစိတျကို ဧရာဝတီက ဆကျလကျ စုံစမျးနဆေဲ ဖွဈသညျ။
ကရငျပွညျနယျ၊ မွဝတီမွို့နယျ၊ ရှကေုက်ကိုလျမွို့သဈ စီမံကိနျးတှငျ တပျမတျောက လုံးဝ ပါဝငျပတျသကျခွငျး မရှိကွောငျး တပျမတျော၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာ ၄ ရကျနတှေ့ငျ ပွုလုပျသညျ့ သတငျး စာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွောဆိုထားသညျ။ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ပတျသကျခွငျးမရှိဟု ငွငျးဆိုသျောလညျး ယငျးစီမံကိနျးသညျ တပျမတျောလကျအောကျရှိ ကရငျ ပွညျနယျ နယျခွားစောငျ့တပျ(BGF)က ဦးဆောငျပွီး အကောငျအထညျဖျောနခွေငျး ဖွဈ သညျ။ စီမံကိနျးစတငျခှငျ့ပွုခဲ့သညျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇူလိုငျ ၃၀ ရကျနတှေ့ငျ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျပါဝငျသညျ့ အရှေ့ တောငျတိုငျး စဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူးမှာ ယခငျ နိုငျငံတျောကာကှယျရေးတက်ကသိုလျကြောငျးအုပျကွီး ဗိုလျခြုပျ မြိုးမိုးအောငျ ဖွဈပွီး ၂၀၂၀ ခုနှဈ မတျလတှငျ ၎င်းငျးနရောအား ဗိုလျမှူးခြုပျကိုကိုမောငျအား ခနျ့အပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ကရငျငွိမျးခမျြးရေး အထောကျအကူပွုကှနျရကျ (KPSN) အဖှဲ့၏ ယခုနှဈ မတျလက ထုတျပွနျခဲ့သညျ့ “တို့မွမြေားကို လောငျးကစားပဈခွငျး”အစီအရငျခံစာတှငျ စီမံကိနျးသညျ တပျမတျောထိပျတနျးခေါငျးဆောငျပိုငျးမှ ကြောထောကျ နောကျခံ ပွုထားသညျ့ စီမံကိနျးဖွဈကွောငျး သကျသခေံဖျောပွနသေညျ့ အကွောငျးအခကျြမြားစှာရှိနခေဲ့ကွောငျး ဖျောပွခဲ့သညျ။ ရှကေုက်ကိုလျစီမံကိနျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဒသေခံမြားအကွား တရားမဝငျ လောငျးကစားမှုမြားနှငျ့ တရုတျနိုငျငံသားအမြား အပွား ဝငျထှကျမှုမြားကွောငျ့ ရာဇဝတျမှုနှငျ့ လူမှုရေးဆိုငျရာ ပွဿနာမြား မွငျ့တကျလာမညျကို စိုးရိမျလြှကျရှိပွီး ဝဖေနျ ကနျ့ကှကျခံနရေသညျ့ စီမံကိနျးဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news /2020/10/08/231296.html
လာမယျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာ မှနျပွညျနယျ၊ ဘီးလငျးမွို့နယျရှိ ကြေးရှာ ၅ ရှာက ပွညျသူ ၁၀၀၀ နီးပါး မဲပေးခှငျ့ ရဦးမှာ မဟုတျဘူးလို့ သိရပါတယျ။ မှနျပွညျနယျမှာတော့ လာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ နောကျဆုံးအကွိမျ မဲစာရငျးကို အောကျတိုဘာ ၁ ရကျနကေ့နေ ၁၄ ရကျအတှငျး ကပျထားကွညောပေးနပွေီး တပျမဲစာရငျး အပါအဝငျ ဆန်ဒမဲပေးနိုငျသူ ၁၈ သိနျးကြျော ရှိတယျလို့ ကျောမရှငျက ထုတျပွနျထားပါတယျ။ ဒါပယျေ့လညျး အဲဒီမဲစာရငျးမှာ မှနျပွညျနယျ ဘီးလငျးမွို့နယျ ဘောနျောခီးကြေးရှာအုပျစုရှိ ရှာ ၅ ရှာက ပွညျသူတှေ ပါဝငျလာခွငျး မရှိသေးတာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီကြေးရှာတှမှော အုပျခြုပျရေးအပိုငျးက သှားရောကျ တာဝနျထမျးဆောငျရှကျနိုငျခွငျး မရှိသေးအတှကျကွောငျ့ မဲစာရငျး ကောကျယူလို့ မရတဲ့ ဒသေအဖွဈ သတျမှတျထားတာလို့ မှနျပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဦးဟိဏျးလငျးထကျ က ပွောပါတယျ။ ဘောနျောခီးကြေးရှာအုပျစုဟာ ဘီးလငျးမွို့နဲ့ မိုငျ ၅၀ လောကျ ကှာဝေးပွီး လမျးခရီး အခကျအခဲအပွငျ လကျရှိအခြိနျအထိ ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးတှေ မခနျ့အပျနိုငျသေးတဲ့ အတှကျကွောငျ့ မဲစာရငျး ပွုစုနိုငျ ခွငျး မရှိသေးတာလို့ ဆိုပါတယျ။
အခုလို အခွအေနကွေောငျ့ အဲဒီဒသေက ပွညျသူတှေ မဲပေးခှငျ့ရအောငျ အစိုးရရဲ့ ရပျကြေး အုပျခြုပျရေးမှူးရုံး စတငျဖှငျ့ လှဈနိုငျအောငျ လုပျဆောငျသှားဖို့ လိုအပျနတေယျလို့ NLD ပါတီ ဘီးလငျးမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ လောငျး ဦးကြျောမြိုးမငျးက ပွောပါတယျ။ ဘောနျောခီးကြေးရှာအုပျစုကို မဲစာရငျးကောကျယူလို့မရတဲ့ ဒသေအဖွဈ သတျမှတျထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ မကွာမီကာလမှာ အဲဒီဒသေမှာ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပသှားဖို့ ရှိ မရှိကို ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျက ကွညောပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘီးလငျးမွို့နယျ ဘောနျောခီးကြေးရှာအုပျစုရှိ ကြေးရှာ ရှာ ၅ ရှာက ပွညျသူတှဟော ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတုနျးကလညျး မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးထားပါတယျ။ http://burmes e.dvb.no/archives/415359
ခငျြးပွညျနယျ၊ ဟားခါး၊ မငျးတပျနဲ့ တီးတိနျမွို့နယျအဝငျမှာ ကုနျတငျယာဉျမောငျးနဲ့ ယာဉျနောကျလိုကျတှကေို အောကျတို ဘာ ၉ ရကျနကေ့ စတငျပွီး အာခေါငျတို့ဖတျယူ စဈဆေးသှားဖို့ ပွညျနယျအစိုးရက စီစဉျနပေါတယျ။
ကိုဗဈ ၁၉ ကပျရောဂါကာလမှာ ကုနျစညျစီးဆငျးမှု မရပျနားရအောငျနဲ့ ကိုဗဈရောဂါပိုး ပွနျ့ပှားမှု ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ အတှကျ လုပျဆောငျတာဖွဈတယျလို့ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးစိုးထကျက RFA ကို ပွောပါတယျ။“ကြှနျတျောတို့ အခုကိုဗဈကာလက နညျးနညျးလေးပိုပွီးတော့ ဒုတိယလှိုငျးမှာ ဖွဈစဉျတှဖွေဈပွီး သဆေုံးတာလညျးမြားတယျလေ။ ကြှနျတျောတို့ ခငျြးပွညျနယျ၊ မွောကျပိုငျး တီးတိနျမှာလညျး ကိုဗဈဖွဈတဲ့လူ ရှိတယျ။ မငျးတပျမှာဆို ၁၉ ယောကျရှိတယျ။ ရှိတာတှကေို ကနျြတဲ့ဒသေတှကေနေ ကုနျစညျတှေ ကူးသနျးတဲ့အခြိနျမှာ ကုနျစညျစီးဆငျးတာလညျး မရပျအောငျ၊ နောကျ လာတဲ့ လူတှလေညျး ရောဂါရှိ မရှိစဈဆေးဖို့ လိုအပျလာတဲ့ အတှကျ လုပျတာပါ။ ကားကွီးကှငျးမှာတော့ ယာဉျမောငျး ရယျ၊ ယာဉျနောကျလိုကျရော မဖွဈမနေ စဈရမှာ ပေါ့နျော။ ရောဂါကူးစကျရငျ ထိနျးခြုပျဖို့ အငျမတနျမှ ခကျပါတယျ။”
ကုနျကစြားရိတျအတှကျ အစိုးရက တာဝနျယူ ဆောငျရှကျပေးသှားမှာဖွဈတယျလို့ ပွောပါတယျ။ အာခေါငျတို့ဖတျယူ စဈဆေးနိုငျတာဟာ ဟားခါး၊ တီးတိနျနဲ့ မငျးတပျမွို့တှမှောသာ ပွုလုပျမှာဖွဈပွီး ကနျြတဲ့ မွို့ရှာတှမှောတော့ အပူခြိနျတိုငျး တာ စဈဆေးခွငျးသာ ပွုလုပျနတောဖွဈပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/chin-truck-drivers-corona-checkup-10082020032021.html
ကခငျြပွညျနယျ မိုးညှငျးခရိုငျတှငျ မသနျစှမျးမြားမဲပေးမညျ့ မဲရုံပေါငျး ၁၄၀ ရုံရှိကွောငျး မိုးညှငျးခရိုငျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ ရုံးမှ သိရသညျ။
မိုးညှငျးခရိုငျတှငျ မွို့နယျ ၃ခုရှိပွီး စုစုပေါငျး မဲရုံ ၂၈၀ ရုံရှိသညျ့အနကျ မသနျစှမျးမြား မဲထညျ့မညျ့ မဲရုံပေါငျး ၁၄၀ ရှိကွောငျး ခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံးမှ အရာရှိ ဦးမြိုးမငျးဦးက အတညျပွုပွောဆိုသညျ။“ အခု မသနျစှမျးတှေ မဲပေးမယျ့ မဲရုံ ပေါငျးက ခရိုငျတဈခုလုံးမှာဆို ၁၄၀ ရှိတယျ။ ဒီထဲမှာ တဈခြို့မဲရုံမှာကတြော့ ၁ ယောကျရှိတာပါမယျ ၂ ယောကျရှိတာရှိမယျ။ ပွနျ့ကြဲနတေဲ့သဘောပါ။ မဲလာပေးမယျ့ခြိနျမှာလညျး ကနြျောတို့အနနေဲ့ မသနျစှမျးတဲသူတှေ မဲပေးမယျ့ခြိနျမှာ လှယျလှယျ ကူကူ မဲပေးနိုငျဖို့အတှကျ ကနြျောတို့ ဒီလ လကုနျပိုငျးဆိုရငျ မဲရုံမှူးတှကေို သငျတနျးပေးဖို့ရှိတယျ။ အဲဒီခြိနျမှာလညျး မသနျ စှမျး မဲပေးခွငျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ ပညာပေးတာတှပေါ ထညျ့သှငျးသငျကွားပေးမှာဖွဈပါတယျ။”ဟု မိုးညှငျးခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အရာရှိဦးမြိုးမငျးဦးက ပွောသညျ။
သို့သျော မသနျစှမျးသူမြားအနဖွေငျ့ ကပျရောဂါကာလဖွဈနသေညျ့အတှကျ မဲပေးလမျးညှနျသငျကွား ပို့ခရြာတှငျ အခကျခဲရှိ နကွေောငျး ကခငျြပွညျနယျ မသနျစှမျးသူမြားအသငျး ဥက်ကဌ ဦးဇုံးယျော က ယခုလိုပွောသညျ။“ဒီနှဈကတော့ မသနျစှမျး တှကေို ရှေးကောကျပှဲလမျးညှနျ သငျပေးဖို့နိုငျငံတျောကနေ ဘတျဂတျြခပြေးပွီးတော့ သငျတနျးပေးခိုငျးတယျလို့ ကနြျောတို့ ဆီမှာ မွနျမာနိုငျငံမသနျစှမျးအဖှဲ့ခြုပျကနေ ညှနျကွားစာရောကျလာတဲ့အတှကျ ကနြျောတို့လညျး သငျတနျးတှလေုပျနပေါ တယျ။ ရောဂါကွောငျ့မို့ လူတှမြေားမြား စုလို့မရတာတှကွေောငျ့ သိပျတော့အဆငျမပွဘေူး။ ခုလောလောဆယျတော့ ဗနျးမျောဘကျပေးဖို့ စီစဉျနကွေပါတယျ။ မကွာခငျမိုးညငျးခရိုငျသှားပေးဖို့လညျး ရှိပါတယျ။”ဟု ကခငျြပွညျနယျ မသနျစှမျး သူမြားအသငျး ဥက်ကဌ ဦးဇုံးယျောက ပွောသညျ။
မသနျစှမျးမြား မဲစာရငျးကောကျယူရာတှငျ ဝီးခြဲလျသုံးသူ၊ ဂြိုငျးထောကျသုံးသူ၊ အခွားခြို့ယှငျးသူမြား အမြိုးအစားခှဲခွား ထားသညျဟု ဆိုသညျ။ မဲထညျ့ခှငျ့ရှိသူမြားမှာ မိုးညှငျးမွို့နယျတှငျ ၂၃၇ ဦး၊ မိုးကောငျးမွို့နယျ ၁၀၅ ဦးနှငျ့ ဖားကနျ့မွို့နယျ ၁၄၂ ဦးရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/07/%e1%80%99%e1%80%ad%e 1%80%af%e1%80%b8%e1
မှနျအမြိုးသားပါတီနှငျ့ မှနျဒသေလုံးဆိုငျရာဒီမိုကရစေီပါတီကို ပေါငျးစညျးဖှဲ့စညျးထားသညျ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီ (MUP) က ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး အမြိုးသားလှတျတျောတဈနရောနှငျ့ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော ၅ နရော စုစုပေါငျး ၆ နရော အထိ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျဟု သိရသညျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အမြိုးသားလှတျတျောမဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၂) နှငျ့ စမျးခြောငျး၊ သာကတေ၊ ရှပွေညျသာ၊ ဒေါပုံနှငျ့ တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျမြားတှငျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော ၅ နရော အတှကျ မှနျညီညှတျရေးပါတီက ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈသညျ။
တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာဖွငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၆၅ ဦးအထိ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး လူမြိုးရေးစိတျဓာတျ ကွောငျ့ မဖွဈမနဝေငျပွိုငျရသညျ့ နရောမြားတှငျ ရနျကုနျပါဝငျသညျဟု ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး မှနျညီညှတျရေးပါတီ အတှငျး ရေးမှူး မငျးဗညားဦးက ပွောသညျ။ “ရနျကုနျက အရငျကတညျးက ကြှနျတျောတို့ ဒသေပဲလေ။ တကယျတမျးဆို ကြှနျတျော တို့က ဧညျ့သညျမဟုတျဘူး။ ကြှနျတျောတို့ လာပွိုငျတာပဲ ထူးထူးဆနျးဆနျးဖွဈနတော၊ အမှနျက ထူးဆနျးစရာမဟုတျဘူး၊ ဒါ ကြှနျတျောတို့ရဲ့အိမျ၊ ကြှနျတျောတို့နတေဲ့ဒသေ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ထှကျခှာသှားရတာပါ”ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတှငျ မှနျလူမြိုးမြားအတှကျတိုငျးရငျးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျနရော မရရှိခွငျးသညျ ရှေးကောကျ ပှဲ ဝငျပွိုငျရခွငျး၏ အဓိကအကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈကွောငျး ရှပွေညျသာမွို့နယျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၁) တှငျ မှနျညီညှတျရေးပါတီကိုယျစားပွု ဝငျပွိုငျမညျ့ မိကြိုကျစောက ပွောသညျ။ “တိုငျးရငျးသားအရေး လုပျမယျဆိုရငျ လှတျတျောထဲမှာ တိုငျးရငျးသားပေါငျးစုံရှိနဖေို့ လိုမယျဆိုတဲ့အခကျြကို သိလာတယျ။ မှနျလူမြိုးတှလှေုပျရှား မှုလုပျဖို့နရော လိုအပျတယျဆိုတာကို သိလာတယျ။ အဲ့လိုအခကျြတှကွေောငျ့ ရှေးကောကျပှဲဝငျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာပါ” ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီက ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးသညျ တိုငျးရငျးသား ကိုယျပိုငျလက်ခဏာဖျော ပွရနျ ဝငျပွိုငျခွငျးသာ ဖွဈနိုငျ‌ကွောငျး တိုငျးရငျးသားအရေးနှငျ့ နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူတဈဦးဖွဈသူ ဦးမောငျမောငျစိုး က မှတျခကျြပွုသညျ။ “သူတို့ တိုငျးရငျးသား ကိုယျပိုငျလက်ခဏာ ဖျောပွဖို့ ဝငျပွိုငျတာ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ရှေးကောကျပှဲတှမှော နိုငျတာ၊ မနိုငျတာကို ဝငျပွိုငျသူတှကေ သိပျအလေးမထားကွဘူးဗြ။ ဝငျပွိုငျတဲ့သူတှကေ သူတို့ရဲ့ အမှတျအသားလက်ခဏာ ကို ထငျပျေါစခေငျြတာကွောငျ့ ဝငျပွိုငျတာလညျးရှိပါတယျ”ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။ မှနျညီညှတျရေးပါတီ၏ နိုငျငံရေးမူဝါဒ ၇ ရပျ အနကျ နံပါတျ (၁) မှာ တဈနိုငျငံအတိုငျးအတာဖွငျ့ ပွညျတှငျးစဈရပျစဲရေးနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးကို ဖျောဆောငျပွီး တနျးတူရေးနှငျ့ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ကို အာမခံသော လူမြိုးကို အခွခေံဖှဲ့စညျးသညျ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုနိုငျငံတညျ ထောငျရနျဖွဈသညျ။ https://www.myanmar-now.org/mm/news/4661
ညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ (UNDP) ကိုယျစားပွု ကော့မှူးမွို့နယျတှငျ ရှေးကောကျပှဲ ယှဉျပွိုငျ မညျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးမြား၏ ဆိုငျးဘုတျကို COVID-19 အကွောငျးပွခကျြဖွငျ့ စိုကျထူခှငျ့ မပေးသေး ကွောငျး ယငျးပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားက ပွောကွားသညျ။
ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား ဆိုငျးဘုတျ စိုကျထူခှငျ့ရရေး အောကျတိုဘာ ၅ ရကျနှငျ့ စကျတငျဘာလ ကုနျပိုငျးက လေးကွိမျ စုစုပေါငျး ငါးကွိမျတငျပွရာ COVID-19 ပွီးမှ စိုကျထူခှငျ့ပေးမညျဟု မွို့နယျစညျပငျ အမှုဆောငျအရာရှိကပွောကွား ကွောငျး UNDP ပါတီ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးသနျ့ဇငျက The Daily Eleven သတငျးစာကို ပွောကွားသညျ။“ကြှနျတျောက ပွောတာပေ့ါ။ ဒီ COVID ကာလဆိုတာ ထပျတိုးရငျလညျး တိုးလိမျ့မယျ။ ကြှနျတျောတို့က မွငျနိုငျတဲ့ အရာမှမ ဟုတျတာ။ မှနျးလို့ရတဲ့ အရာမှမဟုတျတာ၊ ထပျတိုးလာခဲ့ရငျ ကြှနျတျောတို့က ဒီရှေးကောကျပှဲကိုဝငျဖို့ အောငျနိုငျရေးဆိုငျး ဘုတျတှေ ထောငျတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုလုပျရမှာလဲဆိုတော့၊ အဲဒါ ကြှနျတျောနဲ့ မဆိုငျဘူးတဲ့။ COVID ကျောမတီကနထေုတျ ပွနျထားတဲ့အတိုငျးပဲ ကြှနျတျောတို့ သှားတာတဲ့”ဟု ကော့မှူးမွို့နယျ အမှတျ (၂) မဲဆန်ဒနယျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော တှငျ ယှဉျပွိုငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးသနျ့ဇငျက ပွောကွားသညျ။
UNDP ပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဆိုငျးဘုတျမြားကို ကော့မှူးမွို့နယျ ဈေးအနီးနှငျ့ မွို့သဈထိပျနီးတှငျ နှဈခု စိုကျထူရနျ ရညျမှနျးထားသျောလညျး စညျပငျခှငျ့ပွုခကျြ မရရှိသေး၍ ကိုယျစားလှယျလာငျး ဆိုငျးဘုတျ တဈခုမှ စိုကျထူနိုငျခွငျး မရှိသေး ကွောငျး သိရသညျ။ ပါတီ ဆိုငျးဘုတျတငျခှငျ့ရရေးအတှကျ စကျတငျဘာ ၂၃ ရကျက မွို့နယျစညျပငျသာယာရေး ကျောမတီ ထံ ပထမအကွိမျ တငျပွရာ စညျပငျတာဝနျရှိသူမြားက စကျတငျဘာ ၂၄ ရကျတှငျ ဆိုငျးဘုတျ စိုကျထူမညျ့နရောကို လိုကျလံ ကွညျ့ရှုပေးမညျဟု ပွောကွားပွီးမှ COVID ကွောငျ့ ဆိုငျးဘုတျ စိုကျထူခှငျ့ မပွုကွောငျး ပွနျလညျ ပွောကွားလာခွငျး ဖွဈသညျဟု ကော့မှုးမွို့နယျ UNDP ပါတီဝငျ ဦးသောငျးဌေးက ပွောကွားသညျ။ UNDP ပါတီအနဖွေငျ့ ကော့မှူးမွိုနယျ ပွညျသူ့လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျတှငျ ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးဒေးဗဈလှမွငျ့နှငျ့ တိုငျးဒသေကွီး အမှတျ (၂) မဲဆန်ဒနယျတှငျ ဦးသနျ့ဇငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး ကော့မှူးမွို့နယျ ပါဝငျသညျ့ ကရငျတိုငျးရငျးသားလူမြိုး မဲဆန်ဒနယျအတှကျ ပါတီအထှထှေေ အတှငျးရေးမှူး ဒျေါနျောအုနျးလှ ယှဉျပွိုငျမညျဖွဈသညျ။ https://news-eleven.com /article/194965
၂၅။ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ အအေတေို့တိုကျပှဲဖွဈ၊ ဒသေခံမြား ဘေးလှတျရာ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျ
ရခိုငျပွညျနယျ ဘူးသီးတောငျမွို့နှငျ့ မလှမျးမကမျးတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရခိုငျ့တပျ အအေတေို့ တိုကျပှဲမြား သုံးရကျ ဆကျတိုကျကွာဖွဈပှားနရော အနီးအနားရှိကြေးရှာနသေူမြား ဘေးလှတျရာ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျမှုမြားရှိနကွေောငျး ဒသေတှငျးမှလာသော သတငျးမြားအရသိရသညျ။ ဘူးသီးတောငျမွို့၏ အရှဘေ့ကျတှငျရှိသော အိမျခွေ ၃၀ ဝနျးကငျြစီရှိ ဝမျးတှငျး၊ ခမီခြောငျးကြေးရှာမြားမှ ရှာသားမြားသညျ ပွငျရှညျရှာနှငျ့ ဘူးသီးတောငျမွို့ပျေါသို့ ထှကျပွေးလာခဲ့ကွရသညျဟု ဆိုသညျ။
“အခုလညျးဖွဈနတေယျ။ လကျနကျကွီးတှကေတြယျ။ ဆကျမနရေဲတော့ဘူး။ ရှာသားတှေ အကုနျလုံးထှကျပွေးလာကွ ရပွီ။ အခု ပွငျရှညျကို ရောကျနကွေပါတယျ။ စားရေးသောကျရေးက အခကျခဲရှိနတေယျ။ တိုကျပှဲဖွဈနတော သုံးရကျရှိနပွေီ။ ပွတျတောကျပွတျတောကျဖွဈတာ။ ဆကျတိုကျတော့ မဟုတျဘူး။”ဟု ဝမျးတှငျးရှာသား ဦးသာဇံလှက မဇ်ဈိမကို တယျလီ ဖုနျး မှ တဆငျ့ပွောသညျ။ လတျတလောတှငျ ဝမျးတှငျးရှာသားအားလုံးမှာ တဈမိုငျခနျ့ဝေးသညျ့ ပွငျရှညျကြေးရှာသို့ တိမျးရှောငျလာကွပွီး ခမီခြောငျးကြေးရှာသားမြားမှာမူ ဘူးသီးတောငျမွို့ပျေါမှ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတခြို့တှငျ ခိုလှုံနကွေ သညျ။ ပွငျရှညျကြေးရှာသို့ ထှကျပွေးလာသညျ့ မမြိုးခဈြသနျ့က “ ပဈသံကွားလို့ ပွေးလာတာပေါ့။ အဖပေဲ အိမျမှာကနျြခဲ့ တယျ။ လမျးမှာတော့ ဘာမှမဖွဈဘူး။ အပျေါက လယောဉျဝဲနတောတော့ ကွောကျတယျ။ လမျးကလညျး မပေါကျတော့ ရတှေအေငျးခြောကျတှကေူးပွီးသှားရတယျ။ အမကေလညျး အိုနပွေီ။ ဒါကွောငျ့ ကမြအဈကိုသားတဈယောကျက အမကေို တှဲယူခဲ့ရတယျ။ ကမြတို့မှာ မိသားစု ခွောကျ ယောကျပါတယျ။” ဟု ပွောသညျ။
ကူညီကယျဆယျမှုမြားလုပျဆောငျနိုငျရနျ အမွနျဆုံး စီစဉျနကွေောငျး ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစား လှယျ ဦးမောငျကြျောဇံက ပွောသညျ။ ခမီခြောငျးကြေးရှာ၏ အနောကျတောငျဖကျ မီတာ ၇၀၀ ခနျ့ဝေးသညျ့နရောသို့ မွနျမာ့ တပျမတျောက ဝငျရောကျလာသောကွောငျ့ နှဈဖကျအပွနျအလှနျတိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး အအေကေ အောကျတိုဘာလ ၆ ရကျနကေ့ သတငျးထုတျပွနျထားသညျ။ သို့သျော တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ဘကျက ထုတျပွနျခွငျးမရှိသေး ပါ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/74291
ပူတာအိုခရိုငျ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျအတှကျ မဲရုံသုံး ပစ်စညျးမြားကို ရဟတျယာဉျနှငျ့ လား မြားဖွငျ့ ပို့ဆောငျမညျဖွဈသညျဟု ခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ မှ သိရသညျ။ ပူတာအိုခရိုငျတှငျ ပူတာအိုမွို့နယျ၊ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျ၊ နောငျမှနျးမွို့နယျ၊ ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျ နှငျ့ မခမျြးဘောမွို့နယျ တို့ ပါဝငျသညျ။ ကနျြသညျ့ ၄မွို့နယျတှငျ ကားလမျးမြားဖွငျ့ ပို့ဆောငျနိုငျသျော လညျး ခေါငျလနျးဖူးမွို့နယျတှငျ လမျးပနျးဆကျ သှယျရေးမကောငျးသောကွောငျ့ ရဟတျယာဉျနှငျ့လားမြားဖွငျ့သာ ပို့ဆောငျ ရနျ စီစဉျထားကွောငျး ခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ အရာရှိဒျေါအိအိဖွိုးကပွောသညျ။“လောလောဆယျတော့ မဲရုံအသုံး အဆောငျတှကေို ပူတာအိုမှာပဲထိနျးသိမျးထား သေးတယျ။ အဲပစ်စညျးတှကေို ပို့ဖို့အတှကျက အောကျတိုဘာလ ဒုတိယ အပတျလောကျမှရမှာ ရဟတျယာဉျနဲ့ပို့ဖို့ စီစဉျထား တယျ။ ရဟတျယာဉျနဲ့ပို့ဖို့ကို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို စာတငျထားပွီးဖွဈတယျ။ ဒုတိယအပတျမှာ ပို့နိုငျအောငျလုပျဖို့တော့ပွောထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဘကျကရာသီဥတု အခွေ အနကေလညျး ကွညျ့ရသေးတယျ။”ဟု ဟု ဆိုသညျ။
ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျတှငျမူ ကားလမျးမြားမရှိသညျ့အပွငျ ခေါငျလနျဖူးထိ ရဟတျယာဉျသှားရနျအဆငျမပွသေညျ့အတှကျ ရဟတျယာဉျမြားသညျ ဝူယနျကြေးရှာထိ ပို့ဆောငျမညျဖွဈပွီး ဝူယနျမှတဈဆငျ့ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျထိ လား မြားဖွငျ့ ပွနျလညျသယျဆောငျမညျဖွဈကွောငျးဆိုသညျ။ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျတှငျသုံးမညျ့ မဲရုံလကျမှတျသုံးပစ်စညျးပို့ဆောငျရနျ အတှကျ ငှကွေေး ကပျြ၂၆ သိနျးကြျောသုံးစှဲရနျ လြာထားပွီး အဆိုပါ မဲရုံသုံး ပစ်စညျးမြားတှငျ မဲလကျမှတျနှငျ့ မှငျအိုးမြား အခွားပစ်စညျးမြားအားကနျြနသေေးကာ ယငျး သုံးစှဲမညျ့ ငှကွေေး ၂၆ သိနျးတှငျ ပါဝငျခွငျးမရှိသေးကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွော သညျ။
ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျတှငျ မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသညျ့ မဲဆန်ဒရှငျဦးရေ ဒုတိယအကွိမျမဲစာရငျးကွညောရာတှငျ ၈၅၆၀ ရှိပွီး ပထမ အကွိမျမဲစာရငျး ထုတျပွနျရာတှငျ ၈၄၀၀ ကြျောရှိခဲ့သညျ။ မဲရုံပေါငျး ၃၆ ရုံရှိကွောငျး သိရသညျ။ လကျရှိခြိနျတှငျ မဲရုံအသုံး အဆောငျပစ်စညျးမြားအား သကျဆိုငျရာမွို့နယျအလိုကျ ပို့ဆောငျထားပွီးဖွဈကာ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျသာ ကနျြတော့ သညျ့ အတှကျ အောကျတိုဘာလအတှငျး တပျမတျောရဟတျယာဉျဖွငျ့ ပို့ဆောငျမညျဖွဈကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျရုံး(ခှဲ)မှ အရာရှိဦးထှနျးအောငျခိုငျ၏ ပွောဆိုခကျြအား ကခငျြပွညျနယျပွနျကွားရေးနှငျ့ ပွညျသူ့ ဆကျဆံရေးဌာနမှ သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/08/l2-2/
မဲဆန်ဒနယျပွငျပရောကျနတေဲ့ မဲဆန်ဒရှငျတှဟော ရောကျတဲ့အရပျမှာ မဲပေးနိုငျဖို့အတှကျ အောကျတိုဘာလ (၁၀)ရကျနေ့ နောကျဆုံးထားပွီး သကျဆိုငျရာ ရပျကြေးကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံးတှမှော လြှောကျထားရမှာဖွဈပါတယျ။ အနညျးဆုံး ရကျပေါငျး ၉၀ ထကျမနညျး မဲဆန်ဒနယျပွငျပရောကျနသေူတှဟော မိမိတို့ရဲ့ အမွဲတမျးနရေပျကို သှားရောကျပွီး မဲပေးလိုခွငျးမရှိပါက မိမိတို့ရောကျရှိနတေဲ့ မဲဆန်ဒနယျက ရှေးကောကျခံ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို မဲပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီလို မဲ ပေး နိုငျဖို့အတှကျ မဲဆန်ဒနယျပွငျပရောကျနသေူတှဟော စကျတငျဘာ ၁၇ ရကျနကေ့နေ အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျနေ့ နောကျ ဆုံးထားပွီး သကျဆိုငျရာ ရပျကြေး ကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံးတှမှော ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လြှောကျထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
“ ရကျပိုငျးကိုးဆယျထကျမနညျး နထေိုငျခဲ့မယျဆိုရငျ မဲပေးခှငျ့ရဖို့အတှကျ ပုံစံ (၃-က)နဲ့ လြှောကျထားလို့ရပါတယျ။ ဒီဟာ ကိုတော့ အောကျတိုဘာလ (၁၀)ရကျနေ့ နောကျဆုံးထားပွီးလြှောကျရမှာပါ”လို့ မျောလမွိုငျမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲဥက်ကဌ ဦးဌေးလှငျက ပွောပါတယျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကွောငျ့ ခရီးသှားကနျ့သတျမှုတှရှေိနတေဲ့ အတှကျ ရှေးကောကျပှဲနမှေ့ာ မဲဆန်ဒနယျပွငျပရောကျ မဲဆန်ဒရှငျတှဟော မိမိတို့ရဲ့ အမွဲတမျးနရေပျကို ပွနျပွီး မဲပေးဖို့ အခကျအခဲ နရှေိနတောပါ။ ရေးမွို့နယျအတှငျးမှာတော့ မဲဆန်ဒနယျပွငျပရောကျသူတှမြေားတဲ့အတှကျ သူတို့ မဲပေးခှငျ့ရရှိအောငျ ပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေ ဆောငျရှကျပေးနပေါတယျ။
“ရေးတောငျပိုငျးမှာက ရှပွေ့ောငျးလုပျသားတှေ တျောတျောမြားတယျ။လကျရှိဥပဒအေရ ရကျပေါငျးကိုးဆယျနထေိုငျရငျ မဲပေးခှငျ့ရှိတယျဆိုတဲ့ဥပဒအေတိုငျး မဲပေးနိုငျအောငျ ကွိုးစားပေးနတောတှရှေိတယျ”လို့ ရေးမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး မငျးအောငျထူးက ပွောပါတယျ။ ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လြှောကျထားသူတှရေဲ့ မဲစာရငျးကိုတော့ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပမီ တဈပတျအလိုမှာ သကျဆိုငျရာ ရပျ/ကြေးကျောမရှငျရုံးတှမှော ကပျထားကွညောပေးမှာဖွဈပွီးတော့ မဲဆန်ဒရှငျသကျသခေံ လကျမှတျတှေ ထုတျပေးသှားမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76100
ကခငျြပွညျနယျ၊ ဗနျးမျောခရိုငျရှိ စဈဘေးရှောငျစခနျးသုံးခုတှငျ မဲရုံဖှငျ့မညျဖွဈကွောငျး ဗနျးမျောခရိုငျရှေးကောကျပှဲ ကျောမ ရှငျရုံးမှ သိရသညျ။ လကျရှိတှငျ ဗနျးမျောခရိုငျအတှငျး မွို့နယျလေးမွို့နယျတှငျ စဈဘေးရှောငျစခနျးပေါငျး ၂ဝ ခုရှိပွီး မနျစီမွို့နယျရှိ စဈဘေးရှောငျစခနျးသုံးခုတှငျသာမဲရုံထားရှိမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။“မနျစီမွို့နယျတှငျးမှာ စဈရှောငျ စခနျးက သုံးခုရှိတယျ အဲစဈရှောငျစခနျးတှကေ ရပျ/ကြေး၊ ရပျကှကျမှာထားမယျ့ မဲရုံနဲ့ ဝေးတဲ့တှကျ မဲဆန်ဒရှငျတှမေဲ လာ ပေးဖို့ ခကျခဲဖွဈနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ မဲရုံသုံးရုံထားဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။ လကျရှိခြိနျထိတော့ တဈခွားမွို့နယျက ထားဖို့မ ရှိသေးပါဘူး။ ကျောမရှငျရဲ့ညှနျကွားခကျြအရ စဈရှောငျတှအေနနေဲ့ မိမိနထေိုငျတဲ့ ရကျကှကျနဲ့နီးတဲ့နရောမှာဘဲ မဲသှားပေးရ မှာဖွဈတယျ”ဗနျးမျောခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံးမှ အတှငျးရေးမှူး ဦးကြျောထှနျးကပွောသညျ။ မဲရုံထားရှိမညျ့ မံစီမွို့ မှ စဈရှောငျစခနျးသညျ လူဦးရအေားဖွငျ့ အိမျထောငျစုပေါငျး ၁၄၄၆ ရှိပွီး လူဦးရစောရငျးအားဖွငျ့ ၇၂၀၆ ရှိကာ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၄၉၇၅ ရှိကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။
“ကနြျောတို့ စခနျးမှာတော့ မဲရုံသီးသနျ့ထောငျပေးမယျလို့တော့ ပွောကွတယျ။ဒါပမေယျ့ မဲထညျ့ဖို့ကကနြျောတို့ စဈရှောငျ တှရေဲ့အရေးမဟုတျတော့ဘူး ၂၀၁၅ တုနျးက ကနြျောတို့ NLD ကိုမဲထညျ့ခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့နရေပျပွနျဖို့က ဘာမှ မထူးလာဘူး။ ဒါကွောငျ့ လာမယျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာလညျး ထညျ့ဖို့မသခြောသေးဘူး။ စခနျးမှာမဲရုံလာထားပေ မယျ့ စဈရှောငျတှမြေားစုက မဲထညျ့ဖို့စိတျမဝငျစားကွဘူး”ဟု ဗနျးမျောမွို့တှငျးရှိ ရောဘတျစဈရှောငျစခနျးမှ စခနျးတာဝနျခံ ဆရာအငျဒေါငျတနျဂှနျးက ပွောသညျ။ ယငျးရောဘတျစဈရှောစခနျးတှငျ အိမျထောငျစုအားဖွငျ့ ၅ဝဝ ကြျောနထေိုငျပွီး ကြေးရှာပေါငျးမြားဆုံး စုနထေိုငျရာ စခနျးတဈခုဖွဈကာ စခနျးတှငျမဲစာရငျးလာရောကျကပျထားသျောလညျး စဈရှောငျမြား အနဖွေငျ့ မဲစာရငျးကွညျ့သူလှနျနညျး ပါးကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။
ဗနျးမျောခရိုငျတှငျ ဖှငျ့လှဈထားသညျ့ စဈရှောငျစခနျးမြားမှာ ဗနျးမျောမွို့နယျတှငျ စဈရှောငျစခနျး ၆ ခု၊ မံစီမွို့နယျတှငျ သုံးခု၊ မိုးမောကျမွို့နယျတှငျ ကိုးခု၊ ရှကေူမွို့နယျတှငျ နှဈခုရှိပွီး လူဦးရအေားဖွငျ့ ၁၇၃၂၁ ဦးရှိကွောငျး သိရသညျ။ “ကမြတို့ ကတြော့ ခုခြိနျထိ မဲရုံကိစ်စတှေ မဲထညျ့မယျ့ကိစ်စဘာမှမသိရသေးဘူး။ ရပျကြေးကလညျး စာရငျးတော့ လာကောကျ သှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ မဲစာရငျးလာကွညျ့ဖို့ သသေခြောခြာပွောတာတောငျမရှိဘူးဆိုတော့ စဈရှောငျတှလေညျး မဲစာရငျး ကွညျ့ဖို့ မပွောထားဘူး”ဟု ထှယျဆနျစဈရှောငျစခနျးမှ တာဝနျခံဒျေါဘောကျခေါနျက ပွောသညျ။ https://burmese. kaဘchinnews.com/2020/10/07/%e1%80%97%e1%80%94%e1%80%b a%e1%80%b8%e1
လကျရှိ ကိုဗဈ ၁၉ ကပျရောဂါပွနျ့နှံ့နသေညျ့ကာလအတှငျး မှနျလူငယျမြားအကွား မူးယဈဆေးပွားမြားထကျ ဒသေတှငျး ထှကျရှိသော ဘိနျးစာရှကျကို ပို၍သုံးစှဲလာကွောငျး ကြေးရှာအကွီးအကဲမြားက ပွောသညျ။ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးသှား လာမှု အခကျအခဲနှငျ့ အလုပျအကိုငျရှားပါးမှုကွောငျ့ မူးယဈဆေးပွား ဝယျယူသညျ့စရိတျ မရှိသညျ့အတှကျ ထိုငျးဘာသာဖွငျ့ “ဗိုငျခတှနျ” ဟုချေါသော ဘိနျးစာရှကျကို အရညျပွုတျသောကျ၍ သုံးစှဲခွငျးဖွဈကွောငျး မုဒုံမွို့နယျ၊ နိုငျလှုံကြေးရှာ အုပျခြုပျ ရေးမှူး ＂နိုငျစိုးနှယျ＂က ဆိုသညျ။“အလုပျအကိုငျရှားပါးလာပွီး ဝငျငှမေရှိဖွဈလာတယျ ဆေးပွားဝယျဖို့ မတတျနိုငျကွဘူး၊ စာသငျကြောငျးတှလေညျးပိတျထားတယျ ကြောငျးသားတှလေညျး အလုပျမရှိသလို အားအားယားယား ဖွဈနကွေတယျ၊ လူ စုပွီး ဘိနျးစာရှကျကိုပွုတျပွီး အခြိုရညျမြိုးစုံနဲ့ဘာတှပေါမှနျးမသိပါဘူး၊အဲဒီလိုသုံးစှဲနကွေတယျ”ဟု နိုငျစိုးနှယျကပွောသညျ။
“မူးယဈဆေးဝါး မသုံးကွဖို့ ရှာလှညျ့ပွီး လိုကျသတိပေးတာ ရှိတယျ။ အသကျငယျငယျလေးတှေ ဘိနျးစာရှကျကို သောကျ သုံးတာ အရမျးမြားလာတယျ၊ ဆေးပွားသုံးတာလညျး ရှိတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဘိနျးစာရှကျအရညျ သုံးစှဲတာက ပိုမြားတယျ” ဟု ပွောသညျ။ အလားတူ ကြေးရှာမြားအတှငျး မူးယဈဆေးဝါး လကျလီဖွနျ့ဖွူးနသေူမြားကို သကျဆိုငျရာသို့ အကွောငျးကွားခဲ့ သျောလညျး ဖမျးဆီးမှုမရှိဟု ရေးမွို့နယျ ကော့ဒှတျကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး နိုငျမောငျက ဆိုသညျ။ “ကနြျောတို့က ဌာန ဆိုငျရာ အစညျးအဝေးတှမှော တငျပွတယျ၊ ဖမျးရမယျ့တာဝနျက သူတို့တာဝနျပါ ဒါပမေယျ့ ဖမျးဆီးမှုမရှိဘူး၊ ဘိနျးစာရှကျ လညျး ပိုပိုမြားလာတယျ” ဟု ပွောသညျ။
သံဖွူဇရပျမွို့နယျ၊ ကြုံကဒတျ ကြေးရှာ အနီး၌ အောကျတိုဘာလ ၅ ရကျနကေ့ မောငျသူရလှငျ (၂၀) နှဈနှငျ့ မောငျထကျလငျးအောငျ(ခ)ဖသေနျး (၁၉)နှဈတို့ထံမှ ဘိနျးစာရှကျအလေး ခြိနျ (၅၀၀)ဂရမျခနျ့ ရှာဖှတှေရှေိ့ဖမျးဆီးခဲ့ ကွောငျး၊ စခနျးကွီးကြေးရှာ အဝငျလမျးတှငျ အောကျတိုဘာလ ၄ ရကျနကေ့ ဂြော့ဓမငျးဆိပျ၊ ထငျးရှူးကြေးရှာနထေိုငျသူ မောငျထူး(၃၈)နှဈထံမှ ပနျးရောငျစိတျကွှရူးသှပျ ဆေးပွား(၁၁)ပွားနှငျ့ ဘိနျးစာရှကျ(၂၀)ကပျြသားခနျ့ ဖမျးဆီးရမိကွောငျး သံဖွူဇရပျမွို့မရဲစခနျးမှ သိရသညျ။ http://burmese.monnew s.org/2020/10/07/%e1%80%80%e1%80%ad% e1%80%af%e1%80%97%e1%
၃၀။ မွဝတီမွို့ရှိ ကိုဗဈလူနာ(၃) ဦး ရောဂါပြောကျကငျး၍ ဆေးရုံဆငျးခှငျ့ရသျောလညျး အမှုဆကျရငျဆိုငျရမညျ
ကရငျပွညျနယျ မွဝတီခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ ကုသမှုခံယူနသေော ရနျကုနျပွနျ Covid-19 အတညျပွုလူနာ (၃)ဦးမှာ ရောဂါပြောကျကငျးကာ ယခုရကျပိုငျးအတှငျး ဆေးရုံမှဆငျးခှငျ့ရသျောလညျး ၎င်းငျးတို့အား မွဝတီ မွို့မရဲ စခနျးတှငျ (ပ)၅၀၉/ ၂၀၂၀ သဘာဝဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာစီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ ပုဒျမ ၂၅/၃၀(က) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထား၍ အမှုဆကျရငျဆိုငျရဦးမညျဖွဈ ကွောငျး သိရသညျ။
မွဝတီခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာ ၄ ဦးရှိသညျ့အနကျ ရနျကုနျမွို့တှငျ ဆေးဝါးကုသ၍ ပွနျလာသညျ့ မွဝတီဆေးရုံတှငျ အသှားအလာကနျ့သတျထားသူ အသကျ ၃၇ နှဈအရှယျ အမြိုးသားမှာ ကငျဆာ ရောဂါအခံဖွငျ့ ကှယျလှနျ သှားပွီဖွဈပွီး ကနျြလူနာ ၃ ဦးကလညျး ရောဂါပိုးကငျးစငျသှားပွီဖွဈ၍ ယခုရကျပိုငျးအတှငျး ဆေးရုံမှဆငျးခှငျ့ရကွမညျဟု မွဝတီခရိုငျ ဆေးရုံအုပျ ဒေါကျတာနန်ဒဝငျးက ပွောသညျ။“ဒီနေ့ အောကျတိုဘာလ ၇ ရကျနမှေ့ာ လူနာအမှတျ case.9132 မွဝတီမွို့ အမှတျ(၄)ရပျကှကျ ဇနကလမျးက အသကျ(၂၁)နှဈအရှယျ အမြိုးသားတဈဦးဆေးရုံက ဆငျးခှငျ့ရပွီးဖွဈသလို မနကျဖွနျ (၈)ရကျနမှေ့ာလညျး လူနာအမှတျ case 10473 သင်ျကနျးညီနောငျ မွို့သဈ ၇ လမျးက အသကျ(၄၇)နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးတဈဦးကို လညျ ရောဂါပိုးကငျးစငျပွီးဖွဈ၍ ဆေးရုံက ဆငျးခှငျ့ ပွုသှားမယျ”ဟု ဒေါကျတာနန်ဒဝငျးက အတညျပွု ပွောသညျ။
အဆိုပါ ကိုဗဈ အတညျပွုလူနာဖွဈခဲ့သူ ၃ ဦးမှာ ထုတျပွနျထားသညျ့ စညျးကမျးခကျြမြားကို မလိုကျနာသညျ့အတှကျ တညျဆဲ ဥပဒနှေငျ့အညီ အရေးယူနိုငျရနျ ဆောငျရှကျနသေညျဟု မွဝတီခရိုငျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးတဇော အောငျက ပွောဆို ခဲ့သညျ။ http://kicnews.org/2020/ 10/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%81%80%e1%80%90%e1%80%ae
ဆိုးရှားသညျ့ ရကွေီးရလြေံမှုကွောငျ့ ရဘေေးဒဏျကွုံတှရေ့သော လီဒိုလမျးမပျေါ ရှဒူးဇှပျကြေးရှာတှငျ ခြောငျးရှငျးလငျးရေး လုပျငနျးဆောငျရှကျမညျဖွဈသျောလညျး ဒသေခံမြား၏ သဘောတူညီမှုနှငျ့ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုရှိရနျ လိုအပျသညျဟု ဒသေခံမြား ပွောသညျ။ ရှဒူးဇှပျ (Ja Htu Zup) ကြေးရှာရှိ မိုးကောငျးခြောငျးနှငျ့ ရှဒူးခ ခြောငျးဆုံ ရကွေောငျးတဈလြောကျ ရှတေူးဖျောမှုကွောငျ့ ခြောငျးအလယျတှငျ မွစောပုံအဖွဈ ကနျြရှိနမှေုကို ရှငျးလငျးရနျအတှကျ ကခငျြပွညျနယျအစိုးရ၏ ခှငျ့ပွုမိနျ့ဖွငျ့ ကြောကျမကျြကုမ်ပဏီတဈခုက ယခုလမှ စတငျရှငျးလငျးတော့မညျဖွဈသညျ။
သို့သျော ခြောငျးရှငျးလငျးရေးလုပျဆောငျမညျ့ ကုမ်ပဏီက ခြောငျးရှငျးလငျးရေး လုပျငနျးတဈခုတညျးသာမက ရှတေူးဖျောရေး ပါ လုပျကိုငျနိုငျသဖွငျ့ ပှငျးလငျးမွငျသာမှုရှိစခေငျြသညျဟု အမညျမဖျောလိုသူ ဒသေခံတဈဦးက ပွောသညျ။“သူတို့အနနေဲ့ ခြောငျးရှငျးလငျးရေးဖို့ဝငျလာတာက ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုမရှိတော့ ဒသေခံ တှအေတှကျ ဆိုးကြိုး တှဖွေဈလာနိုငျတယျ။ ဒသေခံတှကေမသိကွဘူးလေ။ တဈခြို့က ခြောငျးရှငျးလငျးရေးအတှကျ ဝငျလာမှနျးတောငျသိမှာ မဟုတျဘူး။ အခုခြောငျး ရှငျးလငျးရေးလုပျမယျ့ ကမျးစပျအနီး တဝိုကျမှာက ဒသေခံတှစေားဝတျနရေေးအတှကျ အားထား လုပျကိုငျနတေဲ့ ရာသီ သီးနှံစိုကျခငျးတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ အဲ့ဒါကို သူတို့က ဘယျလိုပွနျလုပျပေးဖို့ ဘယျသူက တာဝနျယူ ပေးမှာလဲ”ဟု ပွောဆိုသညျ။ မိုးကောငျးခြောငျးနှငျ့ ရှဒူးခခြောငျး ၂ ခု ရှငျးလငျးရနျအတှကျ ထှနျးရတနာသိနျး အမညျရှိ ကြောကျမကျြကုမ်ပဏီကို ဘကျဟိုး (၂၂)စီး၊ ဝိလူဒါ (၂)စီးနှငျ့ မွသေယျယာဉျ အစီး ၄ဝ စသော စကျယန်တရားကွီးမြားဖွငျ့ ၇လအကွာ ရှငျးလငျးရေးလုပျဆောငျရနျ ခှငျ့ပွုထားကွောငျး ပွညျနယျအစိုးရ သယံဇာတရုံးမှ သိရသညျ။
ရှဒူးဇှပျဒသေခံ ရပျမိရပျဖမြား၏ တငျပွတောငျးဆိုခကျြအပျေါ ကှငျးဆငျးစဈဆေးပွီးနောကျ လုပျထုံးလုပျနညျးအရ ခှငျ့ပွုမိနျ့ခြ ပေးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု သယံဇာတနှငျ့သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဦးဒရှီလဆိုငျးက KNG သတငျးဌာနကို ဖွကွေားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ “ခြောငျးရှငျးလငျးရေးလုပျဖို့ကိုဒသေက ရပျမိရပျဖမြားနဲ့ ခြောငျးရှငျးလငျးရေးလုပျမယျ့ ကုမ်ပဏီက ညိနှိုငျးအဆငျပွမှေု ရှိတဲ့အတှကျ ပွညျနယျအစိုးရကိုတငျပွခဲ့တယျ။ ပွညျနယျအစိုးရကလညျး ဒါကို ဦးဆောငျပွီး လုပျပေးရ မှာဖွဈတဲ့အတှကျ ကုမ်ပဏီဘကျကလညျး ကြေးရှာအတှကျ ဆောငျရှကျပေးလိုတဲ့အကွောငျး တငျပွလာတဲ့အတှကျ ယုံကွညျ စှာ ခှငျ့ပွုပေးခဲ့တာဖွဈတယျ”ဟု ပွောဆိုသညျ။
ရှဒူးဇှပျကြေးရှာတှငျ နိုငျငံတျောအခှနျလုံးဝမရရှိဘဲ တရားမဝငျ ရှတေူး ဖျောရေးလုပျငနျး လုပျကိုငျနသေညျ့ လုပျငနျးရှငျအမြား ရှိနသေောကွောငျ့ ခြောငျးရှငျးလငျးရေးလုပျငနျး ထိရောကျမှုရှိ မရှိကို ရာနှုနျးပွညျ့ အာမမခံနိုငျသေးကွောငျး သယံဇာတ ဝနျကွီး ဦးဒရှီလဆိုငျးက ဆကျလကျပွောဆိုသညျ။ ယခုနှဈအတှငျး ရှဒူးဇှပျကြေးရှာတှငျ ရကွေီးရလြေံမှု ၃ ကွိမျ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး ကြေးရှာအတှငျး ရပျကှကျ ၄ ခုစလုံးရှိ နအေိမျမြားသညျ ၇ ပခေနျ့ထိ နှဈမွုပျသှားကာ အိမျခွေ ၃၀ ခနျ့ကလညျး မြျောပါသှားခဲ့ သညျဟု ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။ https://burmese .kachinnews.com/2020/10/07/jahtu-zup/
ရခိုငျပွညျနယျ၊ စဈတှမွေို့ ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျကူးစကျ ခံရမှုဖွငျ့ တကျရောကျကုသမှုခံယူနသေူ ပွညျနယျ ကြေးလကျလမျးဖှံ့ဖွိုးရေးဦးစီးဌာမှ အသကျ ၄၈ နှဈအရှယျ ညှနျကွားရေးမှူး ၁ ဦးမှာ အောကျတိုဘာလ ၇ ရကျနေ့ နံနကျ ၉ နာရီ ခနျ့တှငျ သဆေုံးသှားခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ အဆိုပါသဆေုံးသူမှာ အသကျရှုကပျြသဖွငျ့ အရေးပျေါအခနျးတှငျ အောကျဆီဂငျြပေး၍ ကုသမှုခံယူရငျး ယနေ့ မနကျပိုငျး တှငျ သဆေုံးသှားခွငျးဖွဈကွောငျး စဈတှေ ဆေးရုံအုပျကွီး ဒေါကျတာ ဇျောလှငျက ပွောသညျ။ ဒေါကျတာဇျောလှငျက “ဒီနေ့ တယောကျသဆေုံးသှားတယျဆိုတာ ဟုတျပါတယျ။ မနကျ ၉ နာရီလောကျမှာ ဆုံးသှားတာ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
လကျရှိအခြိနျတှငျ စဈတှပွေညျသူဆေးရုံကွီးတှငျ ကိုဗဈပိုးတှရှေိသူ လူပေါငျး ၉၀၀ တကျရောကျကုသမှုခံယူခဲ့ရာ ရောဂါ ပြောကျကငျးသညျ့အတှကျ ဆေးရုံဆငျးခှငျ့ ရရှိသူ ၈၅၀ ကြျော ရှိခဲ့ရာ ကနျြလူပေါငျး ၉၀ ကြျောမှာ ကုသမှုခံယူနရေဆဲ ဖွဈ ကွောငျးလညျး စဈတှဆေေးရုံမှ တာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျပိုးကူးစကျခံသူမြားထဲတှငျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးစီးဌာမှ ဝနျထမျးမြား၊ ဘဏျဝနျထမျးမြား၊ နိုငျငံတကာ အနျဂြီအို ဝနျထမျးမြားပါ ပါဝငျပွီး အမြားဆုံး ရောဂါ ကူးစကျခံရသညျ့ မွို့နယျမြားတှငျ စဈတှမွေို့ နယျနှငျ့ ကြောကျဖွူ မွို့နယျတို့ ဖွဈသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ စညျပငျဝနျကွီး ဦးဝငျးမွငျ့ကတော့ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ မလိုအပျပဲ အပွငျ မထှကျအောငျ စညျးကမျးမြား ထုတျပွနျပွီး Mask မတတျသညျ့ ပွညျသူမြားနှငျ့ စညျကမျးမလိုကျနာသညျ့ ပွညျသူမြား အပျေါ အသိပညာပေးခွငျး၊ ဒဏျရိုကျခွငျး၊ ဝနျခံဂတိမြားထိုးကာ ပွနျလှတျပေးခွငျးမြား ပွုလုပျနိုငျခဲ့သညျ့အတှကျ ကိုဗဈရောဂါကူး စကျမှု ထိနျးခြုပျနိုငျသညျ့ အခွအေနရှေိနပွေီဖွဈကွောငျး ပွောဆိုထားသညျ။
သို့သျောလညျး ကိုဗဈရောဂါကူးစကျမှုမြား ဆကျလကျရှိနသေေးသညျ့အတှကျ လုံးဝ စိတျခရြသညျ့ အခွအေနေ မရှိသေးဘဲ လကျ ဆကျစောငျ့ကွညျ့ရမညျ့ အခွအေန ရှိနသေေးကွောငျး ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစုမြား အစညျးအရုံးမှ အတှငျးရေးမှူး ဦးဇျောဇျောထှနျးက ပွောသညျ။ ဦးဇျောဇျောထှနျး က “ကိုဗဈကို ထိနျးခြုပျနိုငျတယျဆိုတာတော့ အမှနျမှာ မဟုတျဘူး။ ကူးစကျမှုတှကေ ရှိနသေေးတော့ စိုးရိမျရတဲ့ အခွအေနေ ရှိသေးတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ပွောသညျ။ https://burma.ir rawaddy.com/news/2020/10/07
ရခိုငျပွညျနယျ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ပွငျရှညျကြေးရှာက ရိုဟငျဂြာကလေးငယျနှဈဦး သဆေုံးသှားတဲ့ ဖွဈစဉျနဲ့ ပတျသကျ လို့ ဒသေခံတှေ ပွောကွားခကျြနဲ့ တပျမတျော သတငျးထုတျပွနျခကျြ ကှဲလှဲနပေါတယျ။ ကလေးတှဟော တပျက ချေါသှားပွီ နောကျ သဆေုံးတာလို့ ဒသေခံတှကေပွောပမေယျ့ တပျကတော့ ဒါဟာစှပျစှဲခကျြသကျသကျသာ ဖွဈတယျလို့ပွောပါတယျ။
ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ပွငျရှညျရှာအပွငျမှာ အောကျတိုဘာလ ၅ ရကျနကေ့ နှားကြောငျးနကွေတဲ့ ရိုဟငျဂြာကလေးတှနေဲ့ လူကွီး စုစုပေါငျး ၁၅ ယောကျကို တပျမတျောစဈကွောငျးတဈခုက ချေါသှားရာကနေ ကလေးနှဈယောကျသဆေုံးပွီး လူကွီး တဈယောကျ ဒဏျရာရခဲ့တယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါ တယျ။ အသကျ ၁၀ နှဈအရှယျ အရသူရာ နဲ့ အသကျ ၁၁ နှဈ အရှယျ အနဝါဟူဆမျ ဆိုတဲ့ ကလေးနှဈ ယောကျဟာ တပျမတျောနဲ့ AA နှဈဖကျတိုကျပှဲကွားမှာ သဆေုံးခဲ့ပွီး အသကျ ၃၀ အရှယျ ဆရေနိုလျ အာမိနျ က ဒဏျရာရခဲ့တာပါ။ RFA က အဆကျအသှယျရတဲ့ ပွငျရှညျရှာသား ၄ ယောကျနဲ့ ပျေါတာဆှဲ ချေါခံထားရာကနေ ပွနျလှတျလာတဲ့ ရှာသားတဈယောကျက၊ သူတို့ကို တပျမတျောစဈကွောငျး က လမျးပွ အဖွဈချေါသှား တာလို့ အခိုငျအမာပွောပါတယျ။
တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျး ကတော့ တပျမတျောက ပျေါတာဆှဲသှားတာ မဟုတျဘဲ ပဈခတျသံကွားလို့ အဲဒီရှာဘကျ သှားရောကျစဈဆေးရာမှာ AA အဖှဲ့ ပဈခတျထားလို့ နှားကြောငျးနတေဲ့ ကလေး နှဈဦး သဆေုံးနတော တှရေ့ပွီး၊ ဒဏျရာရရှိထားသူ တဈယောကျကို တပျမတျောက ကူညီပေးခဲ့တာလို့ အောကျတိုဘာ ၆ ရကျ နကေ့ RFA ကိုပွော ထားသလို အငျတာနကျစာမကျြနှာတှကေနလေညျး သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။ လမျးပွအဖွဈ ဖမျးဆီးချေါဆောငျခံရသူတှထေဲက တဈဦးကတော့ RFA ကို အခုလိုပွောပါတယျ။ ” နှားကြောငျးနတေဲ့နရောမှာ အပဈခံရ တာ မဟုတျပါဘူး၊ စဈတပျကချေါသှားပွီး လမျးမှာ အပဈခံရတာပါ၊ တပျမတျောကပွောတာ မဟုတျပါဘူး” သူတို့ ၁၅ ယောကျ ကို ပစ်စညျးတှေ မသယျခိုငျးဘဲ တယောကျလကျ တယောကျကိုငျပွီး ရှကေ့နေ သှားခိုငျးနရေငျးကနေ နာရီဝကျ လောကျအကွာမှာ တိုကျပှဲဖွဈတာလို့၊ ထှကျပွေးလှတျမွောကျလာတဲ့ ပွငျရှညျရှာသားက ပွောပါတယျ။
တပျမတျောက ချေါဆောငျခဲ့တဲ့သူတှထေဲမှာ အသကျ ၁၈ နှဈအောကျ ၇ ယောကျပါပွီး အသကျ ၁၈ နှဈအထကျ ၈ ယောကျ ပါဝငျတယျလို့ ဒသေခံတှရေဲ့ ပွောပွခကျြအရ သိရပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/Army-denies-for-Rohingya-children-killed-in-Buthidaung-10082020190358.html